သရော်စာ | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label သရော်စာ. Show all posts
ပြောရ ရင်တော့ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ် လှန်ထောင်း တာပဲ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ နေရင်း ထိုင်ရင်း ရန်သူ မွေးတာလို့ ဆိုချင်လည်း ဆိုဗျ။ အခု တစ်လော စာပေ အကြောင်း ရေးတဲ့ ဆောင်းပါး တွေမှာ အလွဲ အနည်းငယ် ပါနေတာ သတိထား မိတယ်။
ဆောင်းပါးရေးတဲ့ စာ ရေးသူတချို့က ဘစီရဲ့ အသိတွေ ဖြစ်နေတော့ ပထမ နှာစေးနေဦး မယ် စဉ်းစားတယ်။ ဒါပေတဲ့ အမှားတွေက မမြင်ချင်မှ တွေ့လျက် သား ဆိုတာလို ဖြစ်နေတော့ ကလိ ချင်စိတ်က ရွစိရွစိ ဖြစ်လာသဗျာ။
ပိုပြီး ဆိုးတာက စာဖတ်ဖို့တို့၊ စာအုပ် အကြောင်းတို့ ရေးတဲ့ ဆောင်းပါး တွေမှာ ကတိမ်းကပါး အမှတ် မှားလို့ ပမာဒလေခ အချက် ကလေးတွေတွေ့နေရတာ က တယ်ပြီး မသင့်တော်လှဘူး။ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရော ဆိုသဟာလို အကြောင်းအရာ ဦးတည်ချက်က ကောင်းပါလျက် ကယ်နဲ့ အနှာလို တစ်လုံး တစ်ပါဒ အလွဲ ပါတာက ရုပ်ဆိုးလှလို့ နောင်မှ ဆင်ခြင် စရာဖြစ်စေကြောင်း စေတနာကောင်းနဲ့ ရေးတယ်လို့ သာ မှတ်ကြပါခင်ဗျ။
ဘစီတို့ကကိုယ်ဖတ်တဲ့စာမှာ စင်းလုံးချော စေချင်တာပဲ။ ကိုယ်တွေ ပင်တိုင်ရေးနေတဲ့ သတင်းစာမှာ အမှားကင်းစေချင်တာပဲ။ အများသူငါလှောင်ပြောင်စရာ မဖြစ်စေချင် ဘူး။ ကိုယ်နဲ့ စာရေးဖော်တွေကို ထိရင် မချိအောင် နာချင်တယ်။ အခု ဗြိတိသျှကိုကိုမောင်တို့ ၆၆ (ဃ) ငြိသဟဲ့ ဆိုတော့လည်းကြည့်။ ဘစီတို့မှာ မချိအောင် နာခဲ့ကြ။ နာလွန်လွန်းလို့ ကျီးကန်းတွေရယ်လို့ ဘွဲ့ထူးပေးတာ ခံရပြီးရောလားခင်ဗျ။
ပူပူနွေးနွေး မနေ့က (ဇွန်လ၁၂ ) ရက်ထုတ် ဆဲဗင်းဒေးသတင်း စာမှာ ဆောင်းပါးရှင် မောင်ရင် ကောင်း (ဆေး-၂) ရေးတဲ့ ‘လာ သူငယ်ချင်းရေ စာဖတ်ကြပါစို့ လေ’ ဆောင်းပါးဖတ်ရသဗျ။ ဆောင်းပါးရှင်ရဲ့ စေတနာနဲ့ ရည် ရွယ်ရင်းက အပြစ်ပြောစရာမရှိ ဘူး။ စာဖတ်ကြဖို့ နှိုးဆော်တာပဲ ဗျာ။ ကောင်းပါလေ့။ စာဖတ်မှ လူတစ်ဦးချင်းဘဝ တိုးတက်လာ မှာဖြစ်သလို လူတစ်ဦးချင်း အသိ ဉာဏ်ရှိလာတဲ့အခါ နိုင်ငံလည်း ပိုပြီးကောင်းလာမှာပေါ့။ ဆောင်း ပါးရှင်က တစ်ခါက ကျုပ်တို့ရွှေ ပြည်ကြီး တစ်နံတစ်လျားမှာ အ လွန်မှ အားကောင်းခဲ့တဲ့ စာအုပ် အငှားဆိုင်လေးတွေ ပျောက် ကွယ်သွားတာကို ဝမ်းနည်းစကား ဆိုထားတယ်။ အခုဆို အနှီ အငှား ဆိုင်လေးများဟာ ကွယ်လု၊ ပျောက်လုနီးနေပြီပေါ့။ အသက် ငင်နေတာ ဖုတ်လှိုက်ဟောဟဲ လိုက်နေပြီဆိုရမယ်။ ကျန်ကောင်းကျန်ရာဆိုရမယ့် စာအုပ်အငှား ဆိုင်လေးများဟာလည်း စီးပွား မဖြစ်တော့ဘူး။ စာငှားသူလည်း အလွန်မှာ နည်းနေပြီလေ။
နည်းမှာပေါ့။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် တွေ သုံးနေကြတာကိုးခင်ဗျ။ လူ တွေ စာသိပ်မဖတ်ကြတော့ဘူး။ ဒါကို ဆောင်းပါးရှင်က မချိတင် ကဲနဲ့ ရေးလိုက်တာ။ နည်းပညာ လည်း သုံးကြ၊ စာလည်းဖတ်ကြ ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမှာကလား။ ဆောင်းပါးရှင်က သူရို့ငယ်ငယ်က စာ ဖတ်ပုံကိုလည်း ရေးပြတယ်။ သူ ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်း ရေးပြတယ်။ ဘယ်လိုစာအုပ်တွေ ဘယ်လိုကောင်းတယ်ဆိုတာကို လည်း ခပ်ပါးပါး ကြားညှပ်ဖော်ပြ သွားတယ်။ စာအုပ်စာပေကျေးဇူး နဲ့ လူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်သွားတဲ့ ရွှေ ပြည်ကြီးရဲ့ ဂုဏ်ပြောင်တဲ့ ရာ ဇဝင်ထဲက ဝန်ဇင်းဘိုးရာဇာ ဘွဲ့ အမည်သညာ နောင်အခါ ရသွား တဲ့ စာတိုငညိုကိုလည်း ကိုးကား တယ်။ ကမ္ဘာ့လူထင်ရှားတွေထဲက ဆိုရင် အမေရိကန်သမ္မတ အေ ဗရာဟင်လင်ကွန်းတို့၊ စာရေး ဆရာ ဂျက်လန်ဒန်တို့ကို စံနမူနာ ထုတ်ပြတယ်။
အားလုံးကောင်းပါတယ်ခင် ဗျာ။ တကယ်ပြောတာပါ။ ပြော စရာက ဂျက်လန်ဒန်ကို ညွှန်းတဲ့ နေရာမယ် ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ ဖော် ပြထားတဲ့ ဂျက်လန်ဒန် (ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန် အရိုင်း ခေါ်သံဝတ္ထု မူလစာရေးဆရာ)ဆို တဲ့အသုံးမှာ ဆောင်းပါးရှင် ဆရာ မောင်ရင်ကောင်း (ဆေး-၂) က ပမာဒလေခ အမှတ်မှားသွားပုံရ သဗျ။ မြန်မာစာအုပ်လောကမှာ ဂျက်လန်ဒန်ရဲ့ မူရင်းဝတ္ထုအမည် The Call Of The Wild ကို ‘အရိုင်း ခေါ်သံ’ဆိုပြီး ဘာသာပြန်ခဲ့သူက ဆရာဂုဏ်ဝင်းပါခင်ဗျ။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ ရှုမဝက ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ သန်းစာပေက ဒုတိယအကြိမ်နဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ရာပြည့်စာအုပ်တိုက်ကနေ တတိ ယအကြိမ် စုစုပေါင်း သုံးကြိမ်တိ တိ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဖြစ် ပါတယ်ခင်ဗျ။ မူရင်း ဝတ္ထုက လည်း ဂျက်လန်ဒန်ရဲ့ နာမည်ကြီး လက်ရာပါ။ (ဂုဏ်ဝင်းအပြင် တခြားဘယ်သူတွေ ဘာသာပြန် သေးလဲတော့ မသိပါ)
အနှီဝတ္ထုကို ဆရာမြသန်း တင့် ဘာသာမပြန်ခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ အခုလို ပြောတဲ့အတွက် ဘစီကို စိတ်မငြိုငြင်လောက်ဘူးလို့ ထင် ပါတယ်။ ဆရာ မောင်ရင်ကောင်း ရဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးသကာ လ စာဖတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတဲ့ လူငယ်လေးများ စာအုပ်ဆိုင်သွား တဲ့အခါ ဆရာမြသန်းတင့် ဘာ သာပြန်တဲ့ အရိုင်းခေါ်သံစာအုပ်ရှိ လားမေးရင် အခက်တွေ့မှာ စိုးရ ပါလို့ ကြားဝင်ကာ ငထွားခါးနာခံ ပြီး နတ်လမ်းညွှန်လုပ်ရခြင်းပါခင် ဗျ။
ပြောလက်စ မဆုံးသေးခင် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့ထုတ် ဆဲဗင်းဒေး သတင်းစာမှာပဲ ပါခဲ့တဲ့ ဆောင်း ပါးရှင် မောင်ဥယျာဉ်ရဲ့ ‘ဘာသာ ပြန်စာပေ ဖြောင့်တန်းပါစေ’ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာပါတဲ့ အချက်အ လက်တချို့ လွဲနေတာကိုလည်း တစ်ပါတည်း ဖြည့်စွက်ခဲ့ပေးပါရ စေခင်ဗျ။ မောင်ဥယျာဉ်ဆိုသူက တော့ မန္တလေးရွှေမြို့တော်မှာ အ ခြေစိုက်တဲ့ စာရေးသူတစ်ဦးဖြစ် ပြီး ဘစီရဲ့ ပြောမနာဆိုမနာ မိတ် ရင်းဆွေချာကြီးလည်းဖြစ်တော့ သူများတွေလို အားနာစရာမရှိဘူး ပေါ့လေ။ သို့ကလို ကျုပ်ချစ်ဆွေ ကြီးလည်း မသိဖူး၊ မလေ့လာဖူး တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ စာကို တက်သုတ် ရိုက်ရေးတဲ့အတွက် အချက်လက် တချို့ လွဲနေတာတွေပါလာသဗျာ။
အနှီ ‘ဘာသာပြန်စာပေ ဖြောင့်တန်းပါစေ’ဆောင်းပါးမှာ စာရေးသူ မောင်ဥယျာဉ်က ဘာ သာပြန်စာပေတွေရဲ့ လာခဲ့ရာ အစကို ပြန်လည်ခြေရာကောက် ရင်းနဲ့ နဂါးနီစာအုပ်တွေကိုလည်း ဖျတ်ခနဲ ရေးပြသွားတယ်ခင်ဗျ။ သို့ကလို ရေးပြသွားတဲ့အထဲက တစ်နေရာအရောက်မှာ ဘစီကို မျက်မှောင်ကုပ်စေတာကတော့ သခင်စိုးရဲ့ ‘လူမွဲတို့ရဲ့ ထွက်ရပ် လမ်း’တဲ့။ အမှန်တော့ အဲဒီစာ အုပ်က မောင်နု (သခင်နု၊ နောင် မှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနု)ရဲ့ စာအုပ် မဟုတ်ဘူးလား။ လူမွဲတို့၏ ထွက် ရပ်လမ်း (လူမွဲတို့ရဲ့ ထွက်ရပ် လမ်းမဟုတ်) ခင်ဗျ။ မူရင်းက A Shot History Of The Russian Revolution ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ဆီ လျော်သလို ဘာသာပြန်ထားတာ တဲ့ခင်ဗျ။ ပထမတွဲနဲ့ ဒုတိယတွဲ နှစ်တွဲခွဲပြီး ၁၉၃၈ ခုနှစ်မှာ နဂါးနီ က ထုတ်ဝေခဲ့တာပါခင်ဗျ။
ဆောင်းပါးရှင် မောင်ဥယျာဉ် က ဘာသာပြန်စာပေတွေနဲ့ပတ် သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန် စာပေအသင်း (နောင်မှာ စာပေ ဗိမာန်)ရဲ့ အားထုတ်မှုကိုလည်း တခုတ်တရ ထည့်သွင်းပြီးရေးခဲ့ပါ တယ်။ အနှီ ဘာသာပြန်စာပေအ သင်းရဲ့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေ ကလည်း နည်းနည်းနောနောမှတ် လို့။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းဆိုတာမျိုး ကြီးကို ထုပ်ထုပ်ပိုက်ပိုက် ထုတ် ဝေနိုင်ခဲ့တာတစ်ခုနဲ့တင် သူ့ကျေး ဇူးတရားက ကြီးလှပြီကိုး။ သို့က လို အစဉ်အလာ ထွန်းပြောင်တဲ့ ဘာသာပြန်စာပေအသင်းကြီးက ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်တွေပြောဖို့ဆို တာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တည်းမှာ ရေးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ ကျုပ်တို့ မောင်ဥယျာဉ်က ဥပမာတစ်ခုပဲ အခုလို ထုတ်ဖော်ရေးသားသဗျာ။ ‘... အခုထိတိုင် လက်စွဲအသုံးပြု နေရတဲ့ မြန်မာအဘိဓာန်က ဘာ သာပြန်စာပေအသင်းကြီးရဲ့ အား ထုတ်မှုထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်’ တဲ့။
ဟုတ်ပါရိုးလား ဘစီရဲ့ ချစ် ဆွေကြီးရဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာ ပြန်စာပေအသင်းကြီးက မြန်မာ အဘိဓာန်ပြုစုခဲ့တာ ကျုပ်ဖြင့် မသိလိုက်ရပါလားဆိုပြီး အငေါ့တူး လိုက်ချင်တာကလား။ နို့ပေတဲ့ သိတယ်ဟုတ်။ အဲဒီ မောင်ဥယျာဉ်ဆိုတာ ကျုပ်မန္တလေးရောက်ရင် ဆိုင် ကယ်တစ်စီးနဲ့ သွားချင်တဲ့နေရာ လိုက်ပို့တဲ့သူဆိုတော့ ပြောလည်း ပြောချင်တယ်၊ မပြောလည်းမပြောရဲဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့။ သူ့ ကို မှားတယ်ပြောလို့ ဘယ်ဖြစ် မလဲ။ သူက ကျုပ် ဆရာကြီးပဲ ဟာ။ ဆိုတော့ကာ ‘ပညာရှိသတိ ဖြစ်ခဲ’လို့ပြောမှ တော်မယ်။
တကယ်တော့ မြန်မာစာ အဘိဓာန် (အကျဉ်း)ကို ပုံနှိပ်တဲ့ ၁၉၇၈ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဘာ သာပြန်စာပေအသင်းဆိုတာကို စာပေဗိမာန်လို့ ပြောင်းပြီးပါ ပကော။ အနှီ မြန်မာအဘိဓာန် (အကျဉ်း)ကို အဲဒီအချိန် ပြည် ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊မြန်မာစာအဖွဲ့က ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပြီး ရိုက်နှိပ်တာက ပြည်လမ်းက စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်တိုက်မှာတဲ့ ခင်ဗျ။ စုစုပေါင်း ငါးတွဲရှိ ပါသဗျာ။ ‘က’မှ ‘စ’အထိ တစ်တွဲ၊ ‘ဆ’မှ ‘န’အထိ တစ်တွဲ၊ ‘ပ’မှ ‘ယ’အထိ တစ်တွဲ၊ ‘ရ’မှ ‘ဠ’အထိ တစ်တွဲနဲ့ ‘အ’ အက္ခရာက တစ်တွဲ စုစု ပေါင်း ငါးတွဲပေါ့ခင်ဗျာ။ ၁၉၇၈ စက်တင်ဘာကနေ ၁၉၈၀ ဇူလိုင်လအတွင်း အနှီငါးတွဲကို ထုတ်ဝေ ခဲ့တာပါခင်ဗျာ။
ဘစီ အခုလို ရေးတာကို ဆဲ ဗင်းဒေးက အယ်ဒီတာမင်းများနဲ့ ရေးဖော်ဖြစ်တဲ့ စာရေးသူတွေက မေတ္တာရှေ့ထား နားလည်ပေးကြ မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်ဗျာ။ အခု ခေတ်မှာ အမှားတွေ ရေးကြ၊ ပြောကြတာ အတော်များနေတယ်ခင် ဗျာ။ ဒါကလည်း အခုခေတ် ဖေ့စ် ဘွတ်ခ်လို လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ် မှာ အလွယ်ရေး၊ အမြန်ရေး အ လှုပ်ရေးကြရာက အကျင့်ပါသွား တာများလားလည်း မသိပါဘူး။ ဆဲဗင်းဒေးသတင်းစာမှာ ပုံမှန်ဖော်ပြနေကျဖြစ်တဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် က ‘အမှားတွေကြား အမှန်ရှာ’ဆို တဲ့ကဏ္ဍကို ဖတ်ကြည့်ရင် ဘယ် လောက်ကြီးတဲ့ အမှားတွေလည်း ဆိုတာ သိသာပါသဗျာ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က အမှားတွေ က ရှိပါစေ။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ အ လွယ်အမြန်ရေးကြတာလည်း ရှိ ပါစေ။ နို့ပေတဲ့ အဖြူပေါ် အမည်း တင်တဲ့ စာနယ်ဇင်းစာမျက်နှာမှာ ပုံနှိပ်တဲ့စာတွေကိုတော့ တတ်နိုင် စွမ်းသမျှ မှန်စေ့ချင်တယ်ခင်ဗျ၊ တိကျစေချင်တယ်ခင်ဗျ။ သတင်း စာဆိုတော့ ပိုဆိုးတယ်ခင်ဗျ။ အများသူငါ လက်တစ်ကမ်းမှာ ကောက်ကာငင်ကာ ဖတ်လေ့ရှိ ကြတဲ့ စာတွေကိုး။ စာဖတ်သူများ အမှတ်မှားသွားကြရင် သိသူတွေ အဖို့ ဟားစရာဖြစ်တာက တော် သေးတယ်။ မသိသူတွေအဖို့ အ မှားကို အမှန်ထင်ကုန်ရင် အခက် ဗျာ။ ပြီးတော့ သတင်းစာကို လည်း အယုံအကြည်နည်းမယ်။ သဟာကြောင့် ကျုပ်က အမှန်ကို ကြိုးစားရေးကြဖို့၊ ရေးပြီးရင် လည်း စိစစ်ကြဖို့ ဆန္ဒပြုတာပါ။ အသာစီးရလို့ ဆရာကြီးဝင်လုပ် တာ မဟုတ်ကြောင်းပါ ခင်ဗျာ။
From :7Day daily news By: ဘစီ
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/98765
၆၆ နဲ့ ငြိသွားတာ။
ကိုယ်တိုင်ကလည်း စာရေးဆရာ ပေါက်စန ဘဝကို ရွေးချယ်မိတော့ မတတ်နိုင်ဘူးရယ်။
စာရေးဆရာတောင်မှ ထောင်နှုတ်ခမ်းပေါ် စကိတ်စီးရတဲ့ သရော်စာတွေ ရေးမိတဲ့ ငတိလေ။
အဲ... စာရေးဆရာဘဝ မရခင်တုန်းကတော့ ဂျာနယ်တွေ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာဆို ကိုယ့်စာလေး သိပ်ပါချင်တာ။
ဟိုပို့ ဒီပို့နဲ့ သုံးဆယ့်ငါးလမ်းအစုံအဆန် ခွက်ခွက်လန်ပါပဲ။
ဟော့... စာရေးဆရာ ပေါက်စနလေးဘဝကို ရပြီး လုံးချင်းလေး လေးငါးအုပ် ထုတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရောက်ပြန်တော့ ရေးစရာ တစ်နေရာက တိုးနေပြီးသား။
အဲ့ဒီမှာကျ အယ်ဒီတာစားပွဲ မရှိဘူးရယ်။ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်နဲ့တော့ တိုက်ရိုက်ထိခွင့်တွေ့ခွင့် ရှိသဗျ။
Like တွေ၊ Share တွေနဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ ဝေဖန်မှု ကွန်မန့်တွေပါ မြင်ရဖတ်ရတာမျိုးကိုး။
ဒါနဲ့ပဲ……..ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာလည်း ဂျာနယ်တွေ၊ သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြခံရပြီးသား ကိုယ့်စာမူလေးတွေ တင်သပေါ့။
မောင်ဗြိတို့ စာစရေးခါစကလေ အယ်ဒီတာတွေဆို သိပ်ကြောက်ရတာ။
ကိုယ့်စာမူလေး သွားပို့ရင် သူတို့ရှေ့မှာ ယို့ယို့လေးရပ်ရင်း သူတို့ ထိုင်ဆိုမှ ထိုင်ရဲတာ။
တာဝန်ခံစာတည်းတွေ ဆိုတာနည်းတဲ့ ပါဝါမဟုတ်လား။
ဖေ့ဘွတ်ကတော့ ဒီလိုအယ်ဒီတာ မရှိဘူးပေါ့။ မထင်နဲ့ဆရာ။
တခြားနိုင်ငံတော့ မသိဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ဖေ့ဘွတ်မှာ အယ်ဒီတာ ရှိတယ်။ အဲ့ဒါတော့ ၆၆ (ဃ) ဆိုတဲ့ ပုဒ်မပဲဗျ။
အောင်မယ်လေး..ဒီကောင်ကြီးက အကောင်အထည်သာ မရှိတာ..ကြောက်စရာကြီးရယ်။
အယ်ဒီတာကမှ ကိုယ့်စာမူမကြိုက်ရင် သူ့မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်ထဲ မထည့်ရုံဘဲ။
သူကတော့ ကိုယ့်စာမူမကြိုက်ရင် အချုပ်ထဲ ချည်းဆွဲထည့်တာရယ်..။
ဂျာနယ်တွေ သတင်းစာတွေမှာ ရေးရင်လည်း အမည်ဖော်မပြောရတဲ့ဟာကို သွားထိမိတဲ့ မှော်လော်ကသားတွေလို..သောက်ကျိုး အကြီးကြီးနည်းကုန်ပြီး တောင်းပန်ရတော့တာ ထုံးစံပဲဗျိုး။
စာရေးဆရာတွေအတွက် ကိုယ်ရေးတဲ့စာအတွက် တောင်းပန်တယ်ဆိုတာက ရည်းစားလူလု၊ အူနုကျွဲခတ်၊ ထိပ်ဖျားကြမ်းညှပ်တာထက် ခံရခက်လှသဗျ။
အဲ့ အမည်ဖော်မပြောရတဲ့ဟာ ဆိုတာ ဒီလို။
ဗြိတိသျှစာရေး ဆရာမ ဂျေကေရိုလင်းရေးတဲ့ ဟယ်ရီပေါ်တာ စာအုပ်တွေ ဖတ်ဖူးတယ် မဟုတ်လား။
အဲ့ဒီစာအုပ်တွေထဲက မှော်လောကကြီးထဲမှာ အမည်ထုတ်မပြောရတဲ့ အမှောင်သခင် နတ်ဆိုးကြီး ဗိုဒါမော့ဆိုတာ ရှိသဗျ။
မှော်လောကသားတွေဟာ အမှောင်သခင်ကြီးကို နာမည်ထည့်ပြောမိရင် အဲ့ဒီအမှောင်သခင်ကြီးက ဝုန်းခနဲ ရောက်လာပြီး ပြစ်ဒဏ်ခတ်တတ်ပါသတဲ့။
အိမ်း..ဒီတော့..ဗိုဒါမော့ကြီးကိုပဲ ပြောတယ် မှတ်ကြပါ..တော့လို့။
ဒီ့နှယ်ဆိုတော့ မောင်ရင်ဗြိရယ်..ဘယ့်နှယ့်ကြောင့် ဒီအန္တရာယ်များတဲ့ စာရေးဆရာ အလုပ်လုပ်နေသတုံးဆို။
သည်ခေတ်က ဘာအလုပ်တွေ လုပ်စရာရှိတုံး။
ဝန်ကြီးတောင် ဘုရားတရားနဲ့ ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးနော်။
ခမျာ…အစိမ်းဘက်လူတွေ ပြောတော့ သစ္စာဖောက်၊ အနီဘက်ကလူတွေ ပြောတော့ ပူးသတ်၊ မျိုးချစ်တို့က ပြောတော့ မာမူဘက်တော်သား၊ မာမူတို့ဘက်က ပြောတော့ မျိုးချစ်ဘက်တော်သား၊ ဒီကြားထဲ အမည်ဖော်မပြောရတဲ့ လူတွေကလည်း ပုဆိန်ရိုးဆိုပြီး ဘက်စုံ အဆဲပဒေသာပွဲကြီး ဆင်နွှဲခံနေရရှာတယ်။
အခုဆို နုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင် ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဘာတွေလုပ်နေပါပကော။
ဒါကြောင့်…ဝန်ကြီးဖြစ်ရတာလည်း ဒါကြောင့် တယ်မချောင်လှပေဘူး။
ကိုင်းဒါဆို..မောင်ရင် ဘာလုပ်မှာလဲ…လူချစ်လူခင်ပေါတဲ့ ပရဟိတသမား လုပ်မလား။
အောင်မလေး..ဒါလည်း အဆဲခံရတာ မလွတ် ပါဘူး။
ဒီတော့ ကွာစီးပွားရေး လုပ်ပါလား။ ကလောင်လေးတစ်ချောင်းပဲရှိတဲ့ ငမွဲက ဘယ်ကအရင်းအနှီး ရမတုံး။
ကဲ..ဒီတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ စာရေးဆရာပဲ ဆက်လုပ်ဖို့ ကောင်းပါသည်ကောလား။
စာရေးဆရာ လုပ်တော့ရော..အဟဲ..မရေးရ မနေနိုင်တဲ့ အကျင့်လေးကြောင့် ခုနပြောတဲ့ မှော်လောကသားတွေ အမည်တပ်မပြောရတဲ့လူကို အမည်တပ်ပြောမိသလိုမျိုး.ဖြစ်တော့ ကိုင်း..နာမည်ကျော် ခြောက်ဆယ့်ခြောက်နဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့အမှုမှာ ခြောက်ဆယ့်ခြောက်မှုမြောက်စာရင်း ချိတ်ပြီပေါ့ဗျာ။
စဖြစ်ပြီ ဆိုကတည်းက သတင်းဌာနတွေက လာလိုက်တဲ့ အင်တာဗျူး။
ဂျာနယ်လစ်ဘဝနဲ့ သူများကို အသားကုန် အင်တာလာဗျူးသမျှ ကိုယ့်မှာ အခုမှ ပါးစပ်က အမြှုပ်ပါထွက်တယ်။
တချို့ကလည်း ပြောတယ် ဒီကောင် ငဗြိ နာမည်ကြီးချင်လို့ အုတ်နံရံကို ခေါင်းနဲ့တိုက်တာတဲ့။
အလိုလေး…မဟုတ်ရပါဘူး။ တကယ်က…ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားရင်း အုတ်နံရံနဲ့ တိုက်မိတာပါဗျာ။
အုတ်နံရံဆိုလို့ ….ဒီရက်ပိုင်း ပြဿနာတွေ ကတောက်လျှောက်ဝင်တာကလား။
မောင်ဗြိတို့ နောက်ဖေးကခိုင်ပေ့မာပေ့ဆိုတဲ့ အုတ်နံရံကြီးမနေ့က ပြိုကျသွားသဗျာ။
မိုးရွာလို့..ရေတိုက်စားလို့ ပြိုတာ ဟုတ်ဘူးရယ်။
အိမ်မျက်စောင်းထိုးမှာ လာဖွင့်ထားတဲ့ ဘီအီးဆိုင်က အရက်သမားတွေ ညဘက် ရှူးလာလာပန်းရင်း ကဆားငန်မြေဖြစ်ပြီး ပြိုကျသွားတာပဲ။
တောက်..အရက်သမားများညီရင် ရှူးရှူးနဲ့တောင် နံရံဖြိုချလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။
မောင်ဗြိကတော့.ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် အမှောင်သခင်ကို သွားထိမိတော့ ကျိန်စာကတော့ သင့်တာပဲကိုး။
ကိုယ့်မှာယူထားခါစ မိန်းမလေးကို နီးစပ်ရာ ယောက္ခမတွေဆီအပ်ပြီးနှံပြီး ပြင်စရာရှိတာ ပြင်ရတာပ။
“မောင်ဗြိ ငါတို့ ငါးပိကြော်လာပို့ပေးမယ်” တဲ့။
နေပါဦး…ထောင်ထဲဝင်ရင် ငါးပိကြော်ပဲ ပို့ရမယ်လို့ အခြေခံဥပဒေက ပြဋ္ဌာန်းထားသလားဗျာ။
တကယ်ဆို ကြက်ကြော်၊ ဝက်ကြော်စား ကောင်းတာလေးကို အထားခံအောင်လုပ်ပြီး ပို့လည်းရတာကိုး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုတစ်လောက တချို့တွေ အမှုရင်ဆိုင်ပြီဆို မှာတမ်းတွေ ဘာတွေခြွေတတ်တော့ မောင်ဗြိလည်း ခေတ်မီအောင် မှာတမ်းလေးချွေရပါဦးမယ်။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဗြိသည် ခဏတာ လည်လည်သွားတဲ့အခါ….စာဖတ်သူပ ရိသတ်ကြီးများအိပ်တဲ့အခါ ခေါင်းအုံးနဲ့အိပ်ပါ။
အမည်ဖော်ပြောမရတဲ့ ဗိုဒါမော့ခ်ကြီးကိုတော့ သွားမထိပါနဲ့။
ရှိသမျှ ပုဒ်မ မရရတာနဲ့ ဂျောင်းရပါလိမ့်မယ်။
Originally published at - http://thevoicemyanmar.com/article/9077-btt
သေချာရင် ခြေရာအတိုင်း လိုက်ကြစို့
တိရစ္ဆာန် ကြီးတွေက အထူး အစည်း အဝေး ကျင်းပမလို့ ဆိုလား၊ စိတ်ဝင်စား တယ်ဆိုရင် လေ့လာသူ အဖြစ် လာတက် ကြည့်ပါလားလို့ ဆိုကာ ဂျက် ကွမ်းခြံကုန်းကို လှမ်းပြီး ဖိတ်ကြား လာတော့ ၂၁ ရာစုထဲကို ၀င်လို့ ဆယ့်လေးငါး နှစ်တောင်မှ စွန်းပြီးခဲ့ ပါပကော။
စုံနံ့သာမြိုင်ဟာ ထူးထွေ တည့်အံ့ရာသောဝ်လို့ဆိုတဲ့ တော ကြီးဖြစ်တာကြောင့် တစ်နည်း အားဖြင့်ပြောရရင် ပဉ္စလက်ဆန် တဲ့တော၊ မှော်ဆရာဆန်တဲ့တော ကြီးဖြစ်တာကြောင့် ဖြစ်လိုက်ပြီ ဆိုရင် လူတွေဘယ်လိုမှ နားမ လည်နိုင်တဲ့ ကိုးရိုးကားရား အဖြစ် သနစ်တွေ ထွန်းကားလေ့ ရှိတာ ကြောင့် ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း လည်း စုံနံ့သာမြိုင် တောကြီးထဲ ၀င် ရောက်လာခဲ့မိပါလေရောခင်ဗျ။
ဟုတ်တယ်။ အထူးအစည်း အဝေး။
တိရစ္ဆာန်တွေလို့ ဆိုပေမယ့် တော်တော့ကို မခေတဲ့သတ္တ၀ါ တွေပါဗျာ။ စီစီတီဗီကင်မရာတွေလည်းပါသဗျ။ ပရိုဂျက်တာ (Projector) တွေလည်း ပါသဗျ။
ဓာတ်ပုံအထောက်အထားတွေက လည်း အဆင်သင့်ထောင်ထား တဲ့ မတ်တတ်ဆိုင်းဘုတ်ကလေးတွေ မှာ သေသေချာချာကပ်လို့။ ဓာတ် ပုံတိုင်းရဲ့ အောက်မှာ ပုံစာတွေနဲ့ ရေးထိုး ဖော်ပြလို့။
အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေရာ ကတော့ ကျောက်ကမ်းပါးယံကြီး တစ်ခုရဲ့ နံဘေးနားက တော် တော်ကလေး ပြန့်ပြန့်ပြူးပြူးရှိတဲ့ ကျောက်သားပြင် ကွက်လပ်က လေးထဲမှာ လုပ်တာပါ။
ဆင်ရယ်၊ကျားရယ်၊ ခြင်္သေ့ရယ်၊ မြေခွေးရယ် သတ္တ၀ါလေးငါးခြောက် ကောင် ဆိုပါတော့။ ဟိုတုန်းက တောမိတောဖလိုလို ဘာလိုလို လုပ်ခဲ့ကြပြီး အခုတော့ တောလုံခြုံရေးဆိုလား ဘာဆိုလား လုပ်နေကြတဲ့ သတ္တ၀ါတွေက လုပ်တဲ့ ပွဲပါ။
စိတ်ဝင်စားတဲ့ သတ္တ၀ါ တချို့ လာရောက်ကြပြီး လူသား ဆိုတာကတော့ ဂျက်တစ်ယောက် တည်းလို့ဆိုပါတော့။
သတ္တ၀ါကြီးတွေက စီစီတီဗီ ကင်မရာထဲက သက်သေအ ထောက်အထားတွေကို ပရိုဂျက် တာတွေနဲ့ ထိုးပြပြီးတော့ကို ရှင်း လင်းပါတယ်။ ဓာတ်ပုံအထောက် အထားတွေကိုလည်း ပရိုဂျက်တာနဲ့ အကျယ်ချဲ့ပြီး ပြသကာရှင်းပါ တယ်။
‘‘ဒါကြောင့် ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း ကိုသတ်တဲ့ တရားခံဟာ သောနုတ္တရ မုဆိုးပါလို့ဆိုတာ ထင်ရှား နေပါတယ်’’
သြော် ... အထူးအစည်းအဝေးဆိုတာက ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းကိုသတ်တဲ့သူဟာ ဘယ်သူပါလဲလို့ဆိုတာကို ခိုင်မာအောင်ဖော်ထုတ် တဲ့ အစည်းအဝေးပေကိုး။
‘‘တစ်ခုပြောပါရစေ။ ဒါဟာ ဇာတ်ဝတ္ထုတွေထဲမှာလည်း ရေး ကြ သားကြ၊ ဆိုကြ ငိုကြ၊ ကကြခုန်ကြနဲ့ ဖုန်ထနေတဲ့ ဇာတ်လမ်း ကြီးဗျာ။ သတ္တ၀ါတိုင်းသိနေတဲ့သစ္စာဆင်ကိုသတ်တာ သောနုတ္တ ရမုဆိုးပဲဟာ၊ ဘယ့်နှာကြောင့် ခုမှ ဇာတ်လမ်းပြန်စနေတာတုံးဗျာ’’
ဂျက်က အနို့ကလိုဆိုတော့ ခြင်္သေ့ကပြုံးသဗျ။ ပြီးတော့မှ စား ပွဲကထကာ ရှင်းပါတယ်။ ဇာတ် ၀တ္ထုဆိုတာ ခိုင်မာတာမဟုတ်ဘူး တဲ့။ အခုဟာက နည်းပညာတွေနဲ့ အတိအကျဖော်ထုတ်ထားတာ တဲ့။
ဒါတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ပုံ တွေက အားလုံးအတိအကျ။ မုဆိုး
က ဆင်ကို ကျောက်ဖျာအောက် ကနေ မြားနဲ့ပစ်နေတဲ့ပုံ၊ ဆင်တွေ ၀ရုန်းသုန်းကားနဲ့ ရန်သူကို အရှာ ထွက်ကြတဲ့ပုံ၊ မုဆိုးက ဆင်မင်းရဲ့ အစွယ်ကို လွှနဲ့တိုက်ဖြတ်နေတဲ့ ပုံ၊ ဆင်မင်းက ကိုယ်တိုင်ဖြတ် ပေးနေတဲ့ပုံ၊ ဆင်မင်းတုံးလုံးကြီး လဲကျသေဆုံးနေတဲ့ပုံ၊ မုဆိုး ဆင် စွယ်ကိုပိုက်လို့ ပြေးနေတဲ့ပုံ။
စီစီတီဗီကင်မရာအထောက်အထား၊ ဓာတ်ပုံအထောက်အ ထားတွေကို ပရိုဂျက်တာနဲ့ထိုးပြီး တစ်ကွက်ချင်းပြကာ တစ်ချက် ချင်းရှင်းတော့ လင်းခနဲလက်ခနဲ ဖြစ်သွားတာပေါ့။
သွေးအလူးလူးနဲ့ ဆဒ္ဒန်ဆင် မင်းကြီး လူးလှိမ့်အသက်ထွက် သွားတဲ့ပုံဟာ တော်တော့ကို ကြေ ကွဲစရာကြီးပါ။
‘‘ဇာတ်ဝတ္ထုတွေထဲမှာ သိရှိ ခဲ့ရတဲ့ဟာကို ခုလို ခေတ်မီအ ထောက်အထားတွေနဲ့ ဖော်ထုတ် ပြလိုက်တော့ အမှုက ခိုင်မာသွား တာပေါ့။ အနို့အဆွေ တိရစ္ဆာန်တို့ က ခုလိုရှင်းပြပြီးတော့ ဘဇာများ လုပ်ချင်ကြပါလိမ့်’’
ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်းက သို့နှယ် ထို့နှယ် သင်းအနှီ ယင်းသတ္တ၀ါ ကြီးတစ်စုကို လှမ်းမေးရပါတယ်။ ခြင်္သေ့ကပဲ ထပါတယ်။
‘‘အဟမ်း .. ဒါဟာ ရမ်းကား မှု၊ ဥပဒေမဲ့ စော်ကားမှု။ သောနုတ္တရဆိုတဲ့ မုဆိုးရဲ့ခြေရာကို ခံကာလိုက်မယ် ... တောဥပဒေနဲ့ ခုံရုံးတင်မယ်’’
ဆန်းဆန်းပြားပြား။ မုဆိုးရဲ့ ခြေရာကိုခံကာ အဲသည့်ခြေရာအတိုင်း လိုက်သွားပြီး အရေးယူဖို့ အဖွဲ့တောင် ဖွဲ့ထားပြီးခဲ့ပါပြီတဲ့။ ထား။ မုဆိုးရဲ့ခြေရာအတိုင်း လိုက်သွားတော့ ဗာရာဏသီပြည် ကာသိကရာဇ်တိုင်းကို ရောက်မှာ ပေါ့။ ကာသိကရာဇ်မင်းရဲ့ နန်း တော်ကြီးရှိရာဆီလည်း ရောက် ချင်ရောက်မှာပေါ့။
အဲ .. အနို့ သော်
ကာသိကရာဇ်မင်းကတော့ မရှိတော့ပါဘူး။ သူ့လင်ဘုရင်ကြီး ကို ဆင်စွယ်ပူဆာတဲ့ စူဠသုဘဒ္ဒါ မိဖုရားလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဆင်စွယ်ဖြတ်တဲ့ ငမိုက်သား သော နုတ္တရလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ သေပေါ့။ ကြာပဲကြာလှပြီပဲဥစ္စာ။ ဂေါတမဘုရားရှင် ပွင့်တော်မမူ ခင် ဟိုးအတိတ်က ဇာတ်လမ်းတွေပဲဥစ္စာ။ အခုမှရတဲ့ အထောက်အထားတွေနဲ့ အမှုကိုစီရင်လေမတဲ့။
‘‘အဆွေတို့ဟာက နှောင်း လွန်း ဟောင်းလွန်း သွားပြီဗျာ။ ဘဇာမှ အကျိုးမရှိနိုင်တဲ့ဥစ္စာ’’ လို့။ ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်းက ပြောပါ သေးတယ်။ မရပါဘူး။ ခြင်္သေ့က ...
‘‘ရာဇ၀တ်ဘေး ပြေးမလွတ် ဗျ၊ ဘယ်ကမ္ဘာက အမှုဖြစ်ဖြစ် တိရစ္ဆာန်တွေက ပိတ်မဖြစ်ဘူး။ အခုကိုပဲ မုဆိုးရဲ့ခြေရာအတိုင်း လိုက်နေကြပြီ’’တဲ့။
သြော် ... လိုက်ပေါ့။ လိုက် ကြ။ မုဆိုးက သံသရာလမ်းမကြီး တစ်နေရာမှာ ဒူးကလေးနှန့်လိုက်၊ ၀ီစကီကလေး သောက် လိုက်နဲ့ မုတ်ဆိတ်မွေး၊ ပါးသိုင်းမွေးတွေကိုတောင်မှ ရိတ်လို့ပြီး နေပါပကော။ ။
(ဖော်ပြပါ ဆောင်းပါးသည် စာရေးသူ၏ အာဘော်သာ ဖြစ်ပါသည်။)
From :7DAy daily news - By: ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/97960
ဝါးတား တက်စီတဲ့ နောက်တခါ လာပြန်ပြီဟေ့
နောက် တခါ လာပြန် ပြီဟေ့ ဆိုတဲ့ သီချင်း စာသား လေးလို ဝါးတား ပါတီ ရေပါတီ အဲလေ ယောင်လို့ သင်္ကြန် ပြီးနောက် သိပ်မကြာ ခင်မှာ YBS ကောက်ရိုး မီးလေး ဖုတ်လှိုက် ဖုတ်လှိုက်နဲ့ပဲ အသက်ငင် နေချိန် မောင်ကေတို့ ရွှေမြို့တော် မှာ ဝါးတာ တက်စီတွေ ရန်ကုန်မြစ်၊ လှိုင်မြစ်တို့ အတွင်း ပြေးဆွဲမယ့် (Water Taxi) လာပါ တော့မယ်လို့ ဟိုတလောလေးက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်သံ ကြားလိုက် ရပါတယ်။
နောက်တခါ လာပြန်ပြီဟေ့လို့ မောင်ကေတို့ ဆိုတာ မလွန်လောက် ပါဘူးနော့။ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ် လိုပေါ့။ မဟာ ရန်ကုန်သူ ရန်ကုန် သားများ YBS ရွှေကိုယ်တော်ကြောင့် ခုထိ အခက် အခဲတွေဖြစ်၊ လမ်းတွေ ပိုပိတ်၊ အလုပ်တွေ အိမ်ပြန် ချိန်တွေ ပို နောက်ကျ။
YBS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကွီးကို မောင်ကေတို့ အကြံပြု ချင်တာ ရည်ရွယ်ချက်က ကောင်းပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ညံ့ဖျင်းတော့ ပြည်သူတွေက အစမ်းသပ် ခံတွေ ဖြစ်သွားပြီး အဆင်မပြေလို့ ပြောကြ ရေးကြတော့ ဟိုးတလော ကဆို တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်မ တဦးက နိုင်ငံရေး ပယောဂကြောင့် မအောင်မြင် တာပါတဲ့။ သေပြီ ဆရာလို့ မောင်ကေ ညည်းချင်တော့တာ။
မောင်ကေတောင် “ကိုယ့်လုပ်ရပ် အသုံးမကျတိုင်း ဟိုလူ့လက်ညှိုးထိုး ဒီလူ့လက်ညှိုးထိုး လူတွေကို သားသိပ်မုန်းတာပဲ မေမေ” လို့တောင် ဖေ့ဘုတ်ပေါ် ရေးလိုက်သေးတယ်။ အရင်အစိုးရတုန်းကလို နေပြည်တော်အမြန်လမ်းမကြီး ယာဉ်တိမ်း မှောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စုန်း၊ကဝေပယောဂတွေကြောင့်လို့ မဖြေတာဘဲ ကျေးဇူးတင်ရမလို။
မောင်ကေတို့ ခုဆို အလုပ်သွားရင် မြောက်ဥက္ကလာကနေ ဆူးလေစီးတာ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ယာဉ် လိုင်းကလည်း တစီးသာ ရှိတာကြောင့် လာရင်လည်း ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးရပါသေးတယ်။ ၅ မိနစ်၊ ၁၀ မိနစ်ခြား တစီးပြီး တစီးလာပါရဲ့။ လာတဲ့ ၃စီးလုံးပေါ် ရုံးချိန်ဆိုတော့ ကားအပေါက်ဝမှာတင် မတ်တပ်ရပ်မရ၊ ပြည့်သိပ်ကျပ်ညှပ်နေတဲ့ကားက လမ်းမှာ ထပ်ကားကျပ်ပုံနဲ့ဆိုတော့ ဆူးလေအရောက် ကားစီးချိန်က ၁နာရီခွဲကျော် အနည်းဆုံးပဲ။
ရထားပြောင်းစီးတော့ တနာရီကြာပေမယ့် ပုဇွန်တောင်ဘူတာမှာ အသားလွတ် ၁၅ မိနစ်၊ မိနစ် ၂၀ ကျောက်ချထားပြန်ရော။ မောင်ကေလည်း ရထားပေါ်က တာဝန်ရှိသူကို မေးမြန်းကြည့်တော့ အလံမပြသေးလို့တဲ့။ ဘုဆက်ဆက်လေး ဖြေရှာတယ်။ ရ ထား မစီးဖူးဘူးလားဆိုတဲ့ မိုက်ကြည့်လေးနဲ့ပေါ့လေ။
တရက်လည်းမဟုတ် နှစ်ရက်လည်း မဟုတ်တော့ ဘာပြုလို့ မောင်ကေတို့ရထားကို ဘူတာကြီးဝင်လာဖို့ အလံမချိုး၊ မပြ တာ လဲ၊ နေ့တိုင်းကြီးဆိုတော့ လိုအပ်တာတွေ ပြင်ထားဆင်ထားပါလားလို့ မောင်ကေ မေးရဲမယ်ထင်လို့လား။ ယောင်လို့မှ မဟရဲ ခဲ့။ အော် ဒမိုဂယေစီ၊ ဒမိုဂယေစီ။
YBS လုပ်လိုက်လို့ ဘုံပျောက်သွားရတဲ့ မောင်ကေတို့ဝန်ထမ်းလေးတွေခမျာ၊ ရထားလည်း လင်လုပ်မရ၊ အိမ်က စောနိုင် သမျှ စောထွက်ပြီး ကွီးရဲ့YBS ကြီးကို တောင့်ခံထားချိန်မှာ ကွီးကတော့ ခွင့်လေးတိုင်လိုက်၊ ပယောဂလို့ပြောခိုင်းလိုက်၊ ဖွင့်ပွဲတွေ အားပေးလိုက်နဲ့ ဟန်ကျနေတာကို သတင်းတွေထဲ မြင်မြင်နေရတယ်။
ခုလည်း ကွီးရဲ့မဟာစီမံချက်ကြီးတခုဖြစ်တဲ့ ဝါးတားတက်စီ ဇွန်လအမီ ပြေးဆွဲတော့မည်ဆိုတော့ မောင်ကေတို့ဆိုတဲ့ နောက် တခါလာပြန်ပြီဟေ့ဆိုတာ မလွန်လောက်ပါဘူးနော့။ ညဈေးတန်း၊ YBS၊ ဝါးတားတက်စီ။ အင်း…ဘာတွေဖြစ်ကြဦးမည်လဲ ပေါ့။
ဒီဖြစ်ရပ်တွေ သံဝေဂရပြီး မောင်ကေတယောက် ငယ်ငယ်ကနားထောင်ခဲ့တဲ့ ဘိန်းစားဘမောင်ဆိုတဲ့ ပုံပြင်လေး သွားသတိ ရတယ်။ ဘမောင်ဟာ တနေ့ တနေ့ ဘိန်းလေးရှူလိုက်၊ ဘိန်းကောင်းနေတုန်း ရတဲ့စိတ်ကူးလေးတွေကို သူ့မိန်းမ ထုတ် ပြောလိုက်၊ ဘိန်းပြယ်သွားချိန် တရှောင်ရှောင်ပြန်လုပ်လိုက်နဲ့။ တခါထပ်ရှူလိုက် စိတ်ကူးလိုက်နဲ့ တသက်လုံး မိန်းမ လုပ် စာထိုင်စားရင်း မိန်းမကတော့ တရက်လုပ်နိုး လုပ်နိုး၊ သူ့စိတ်ကူးတွေဖြစ်မလာဘဲ ဘမောင်သာ ဘိန်းစားဘဝနဲ့သေသွားပါ တယ်။
ကွီးကို ဘိန်းစားနဲ့မနှိုင်းရဲပါဘူး။ တော်ကြာ ဟိုနာရီကိစ္စလို တရားစွဲလိုက်မှ ကြောက် ကြောက်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကူးပေါ်တိုင်း ထလုပ်မယ်ဆိုလည်း နှိုက်နှိုက် ချွတ်ချွတ် ထဲထဲဝင်ဝင် သိတတ်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ လုပ်စေချင်တာ။
အပြင်မှာ မောင်ကေ ကြားသလို ပြန်ပြောရရင် ခရိုနီတွေ ခိုင်းသမျှ အကျိုးမျှော်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်း ကွီးကြား စေချင်တယ်။ အဲဒီလောက်တော့ မောင်ကေတို့ ပြောခွင့်ရှိရဲ့၊ လက်သန်းလေး မင်စွန်းခံပြီး ကွီးကို တင်ထားရတာလေ။ မောင် ကေက ပရောဂကင်းကြောင်း ရဲရဲပြောဝံ့တယ် သိလား။
လုပ်ပါ ရှင်တို့ရဲတွေပဲ အဲလေ ကွီးတို့က လုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားသူတွေဆိုတော့ ဝါးတားတက်စီ မကလို့ မိုးပျံတက်စီပဲ လုပ်လုပ် မောင်ကေတို့က ခံရမှာ အဲလေ စီးရမှာ။ ဖွင့်ပွဲနေ့ကျရင်လည်း YBS တုန်းကလို လျှပ်ပြေးရေယာဉ်ပေါ် ချောင်ချောင်ချိချိ လေးစီး စလိုးမိုးရှင်းလေးနဲ့မောင်းပြ စီးကြဦးမှာ မောင်ကေ မြင်ယောင်မိသေးတယ်။
အဆိုးမြင်တဲ့ မောင်ကေ သူငယ်ချင်းတယောက်က ဝါးတားတက်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာပြောသလဲဆိုရင် ဟေ့ယောင် မောင်ကေ အဲဒါ လူလျှော့တဲ့ စီမံကိန်းကွတဲ့။
မောင်ကေ ရုတ်တရက် နားမလည်။ ဘာလဲဗျ ခများစကားက ဆိုတော့ ဒီလိုကွ ရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်ကြီး လူဦးရေထူထပ် ကျပ်ညှပ်နေတာ မင်းလည်း အသိ။ YBS မှားတာက လမ်းပဲလျှောက်ရတာ၊ ဝါးတားတက်စီစနစ် မှားလိုက်ရင် အကုန်လုံး ရေထဲ ကာလနာတိုက် နစ်သေကုန်မှာလေတဲ့။ အနုနည်းနဲ့ လူလျှော့တာပေါ့ကွတဲ့။
သူကေတာ့ ရယ္က်ဲက်ဲနဲ့ျေပာလိုက္တာဆိုပေမယ့် မောင်ကေ မရယ္နိုင္ပါ။ ရေဆိုရင် ရေခ်ိုးခန်းလောက္နဲ့သာကြီျးပင်းခဲ့ ရတဲ့ မောင်ကေတို့အတြက် ဝါးတားတက္စီအတိမ်းအေစာင်းမ်ာျးဖစ္ခဲ့ရင္ဆိုတဲ့ အေတြးက မောင်ကေကို နွိပ္စက္လို့ နေပါ တယ်။
ဟုတ်တယ်လေ၊ ကွီး စဉ်းစားကြည့်၊ ရေလမ်းခရီးမှာ ရေမကူးတတ်တော့ အခြား ညဈေးတန်း၊ YBS တို့လို မှားယွင်းသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်ရပ။
ခုလည်း မောင်ကေ ဒီစာလေးရေးနေတုန်း ကွီးက UBER တက္ကစီကိုလည်း စံပြအဖြစ် လုပ်ဆောင်ဦးမှာပါတဲ့။ မောင်ကေ ဘော်ဒါကြီး အငှားယာဉ်မောင်းတဦးကတော့ ယာဉ်ကျောကျပ်မှုကို မဖြေရှင်းဘဲ ကြိုက်တဲ့စနစ်ကိုလုပ် မအောင်မြင်နိုင်ပါ ဘူးတဲ့။ အားပေးကြမ်းတယ်နော့။ မောင်ကေကတော့ ယူဘာဆိုတာကိုက နိမိတ်လိုဖြစ်မှာ တွေးပူမိတယ်။
ဝါးတားတက်စီ ကိစ္စကတော့ ဘယ်သူအကောင်အထည်ဖော်ဖော် ကွီးပိုင်နက်ထဲမှာဖြစ်လို့ ကွီးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆိုချင်ပါ တယ်။ မောင်ကေကတော့လေ ခုကတည်းက အသက်ကယ်အင်္ကျီ ဝယ်ထားရမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ရေကူးသင်ထားရမလား၊ ရေနစ်မသေတဲ့ဂါထာတွေလည်း ရှာဖွေကျက်ဖို့ စဉ်းစားနေရပြီ။
ဟုတ်တယ်လေ။ မဟာရန်ကုန်မှာက မထသယာဉ်မောင်းများလို ဝါးတားတက်စီကို မောင်းကြရင်ဖြင့် မောင်ကေတို့ သေချင်း ဆိုးနဲ့ရေထဲ မသာပေါ် ရမယ့်အဖြစ်ကြီးလေ။ မမောင်းဘူးလို့ ကွီး အာမခံလား။
ပြီးတော့ ကွီးက အရေးရယ်အကြောင်းရယ် ရှင်းကြ လင်းကြပြီဆို ရှောင်တခင်ခွင့်က ယူတတ်ပါဘိ။
From : ဧရာဝတီ by မောင်ကေ
Originally published at - https://burma.irrawaddy.com/article/2017/05/20/135100.html
မကြာမှီ မြန်မာ တို့ရဲ့နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော် သို့မဟုတ် အတာ ရေသဘင် ပွဲတော်ကြီး ရောက်ရှိလာ ပါတော့မယ်။ ဟို အဆိုတော်မလေး အသံနဲ့ဆို ဝါတာပါတီ ရေပါတီပေါ့။
မောင်ကေတို့ မြန်မာ အယူအဆလား ဘာလားတော့ မသိ။ သင်္ကြန် အကျနေ့ ဆိုရင် သိကြားမင်း ဆိုသူက ဆင်းလာပြီး သူ ၏နုတ်ပတ် အဲလေ ခွေးသားရေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပုရပိုက်နဲ့ လိုက်လံ မှတ်သား သတဲ့။
ဘယ်လိုလူတွေကို သိကြားမင်း ဆိုသူကြီးက လိုက်လံ မှတ်သားသလဲ ဆိုတော့ မောင်ကေတို့ ဘွားအေကြီးတွေ တော်ကီ ပွားခဲ့ တာကတော့ ရပ်ရွာ အတွက် အကျိုး ယုတ်စေသူ၊ ရပ်ရွာက မနှစ်မြို့တဲ့ သူတွေတဲ့။
မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ မောင်ကေတော့ စဉ်းစားမိတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ သူသာ အဲဒီလို မှတ်သား အရေးယူ ခဲ့မယ်ဆို မောင်ကေတို့ တိုင်းပြည် ပြည်တွင်း စစ်ကြီးဝေးလို့ စင်ကာပူ လောက်တော့ အပျော့ပေါ့။ အဲလေ စကား ဘယ်ရောက် ကုန်မှန်း မသိ။
မောင်ကေ တယောက်လည်း အဝေးသင် ပညာရေးနဲ့ ကြီးခဲ့ ရလို့လား မသိဘူး။ ဉာဏ်နည်းတယ်။ ပေါ့ကတ်ပဲ အားကိုးတယ်။ ကျူရှင်ပဲ အားကိုးတယ်။ ပေါက်မေးခွန်းပဲ ရှေ့ရှုတယ်။ ဟိုတလော လေးကတောင် ဖေ့ဘုတ်မှာ ပညာရေး ဝေးသည် မရှိ ဆို ပြီး ဘွဲ့ဝတ်စုံနဲ့ကလေးမ တယောက် ကိုယ်တိုင် ဆိုင်ကယ် စီးသွားတဲ့ပုံ တွေ့လိုက်တယ်။ (ဤကား စကားချပ်)
ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။ သင်္ကြန်။ သင်္ကြန်။ အော် မှတ်မိပြီ။ သင်္ကြန်ဆိုတာနဲ့ ရုံးပိတ်ရက်ကိစ္စက မောင်ကေခေါင်းထဲ ပေါ် လာပြန်ပြီ။ ၅ရက်၊ ၁၀ရက် ပြဿနာက ဘယ်လိုလဲ။ ခု ၅ရက်ပဲတဲ့။ တော်တော် ညံသွားတဲ့ ကိစ္စကြီးနော်။ ဝန်ထမ်း ဒီ လောက်များတဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးမှာ မညံ ခံနိုင်ရိုးလား။
အစိုးရ တခုရဲ့ပြောရေး ဆိုခွင့် ရှိသူကြီး(သူက အစိုးရ ၂ ဆက်တောင် အလုပ် လုပ်ခဲ့ တာနော့)က တခုတည်းသော ထုတ် ပြန်ချက်တောင် ၃ခါလောက် ထုတ်ပြန် တာတောင် မောင်ကေလို့ အူတူတူ မြန်မာစာ သမားတယောက် ခုထိ နားမလည် သေး။
ကိုယ့်နားရွက်ကိုယ် အရေထူနေ သလား လို့တောင် မောင်ကေ တွေးမိပြီး ခဏခဏယောင်ပြီး စမ်းခဲ့ မိတာ။ ကိုယ့်ဆရာကြီး လက်စွမ်းပြ လိုက်ပုံကလည်း မြန်မာလို ရေးထားတာ စကားပြန်ခေါ်ရမလို ဆိုတော့လေ။
ရုံးပိတ်ရက် သတ်မှတ်တာတောင် လိပ်ပတ် လည်အောင် ရှင်းမပြတတ်ရင် ပြည်သူတွေ သိချင်နေတဲ့ ကိစ္စတွေဆို ဝေးရော ပေါ့လို့ မောင်ကေလည်း အကုသိုလ် ပွားမိတယ်။ သိပ်လည်း မပွားရဲဘူး။ ၆၆ ကြီးကလည်း အာမခံ မရဘူး ဆိုတော့လေ။
မောင်ကေတို့ သိထားတဲ့ သင်္ကြန် ဆိုတာကတော့ အရင်တုန်း သင်္ကြန်မင်းသား ကြီးတွေ(ကွယ်လွန်သူ ဓာတ်ရှင်မင်းသားကြီး ဇော်ဝမ်းပြောတာ မဟုတ်) က သူတို့ ဇနီးနဲ့ ဖဲကြိုးဖြတ်၊ သေနတ်ဖောက် ဖွင့်လှစ်ပေးမှ မောင်ကေတို့ အတာသင်္ကြန်လေးက အထမြောက်တာ။
နားရှုပ် သွားသလား အို အသင်စာရှုသူ။ မရှုပ် လိုက်ပါနဲ့နော်။ ဒါ ရုံးပိတ်ရက် ထုတ်ပြန်ချက် မဟုတ်လို့ပါ။ သင်္ကြန်မင်းသား ကြီးဆိုတာ ထိုစဉ် အချိန်အခါမှာ မြို့တော်ဝန်(မြို့ရှိ လူတွေက သူ့ဝန် ထမ်းနေရလို့ မြို့တော်ရဲ့ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုး ဖြစ်နေခြင်းကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်) လို့ဆိုသူများကို မောင်ကေ အမည်ပြုထားမိတာ။
ဟုတ်တယ်လေ။ သူတို့ လင်မယား(သူက ကြွလာရင် သူ့မဟေသီ(ဘာရေးရာ ညာရေးရာ တံဆိပ်တွေက ပါသေး)ပါ ခေါ်လာ တတ်တယ်) ခွင့်ပြုမှ တမြို့လုံး သင်္ကြန်ကျ ရတာ မဟုတ် ခဲ့လို့လား။
အောင်စည်တော် ဘိတ်သိက်ဆရာများကလည်း ဘိ သိတ်ကလေးနဲ့။ ယိမ်းမမလေးများကလည်း လည် ပင်းမှာ ပြောင်ပြောင်ဆွဲကြိုးလေးတွေ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီနဲ့ တူးပို့ တူးပို့ကြ တာများ။ နိုင်ငံတော် အဆိုကျော် ကြီးတွေများ ပါမစ် ကြိမ်လုံးလေးနဲ့ ခေါ်ထားရော သင်္ကြန်ကာလ ၄ရက်လုံး ပြုံးပြုံး ရွှင်ရွှင်နဲ့။
ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ်ဆောင်း၊ ရေဘင်မျက်မှန်တပ်။ အုန်းပင်ပုံပါတဲ့ ကမ်းခြေဝတ် ရှပ်အကျီတွေနဲ့ ဗီအိုင်ပီ ဆိုလားဘာလား၊ ဆုတွေချနေတဲ့ မျက်နှာတွေကို မောင်ကေတို့ ခုထိ အလွတ်ရနေတုန်း။
သူတို့အကြောင်းပြောတာနဲ့ မောင်ကေတယောက်လည်း ဒါက ဘယ်လူကြီးမဏ္ဍပ်၊ ဒါက ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သား မဏ္ဍပ်။ ဒါက ဗီအိုင်ပီ စတဲ့ခေတ်ကို သင်္ကြန် အကြောင်းစဉ်းစားရင်း ရောက်နေမိတယ်။
မောင်ကေနောက်ထပ်တွေးမိတာ တခုပြောပြချင်သေးတယ်။ သိကြားမင်းဆင်းတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီနှစ်တော့ ဆင်းမဆင်း မောင်ကေ လိုက်ရှာမလားလို့။ ဒီလောက် လုံခြုံရေးမဲ့နေတဲ့ကာလကြီးမှာ သူဆင်းလာပါ့မလားပေါ့။
မကြာသေးမှီ ကာလကမှ NLD ဥပဒေ အကြံပေး ဦးကိုနီ၊ တက္ကစီဆရာ ကိုနေဝင်းတို့ နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်ကြီးမှာ လုပ်ကြံခံ ရ။ မန္တလေးမှာလည်း လူမြင် ကွင်းကြီး သေနတ် ကျည်ဆန် မှန်ပြီး သေခဲ့ရတဲ့ ဦးရဲဝင်းလို ကိစ္စရပ်မျိုးတွေ။ ရန်ကုန်မြို့ ၅၁ လမ်းမှာ မနက်ခင်းကြီး အနုကြမ်းစီး အသတ်ခံ ရတာတွေ။ အို စုံလို့။ ဘယ်လိုလဲ သိကြားမင်း။ သင့်လုံခြုံရေး အတွက်ရော ဘယ်နိုင်ငံက သက်တော်စောင့်တွေ ငှားမလဲ။ မောင်ကေ သိချင်နေမိတယ်။
သင်္ကြန်ဆိုတာကလည်း မောင်ကေတို့တိုင်းပြည်က သိတော်မူတဲ့အတိုင်း၊ အရက်သေစာ၊ မူးယစ်ဆေး ပေါမှပေါ တိုင်းပြည် လေ။ သင်္ကြန်တွင်း သူသူငါငါ သောက်စားထားကြတော့ လူငယ်တို့ဘာဝ၊ကျည်ဆန်တွစ်၊မတော်တဆတို့နဲ့ သိကြားမင်းကို လက်စတုံးပစ်လိုက်ကြမှာ စိုးလို့ပါ။
ပြီးတော့ မောင်ကေ စိတ်အထင် သိကြားမင်းက ချွန်ချွန်လက်လက်နဲ့ဆိုတော့ သိကြားမင်းကို ဘာသာခြားထင်မှာ စိုး ရိမ်ရပြန်တယ်။ ခု ဒီမှာ အမျိုးဘာသာ စောင့်ရှောက်သူတွေ များတယ်လေ။ သိကြားမင်းပုံကို စကရင်ရှော့ရိုက်ပြီး မြန် မာ့သင်္ကြန်ကို ဖျက်ဆီးဖို့လာနေတဲ့ မျိုးဖျက်ဘာညာ တံဆိပ်တပ်လိုက်လို့ဖြင့်။ အို ပြောရင်းဆိုရင်း ပါးစပ်တိတ် ပိတ်ထား တာ ကောင်းပါတယ်။
တရားအားထုတ်(တရုတ်အားထား) နေရတဲ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးကလည်း ဝေဝေဝါးဝါးရယ်လေ။ တော်ကြာ သေနတ်ဆွဲလု လို့ ဆိုပြီး AK7 လောက်နဲ့ ဆွဲချလိုက်မှဖြင့် သိကြားမင်းရယ် မဆင်းလာပါနဲ့။
မောင်ကေစကား ယောင်လို့များ သိကြားမင်း မစဉ်းစားရင်ဖြင့် ခုထိ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ကလည်း ၅ ရက် လိုလို ၁၀ရက်လိုလို ဆိုတော့ သိကြားမင်းဆင်းဖို့ မောင်ကေတို့ကလည်း အတာရေအိုး ပြင်ရနဲ့ သိကြားမင်းလည်း အပြန်ခက်နေလိမ့်မယ်။
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး၊ လှိုင်သာယာကားကွင်းတို့ ရွှေညောင်ပင်ဝင်းတို့လည်း ဝန်ထမ်းတွေ တက်သုတ်ရိုက် ခုံလက်မှတ် ဖြတ်နေကြနဲ့တင် သိကြားမင်းခုံရဖို့မလွယ်ဘူးလေ။
အရင်လို ကားလက်မှတ်အရောင်းဌာနတွေကို ဗီအိုင်ပီဆိုပြီးလည်း ခု ရောင်းခွင့်မပြုတော့ဘူးတဲ့လေ။ ဟိုလူကြီး ဒီလူကြီး လက်မှတ်ပါရုံ၊ ဖုန်းဆက်ပြောပေး ရုံနဲ့တင် မချောမွေ့နိုင်တာ သေချာသလောက်ပဲ။
ဘဏ်တွေကလည်း ဟိုတခုက ဖွင့်၊ ဟိုတခုက မဖွင့်နဲ့ဆိုတော့လေ။ မလွယ်ပါဘူး သိကြားမင်းရယ်။ ဒီနှစ်တော့ ဆင်း မလာပါနဲ့တော့။ သိကြားမင်းလည်း မဆင်းအားလို့ ဆိုပြီး မလည်ရှုပ်ထုတ်ပြန်ချက်လို သင်္ကြန်စာထဲ ထည့်ရေးလိုက်ပါ တော့။
ဓါတ်ပုံ ဒီဇိုင်း- ကျော်မျိုးထိုက်/ ဧရာဝတီ
From : ဧရာဝတီ by ငြိမ်းချမ်း
Originally published at - https://burma.irrawaddy.com/article/2017/04/11/133348.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, April 11, 2017 No comments:
သူလည်းလေ ဘုရားခိုးမို့ (မတော်တဆ)
မောင်ကေတို့ နေတဲ့ မြို့နယ် တွေမှာလည်း ခု တလော တရား ပွဲတွေ တရပ်ကွက်နဲ့ တရပ်ကွက် စင်ပြိုင်လုပ် လာကြတာ သတိ ထားမိတယ်။
ကောင်းတာပေါ့။ တရားပွဲ များလာတာ။ မင်း ဘာပြုတုန်း။ ဘာမျှ မပြုပါဘူး။ ပြုတာက တရားပွဲမှာ အဖေနဲ့ သမီး၊ အမေ နဲ့ သား မောင်နှမတွေ မပြောဝံ့တဲ့ စကားတွေ ထည့်ဟောတော် မူတာတော့ မကောင်းဘူး။
ဟုတ်တယ်လေ၊ စဉ်းစားကြည့် ခြင်ထောင် ခန်းတွေထိ ဘယ်အုပ်ထိန်း သူက လိုက်ပါ ရလို့လဲ။ မောင်ကေ တို့တောင် ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ယူ ထားတာ။ ကိုယ်ကြိုက်မှ အဖေ အမေနဲ့ ပေးတွေ့ ကြတာ။
ခုတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ။ ကိလေသာမီး သတ်ပါ ဆိုမှ မီးပိုလောင်အောင် မီးစာ ထိုးထည့်နေတော့တာ။ အုပ်ထားတဲ့ အဖုတ်ကိစ္စ အဲလေ အထုတ်ကို ဘယ်သူကမှ မပေးရဘဲ တာဝန် ရှိသယောင်ယောင်နဲ့တည်းခိုခန်းထိ တက်စစ်တဲ့ အဆင့် ရောက်လာလေပြီ။
ခွေးမယူချင် အသောက် အစား လွတ်လေးတွေ လွှတ်လိုက်မယ်လည်း မြူဆွယ်သေး။ အော် ဒုက္ခဒုက္ခ။ ကြားဖြတ် ကြော်ငြာ ထိုးလိုက်သေးတာနော်။ ဘယ်လို ဘာသာရေးမျိုး ပါလိမ့်။ မောင်ကေတို့တော့ ဉာဏ်မမှီ။
ထားပါ။ မောင်ကေ ခုပြောမှာက ရယ်စရာ။ တကယ် တကယ်ရီရတာ။
အများသိတော် မူတဲ့ အတိုင်း နိုင်ငံတကာ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ် ကြီးမှာ NLD ပါတီရဲ့ဥပဒေ အကြံပေး ဦးကိုနီ သေနတ်ပစ်သတ် လုပ်ကြံခံရပြီး နိုင်ငံ သားကောင်းကြီး ကိုနေဝင်းပါ သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ် လုပ်ကြံ ခံခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စ။
ပြည်သူတော်တော် များများထိတ်လန့် တုန်လှုပ် ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြီး။ ဘယ်မေ့ ကြပါ့မလဲ။ မမေ့ကြ သလို လူသတ်သမား နဲ့အပေါင်းအပါ သတင်းတွေကို လူမှုကွန်ရက်မှာ သိသမျှ ကြားသမျှ ပြန်လည် Share နေကြတာ။
မောင်ကေ တခုဖြတ်ပြောပြချင်သေးတယ်။ ဒီလူသတ်သမားတွေကိုပဲ လူမှုကွန်ရက်မှာ အရိုးစည်းရိုးထိုးမယ်လေး ဘာ လေးလူတစုက ကျေးဇူးတင်တယ်တို့၊ သူရဲကောင်း ကြီးတို့ သာသနာ ကာကွယ်သူ ကြီးတို့ တံဆိပ်တွေ တပ်ပေးတာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်တယောက် ဖြစ်တဲ့ မောင်ကေတော့ နားမလည် တတ်အောင်ပင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ။ လူသတ်တဲ့ ကြည်လင်းတို့ အောင်ဝင်းဇော်တို့ ၂ယောက်က ဘုရား ခိုးရောင်း ဝယ်မှုနဲ့ ထောင်ကျတွေ။ ဘုရားခိုးတဲ့ သူက လူတယောက်ကို အကြောင်းမဲ့ သတ်ဖြတ်တာ သူရဲကောင်း တဲ့လား။ သာသနာ ကာကွယ် တာတဲ့လား။
လူမှုကွန်ရက်ပေါ် အတည်ပြုချက်ပြု ရေးတင်သူက သင်္ဃန်းခြုံ ထားတဲ့ အများသိ ဝဇီပိတ် ကိုယ်တော်။ ဘာသာခြားကို သတ်ဖြတ်ဖို့ ဘယ်ဘုရား ကများ ညွှန်ပြတော် မူသလဲ ဆိုတာ မောင်ကေဖြင့် ဘုတ်အုပ်တွေ လှန်နေ မိတယ်။
ခုလည်း လေဆိပ်မှာ လုပ်ကြံမှုကြီးကို လူငယ်တို့ ဘာဝ ကျူးလွန် ကြပြီးနောက် ရုံးချိန်းတော် ၃ ကြိမ်မြောက်မှာတော့ အူတက်ရတဲ့ ဟာသတွေ ကြားရ ပါတော့တယ်။
ပထမနှစ်ကြိမ်လုံးမှာတော့ လူသတ်သမားနဲ့အပေါင်းအပါများကို ပြည်ထဲရေးက ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ဂရုဏာမျက်လုံးတွေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ပြည်သူတွေက အမျိုးမျိုး သြ ဘာပေးခဲ့ကြရပါသေးတယ်။
တတိယမြောက်ရုံးချိန်းမှာတော့ လူသတ်သမားနဲ့ရှေ့နေများကသာ မီဒီယာများကိုဖြေကြားခဲ့ပြီး ယခုတပတ်မှာတော့ လူသတ်သမားကြည်လင်း ကိုယ်တိုင် စပြောလာ ပါတော့တယ်။ အောက်တွင် ရှုပါ။
သတင်းခေါင်းစဉ်က “ဦးနေဝင်းကို သေနတ်ဖြင့် မတော်တဆ ပစ်မိခဲ့ခြင်းဟု ကြည်လင်း ထွက်ဆို” ပါတဲ့။ အော် .အော့..အော်။
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရသည့် အမှုတွင် ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၀၂ လူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်၍ တရားလို ရဲအုပ် မိုးနိုင်ကို မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က စစ်ဆေးစဉ် ကြည်လင်း၏ ရှေ့နေ ဦးကျော်ကျော်ထိုက်က ကြည်လင်အား ပြောစရာ ရှိသေးလားဟု မေးခဲ့ရာ ကြည် လင်းက အငှားယာဉ်မောင်း ဦးနေဝင်းကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်မိသည်မှာ မတော်တဆ ဖြစ်ကြောင်း တရား သူကြီးရှေ့တွင် ထွက် ဆိုခဲ့သည်”ဆိုတဲ့ သတင်းကို မောင်ကေ တယောက် ဟာသတွေ တခုပြီး တခုကို ဘယ်ကံကြောင့်များ ကြားမိပါစ တွေး မိတယ်။
သူတော်ကောင်းသာသနာ့အာဇာနည်ကြီး ပြောတဲ့စကား အပြည့်အစုံက ဒီလိုပါ။ “ကျနော့်အနား လူ၅ယောက် ၆ယောက် အနားရောက်လာပြီး ဝိုင်းထိုး ဝိုင်းကြိတ်ကြလို့ သေနတ်က ဒိုးဒေါက်ဆို ကျည်ထွက်သွားတာ”။
အင်း အင်း အင် (ဘာမှ မဟုတ်ပါ မောင်ကေ သတင်းထဲက ကြည်လင်းအသံကိုကြားပြီး အဲလိုဖြစ်သွားတာပါ။) ဟုတ်သား ပဲ။ တကယ်လို့ လေဆိပ်မှာ ဦးနေဝင်းနဲ့ တကွ နိုင်ငံ့ သားကောင်း တက္ကစီ သမားကြီးတွေက ဘယ်က ဘယ်လို ကြည်လင်း ပြေးလမ်းကြောင်း ပိတ်ရပ်နေ ကြတာလဲ။ မိုက်လိုက်တဲ့ လူတွေဗျာ။
လူငယ်ဘာဝ မျိုးချစ်အစွန်းရောက်နေကြတာကို အုတ်ခဲနဲ့ကောက်ပစ်လို ပစ်။ ဒါတောင် အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးကြီး၊ အရာရှိ ဟောင်းနဲ့ လုပ်ငန်းရှင် ဘုရားဒကာကြီးတွေ ကွပ်ကွဲခဲ့ရတာနော်။
ကြည်လင်းရဲ့ရှေ့နေဆိုသူကလည်း ကျမ်းကျိမ်ပြောတာလားဘာလားတော့ မောင်ကေ မသိ။ နားထောင်ကြည့်ပါဦး။ “ “ကြည်လင်းသည် ဦးကိုနီကိုပစ်ခတ်ပြီး လမ်းမပေါ် ပြေးရာမှ လူအများကို ထိခိုက် မိမည်စိုး၍ ၂ကြိမ်တိုင် ဒူးထောက်လက် နက်ချ ခဲ့ကြောင်း”ပါတဲ့။
ဘယ်လောက် နူးညံ့သိမ်မွေ့လိုက်တဲ့ လူသတ် သမားလဲ။ တခါမှ မမြင်ဘူးတဲ့ သူတယောက်ကို သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်လိုက် ဖို့ဆိုတာ ဒီလို သာသနာ ကာကွယ်သူ ဘယ်ဖြစ်နိုင် ပါ့မလဲ။ ဦးကိုနီကို မသတ်ခင်တောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေထိုင်ခဲ့တာ လေ။
ကြည်လင်းစကားထပ်သရုပ်ခွဲကြည့်ပါဦးမယ်။ “လူ၅ယောက် ၆ယောက် အနားရောက်လာပြီး ဝိုင်းထိုး ဝိုင်းကြိတ်ကြလို့ သေနတ်က ဒိုးဒေါက်ဆို ကျည်ထွက်သွားတာ”။
လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို မောင်ကေခေါင်းထဲ ထင်ရှားခဲ့လေပြီ။ဟုတ်တယ်လေ။ ဦးကိုနီနဲ့ကိုနေဝင်းကို သတ်တဲ့သေနတ် တွေက ဘယ်လိုသေနတ်တွေဆိုတာ မောင်ကေတို့လို စစ်ရေးအမြင်မရှိသူတွေက ဘယ်သိနိုင်ကြပါ့မလဲ။ အဲဒီသေနတ်တွေက ကိုင်တဲ့သေနတ်ပိုင်ရှင်တွေကို ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ပြီဆိုတာနဲ့ မတော်တဆ /Twist/ အ မျိုးမျိုးသောနည်းနဲ့ ကျည်ဆန်တွေ ထွက်လာတတ်တာကို မောင်ကေတို့မှ သိမထားတာ။
မောင်ကေလည်း အဲလို သေနတ်လေးတလက်လောက် လိုချင်မိသား။ဟုတ်တယ်လေ။ ကိုယ့်ကိုလူဆိုးတွေ ဝိုင်းဝန်း ထိုးကြိတ် နေပြီဆို သေနတ်လေးက မောင်ကေကို ကယ်တဲ့အနေနဲ့ မတော်တဆ ကျည်ဆန်တွေနဲ့ရှင်းပေးမှာ ဆိုတော့လေ။
စကားလုံးလေးတွေကလည်း ခုတလော အရမ်းကောင်းကြတာ မောင်ကေ သတိထားမိနေတယ်။ မြန်မာစာနဲ့ကျောင်းပြီး ထား တဲ့မောင်ကေတောင် သူတို့လို စကားလုံးတွေ သုံးတတ်ပါဘူး။ တော်တော်ရှော်တဲ့ မောင်ကေ။
ခုလာမယ့် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့မှာတော့ မျက်လှည့်ပွဲကြီး (အဲလေ အာဇာနည်စန်းစန်းနဲ့ရောသွားလို့) စတုတ္ထမြောက် ရုံးချိန်း ကြီးမှာတော့ လူငယ်လေးတွေက ပရိသတ်ကြီးကို ဘယ်လို စကားအသစ်အဆန်းများနဲ့ ဖျော်ဖြေမလဲဆိုတာကို မောင်ကေ တယောက် စိတ်စောလော နေမိသေးတော့တာ။ မတော်တဆနော်။
Originally published at - https://burma.irrawaddy.com/article/2017/04/07/133139.html
အာရှကျားဆိုတာ ဘယ့်နှာသို့သော သတ္တဝါကို ပြောတာတုံး ခင်ဗျတဲ့။ အဲဒါ စုံနံ့သာမြိုင်တောထဲက သတ္တဝါတချို့က ဂျက်ကို မေးဖူးတဲ့ မေးခွန်းပါ။ သမင်လည်း ပါမယ်ထင်ပါရဲ့။ ဒရယ်လည်း ပါ မယ်ထင်ပါရဲ့။ ယုန်လည်းပါမယ် ထင်ပါရဲ့။ အဲသည့် မေးခွန်းကို မေးကြတဲ့ သတ္တဝါတွေကို ပြော တာပါ။
ဟုတ်တာပေါ့။ ကျားပဲဥစ္စာ။ ဘာကျားရယ်၊ ညာကျားရယ်ဆို ပြီး ခွဲစရာလိုသေးရဲ့လားဆိုတာ မျိုးပါ။ ကိုယ်ပေါ်မှာ အဝါအစင်း ကျားကြီးတွေပါတဲ့ သတ္တဝါမှန် ရင် ကျားလို့ခေါ်နေကြတဲ့ ဟာပဲ ဥစ္စာ။ ဘယ့်နှာကြောင့် အာရှကျား ရယ်၊ ဘာရယ်နဲ့ ခွဲခြားခွဲခြားကြီး လုပ်ရလေသလဲပေါ့။
ဂျက်က ရှင်းပြရပါတယ်။ တင်စားတာလို့။ ကျားဆိုတာ လျင်တယ်၊ မြန်တယ်၊ အကွက်ချောင်း တယ်၊ ပိုင်ရှင်ခုန်အုပ်တယ်၊ စား တယ်လို့။ အဲသလိုပဲ လူတွေထဲမှာ လည်း အနို့ကလို အကျင့်စရိုက်ရှိ သူကို ဒီလူက ကျားပဲကွာ ဘာညာနဲ့ ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်လို့။
တိုင်းပြည်တွေ၊ နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်း လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ကြီးပွားမယ့် အကွက်ကိုချောင်းကာ ပိုင်တာနဲ့ အခွင့်အလမ်းကို အရအမိဆုပ် ကိုင်သွားတဲ့နိုင်ငံကို ကျားလို့ ခေါ် တာပါလို့။
အာရှကျားဆိုတာက တော့ အာရှတိုက်မှာ ရုတ်တရက် အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ပွင့်လန်းပြီး ရှေ့ကို ရောက်သွားတဲ့ နိုင်ငံကို အာရှကျားရယ်လို့ တင်စားခေါ် တာပါလို့။
အဲသမှာ ယုန်ကလေးက ထင်ပါရဲ့ ဂျက်ကို ပြန်ပြောတာ။
‘‘ဟုတ်လိုက်လေဗျာ...စုံနံ့ သာမြိုင်တောထဲက ကျားက လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းဗျ ဆရာကြီးဂျက်ရ’’ တဲ့။
ဂျက်က ဘယ်ကျားတုံးဆို တာကို မေးရပါတယ်။ ယုန်က ဘယ်ကျားရှိရမတုံး ဂျက်ဆရာရဲ့ တဲ့။ တောကို မြေခွေးက ဦးသျှောင်လုပ်ခဲ့စဉ်တုန်းက တောလီဒါ (Leader)တွေ ထဲမှာ နေရာရခဲ့တဲ့ ကျားပဲပေါ့တဲ့။ ခုနက အာရှကျား ရယ်လို့ တင်စားပြောခဲ့တဲ့စကား ထဲက ကျားအတိုင်းပါပဲဗျာတဲ့။ ချောင်းမယ် မြောင်းမယ်၊ ပုန်းမယ် ဝပ်မယ်၊ ပိုင်ရင် ခုန်အုပ်မယ်၊ လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ ကိုက်မယ် ခဲမယ်၊ အသွေးတို့အသားတို့ကို ဝါးမယ် မျိုမယ်။ စုံနံ့သာမြိုင်က ကျားက လည်း အဲသည့် အတိုင်းပါပဲခင်ဗျ တဲ့။
ဆရာကြီးဂျက်တင်စားပြော တာပါလို့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားထဲက ကျားအတိုင်းပါပဲတဲ့။
‘‘နေပါဦး... တစ်ကွက် လောက်၊ တစ်ချက်လောက် အဲ သည်စုံနံ့သာမြိုင်က ကျားရဲ့သရုပ်ကလေး ဖောက်သည်ချပါ လား’’လို့ ဂျက်က တောင်းဆိုမိပါ ရဲ့။ ဘယ်နေမလဲ။ ပြောကြတော့ တာပေါ့။
စုံနံ့သာမြိုင်က ကျားရဲ့ သရုပ်ကလေးကို ဖော်ပြချင်တဲ့ နှစ်က မုန်တိုင်းတွေ အကြီးအကျယ် တိုက်တဲ့နှစ်ဆိုလား။
ဧရာမမုန်တိုင်းကြီးတဲ့ခင်ဗျ။ တစ်တောလုံး သစ်ပင်တွေ အပိုင်း ပိုင်းအပြတ်ပြတ်နဲ့တဲ့။ အလဲလဲအပြိုပြို။ ရေတွေက လျှံတက်လာ လိုက်တာ တော်ရုံ တန်ရုံအပင် တွေ ထိပ်ဖျားကလေးတွေပဲ ကျန် တော့တယ်။ အကုန်မြုပ်။ သေတာပေါ့။ ဘာပြောကောင်းမလဲ။
သတ္တဝါကလေးတွေ၊ သတ္တဝါကလေး တွေဆိုတာ။ အဲသည့်နှစ်က က ဆုန်စိုင်းလိုက်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးဟာ တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့ စုံနံ့သာမြိုင်သမိုင်း မှာ အရိုင်းဆုံး သဘာဝဘေး အန္တ ရာယ်ကြီးပါတဲ့။ အသက်(၆၀)နီး နီးရှိပုံရတဲ့ ဆင်ကြီးက အဲလီးဖင့် (Elephant)တွေရဲ့နေ့စဉ်မှတ် တမ်းမှာ အနို့ကလို မုန်တိုင်းမျိုး တစ်ခါမှ မကြုံခဲ့ဖူးကြောင်းပါတဲ့။ ထားတော့။
ပြောချင်တာက စုံနံ့သာမြိုင် က ကျားကိစ္စ။
အဲသည့်မုန်တိုင်းကြီးအပြီး မှာ ကျားဟာ ဘယ့်နှယ်သော သတ္တဝါဆိုတာ ပေါ်လွင်သွားခဲ့ရ တာပါ။
လူ့ရွာအသီးသီးက အကူအ ညီတွေဟာ စုံနံ့သာမြိုင်ရှိရာဆီ လှိမ့်ဝင်လာဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ကာ လပေါ့။ အဲသမှာ တိရစ္ဆာန်ကလေး တွေကို ကရုဏာသက်တဲ့ လူ့ကမ္ဘာက ရောက်လာတဲ့ အကူအညီကို လက်ခံဖို့ရာ ကျားကို တာဝန်ပေး လိုက်တာပါ။
စုံနံ့သာမြိုင်ကို မယုံစရာ စတိုင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ဥက္ကဋ္ဌတဲ့ခင်ဗျ။ အဲသမှာ စုံနံ့သာ မြိုင် ကျားရယ်လို့ သရုပ်ပေါ်လာ ခဲ့ရတာပါ။
တိရစ္ဆာန်မိသားစုတွေကို ခြင်ထောင်တစ်လုံးစီပေးဝေချင်သ ဗျာတဲ့။ အဲဒါလူ့ရွာတစ်ခုက ကမ်း လှမ်းလာတဲ့ စကားပေါ့။ အဲသမှာ ကျားကို တိရစ္ဆာန်မိသားစုစာရင်း တင်ပြခိုင်းလာတာပါ။
ပိုင်သဗျာ။ တောမှာ တကယ်ရှိတာက အလွန်ဆုံးရှိလှ တိရစ္ဆာန်မိသားစုငါးထောင်ပေါ့။ တစ် သောင်းပေါ့။ ကျားက နှစ်သောင်း ဆိုပြီးရေးတင်လိုက်သဗျ။ ခြင် ထောင်မှ မဟုတ်ပါဘူး။
တိရစ္ဆာန် အသုံးအဆောင်အရေအတွက် နှစ်ဆ။ စုံနံ့သာမြိုင် မယုံစရာစတိုင် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဥက္ကဋ္ဌ ကျားရှိရာဆီ ဝင်လာတဲ့ အရေအ တွက်။ တစ်ဝက် တိတိကို မုန်တိုင်း မိတိရစ္ဆာန်တွေကို ပေးဝေ၊ တစ် ဝက်တိတိကို ကျားဂိုဒေါင်ထဲမှာ သိမ်းထား။ အဲဒါ အာရှကျားမ ဟုတ်တဲ့ စုံနံ့သာမြိုင်ကျား။
ကျားရဲ့လုပ်ပေါက်ကလေး တစ်ခုရှိသေးသဗျ။ မုန်တိုင်းအပြီး မှာ ငါးရှာစားတဲ့ ဖျံကလေးတွေကို လှေကလေးတွေ ဝေပေးချင်တယ် လို့ လူတွေက ကမ်းလှမ်းပါတယ်။
ဖျံတစ်ကောင် လှေတစ်စင်းပေး လှူချင်သပေါ့။ လှေတစ်စင်းငွေ နှစ်သောင်းဆိုပါတော့။ လှေလို တဲ့ ဖျံတစ်ကောင်စီကို ငွေနှစ် သောင်းစီပေးဝေလိုသပေါ့။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လှေလုပ်ယူပေါ့။
အဲသမှာ ကျားက ဝင်ပြီးစီမံ ခန့်ခွဲပေးတာပါ။ လှေဘယ်နှစင်း ငွေဘယ်လောက်။ သူ့ကိုပေး။ သူ လှေလုပ်ပေးမယ်။ ပြောရရင် မုန် တိုင်းပေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့ ငါးရှာစားမယ့် ဖျံကလေးတွေဟာ သူတို့ရမယ့် လှေတန်ဖိုးကို ကျားက ထုတ်ယူ သွားတာ ခံလိုက်ရပြီး ကျားလုပ် ပေးတဲ့ လှေတွေကို ယူလိုက်ကြရ တာပါ။
တကယ့်ကို ကျားသားမိုး ကြိုးလှေပါ။ ဘုရားစူးမိုးကြိုးပစ် လှေပါ။ အံ့သြကုန်နိုင်ဖွယ်လှေ ပါ။ သစ်ဆွေး သစ်ညံ့ သစ်ကွေး သစ်ကောက် သစ်ပွ သစ်ရွတွေနဲ့ ဖြစ် ကတတ်ဆန်း လုပ်လွှတ်လိုက် တဲ့လှေ။ တန်လှတစ်သောင်းပေါ့။ အဲသဟာ စုံနံ့သာမြိုင်က ကျားရဲ့ လုပ်ကွက်။
ဆေးတွေ၊ ဆေးတွေ။ တိရစ္ဆာန်ထု ကျန်းမာရေးအတွက် လူတွေက ပေးတဲ့ ဆေးတွေက လည်း နည်းတာမှ မဟုတ်တာက လား။ အားဆေးတွေရော၊ ကာ ကွယ်ဆေးတွေရော၊ ကုသမှုဆေး တွေရော။ စုံနံ့သာမြိုင်တောထဲက တိရစ္ဆာန်တွေအတွက်တဲ့။ လူတွေ က ပေးတာ။
ကျားကပဲ လက်ခံသဗျ။ ကျားက တောကိုလည်း ဝေငှပေးပါသ ဗျ။ အနို့သော်...။ ဟုတ်ကဲ့။ မူလ ပေးတဲ့ ဆေးတွေက အင်္ဂလန်က ထုတ်တာ၊ ဂျာမနီက ထုတ်တာ၊ သြစတြေးလျက ထုတ်တာ။ သို့ လင့်ကစား ကျားက တရုတ်လို နိုင်ငံက လာတဲ့ ဆေးနဲ့ လဲကာ တိရစ္ဆာန်တွေကို ပေးလေတာခင် ဗျ။ မုန်တိုင်းအလွန်မှာ ကျားဟာ ဝုန်းခနဲ ဒိုင်းခနဲ စုံနံ့သာမြိုင်ရဲ့ထိပ် သီးသူဌေးတွေထဲမှာ ပါသွားတာ ဘာဆန်းတာမှတ်လို့။
အာရှကျားတဲ့။ ဝပ်တွားငြိမ် သက်ပုန်းအောင်းချောင်းမြောင်း ခုန်အုပ်ကိုက်ဖြတ်။ စုံနံ့သာမြိုင်က ကျားကလည်း ဘာထူးတာမှတ်လို့။
ဒါပေမဲ့ ကျားမှန်းသိပါလျက် အဲသည့်ကောင်က ကျားနော်လို့ ပြောရတာကဖြင့် နည်းနည်းက လေး အူကြောင်ကြောင်နိုင်သလို ပါပဲ။
မတတ်နိုင်ပါဘူးလေ။ အဲ သည့်အကောင်က ကျားလို့တော့ ပြောရပေမှာပေါ့။ သူ့ဘာသာသူ ကျားဖြစ်ဖြစ်၊ မဖြစ်ဖြစ်။ ဟုတ်ဘူး လား။
From :7day daily - By: ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/89557
ထူးထွေတည့် အံ့ရာသော် ပါကလား ဂျက်ဆရာရေဟု ဝံပုလွေ ကြီးက မြည်တမ်း လိုက်စဉ်မှာ အဲသည့် ဝံပုလွေကြီးကို ဂျက်ငဲ့ကြည့် လိုက်တော့ နံနက်ခင်း သတင်းစာ တစ်စောင်ကို ဖတ်လက်စ တန်းလန်းကြီး ခင်ဗျ။
အဲ...တိရစ္ဆာန်နေ့ စဉ်တော့ မဟုတ်ဘူး။ လူသားနေ့ စဉ်သတင်းစာ။ စုံနံ့သာမြိုင်က တိရစ္ဆာန်တချို့က အနို့ကလိုပဲ လူ့ အရပ်က ထုတ်ဝေတဲ့ သတင်းစာ တွေကို ယူယူပြီး ဖတ်နေကျ။
ဒုတိယမ္ပိ နောက်ထပ်တစ်ခါ သတင်းစာ ဖတ်သူ ဝံပုလွေကြီးက ထပ်မံမြည်တမ်း လိုက်တဲ့ အခါမှာ တော့ မိမိကျွန်ုပ် ဂျက် အေးတိ အေးစက် လုပ်မနေသာ တော့ပါဘူး။
ဟောသမှာ ကြည့်လော့တဲ့ ခင်ဗျ။ ဂျက်အမေးကို ဝံပုလွေက ဂျက်လက်ထဲ သတင်းစာ ရောက်အောင် ထိုးထည့်ပေးရင်း ခပ် ဆောင့်ဆောင့် ခပ်အောင့်အောင့် ကလေးဖြေပါတယ်။
သတင်းစာထဲမှာက ကြော် ငြာတစ်ခု။ မကြာခင် လူ့ဘဝကြီး ကို စွန့်ခွာသွားရဖို့ရာ သေချာနေ ပြီဖြစ်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာရှင်တစ် ယောက်က ကြော်ငြာထားတာ။ လိုရင်းက သူ လူ့ဘဝကို စွန့်ခွာ သွားဖို့ ရက်တွေဟာ တဖြည်း ဖြည်းနီးကပ် လာနေပါပြီတဲ့။ အဲဒါ ပေးစရာ အကြွေးတွေရှိရင် ပေး သွားချင်ပါ တယ်တဲ့။ ဒါ့ကြောင့် ဘဝတာ တစ်လျှောက်လုံး သူနဲ့ ပတ်သက် ခဲ့ဖူးသူ မည်သူမဆို သူ့ ထံက တစ်ခုခုပြန် ရစရာရှိနေပါက လာရောက် တောင်းဆိုကြပါ ဆိုလား။ မေတ္တာ ရပ်ခံထားတဲ့ ကြော်ငြာ။
ဝံပုလွေကြီး အံ့သြမယ်ဆို ရင်လည်း အံ့သြလောက်စရာ ပေါ့။ ဂျက်တောင် စဉ်းငယ်ခန့်ဆို သလို တွေတွေဝေဝေကလေး ဖြစ်သွားမိတဲ့ဥစ္စာ။
‘‘လူတွေမှာ အနို့ကလို သဘောထားတွေ ရှိတတ်လေရဲ့ အဆွေဝံပုလွေငဲ့၊ စွန့်ခွာမသွားမှီ မှာ လုပ်စရာတွေကို အပြီးလုပ် သွားကြလေ့ ရှိလေရဲ့လေ’’
သတင်းစာကို နောက်တစ်ခါ လှမ်းကြည့်နေတဲ့ ဝံပုလွေကြီးငြိမ် ကျသွားလေရဲ့ခင်ဗျ။
စာရေးဆရာမ ရေချယ်ကာဆန် (Rachel Carson) ကို သိလား လို့ မေးတော့ တိရစ္ဆာန် အရင့်အမာ ကြီးဖြစ်တဲ့ ဝံပုလွေက သိဘူးတဲ့။
အဲဒါ ဆိုင်းလင့်စပရင်း (Silent Spring) လို့ခေါ်တဲ့ တိတ် ဆိတ်တဲ့ နွေဦးလို့ အမည်ရတဲ့ ဘုတ်အုပ်ကြီးကို ရေးတဲ့ ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာမကြီးလေလို့။ သူက ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ဆုံးသွား ရရှာသူပါ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကို ထိန်းသိမ်းဖို့၊ သဘာဝကမ္ဘာ ကြီးဟာ ပိုးသတ်ဆေးဝါး အဆိပ် အတောက်တွေရဲ့အန္တရာယ်က နေ ကင်းစင်ဖို့ ဟောပြော ပို့ချ လုပ် ဆောင် သွားရုံသာမက ရင်သား ကင်ဆာကြောင့် လူ့ဘဝကို စွန့် ခွာရ လုလုနောက်ဆုံး နှစ်တွေမှာ လူတွေ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့ အသိပညာတွေ ရလာဖို့ရာ အဲ့ သည့် ဆိုင်းလင့်စပရင်း ဘုတ်အုပ် ကြီးကို ခပ်သော့သော့ ကလေးရေး ထားခဲ့ရှာတာ ခင်ဗျလို့ ရှင်းပြတော့လည်း သိဘူး ဆိုတာပါပဲ။
‘‘လူတွေဟာ ကိစ္စချောတော့ မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိလာ တဲ့အခါ လုပ်စရာတွေကို မြန်မြန် လုပ်သဗျ...အကြွေးတွေကို ရှင်း သဗျ’’
ဝံပုလွေက ဂျက်ကို ငေးတေး တေးကြီး ကြည့်လို့။
‘‘အနို့...အဆွေ ဝံပုလွေ၊ ဝင် ဂရီ မာရက်တိုင် ကိုကော သိပါစ ခင်ဗျ’’
ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့။ ဝံပုလွေ က သိဘူးပါပဲ။ ကင်ညာနိုင်ငံက အသားမည်းမည်းနဲ့ အမျိုးသမီး ကြီးလေ။ Mrs Wangri Maathai တဲ့။ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုတွေ ဘာတွေရလို့။
သားအိမ်ကင်ဆာ နဲ့ ဆုံးရရှာတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားကြီး။ သစ်ပင်ပေါင်းသုံးသန်းတဲ့ခင်ဗျ။ သူစိုက်သွားခဲ့တာ။ နည်းတဲ့အပင် တွေမှ မဟုတ်တာလားဗျာ။
မသေခင် နှစ်တွေမှာ တစ်ပင်ပြီးတစ်ပင် စိုက်စိုက်သွားလိုက်တာများဆို တာ။
‘‘လူတွေဟာ...မသေခင်အ ချိန်တွေမှာ ကမ္ဘာမြေအတွက်... လုပ်စရာအကြွေးတွေကို နိုင်သ လောက် ဆပ်သွားကြတယ် အ ဆွေဝံပုလွေရဲ့’’
ဝံပုလွေက နှာခေါင်းကို စူပွ စူပွလုပ်ရင်း ဂျက်ကိုကြည့်လို့။
‘‘ကဲ...အဆွေ့ကို ဂျက်မေး မယ်။ ဆိုက်ကားဆရာကြီးတစ် ယောက် သူ့ဆိုက်ကားနဲ့ မန္တလေး မှာ သစ်ပင်တွေ လိုက်စိုက်တာ သစ်ပင်ဒကာကြီး ဦးငွေတဲ့ သိ လား’’
‘‘နေဦး...ရုပ်ရှင်မင်းသား ဘရက်ပစ်(Brad Pitt)ဘူတန်နိုင် ငံ ဟိမဝန္တာမှာ သစ်ပင်စိုက်ဖို့ ဒေါ် လာတစ်သောင်းထုတ်ပေးတာ သိလား’’
‘‘တိုက်တန်းနစ်မင်းသား လီယိုနာဒိုက ဂျာမနီမှာ လိုက်ပဇစ်တောနားမှာ သစ်ပင်စိုက်ဖို့ ငွေ တွေထုတ်ပေးတာသိလား’’
‘‘မင်းသမီး ဂျိတ်ဝီလင်းက အာဖရိက မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံမှာ သစ် ပင်စိုက်ဖို့ ငွေတွေ ထုတ်ပေးတာ သိလား’’
ဂျက်က ဘာမေးမေးဝံပုလွေ က သိဘူးတွေချည်းပါပဲ။ တကယ်က လူတွေ ကမ္ဘာမြေကို စောင့် ရှောက်ဖို့ အခွင့်ရသလို လုပ်ကြ တဲ့ သတင်းတွေက သတင်းစာထဲ မှာ မကြာမကြာပါနေခဲ့မြဲပါ။ တာ ဝန်သိတဲ့လူဟာ လုပ်ခဲ့စရာ၊ ပေးခဲ့ စရာ အကြွေးတွေကို ရှင်တုန်းမှာ လုပ်ဆောင်သွားခဲ့မြဲပါ။ လူ့သ တင်းစာထဲမှာ ပါလာတဲ့ ဝေဒနာ ရှင်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်က ရစ ရာရှိတဲ့ လူတွေ သူ့ဆီကို အကြွေး လာတောင်းကြစမ်းပါ ဆိုတဲ့ ကြော်ငြာကို အခြေပြုပြီးတဲ့သကာလ ဝံပုလွေနဲ့ ဂျက်စကားအပြန် အလှန်နှက်မိခဲ့ကြတာပါ။
‘‘ကဲ...နောက်ဆုံးမေးခွန်း တစ်ခု အဆွေတိရစ္ဆာန်ကို မေး မယ်။ လူတွေက သူ့အကြွေးသူ ပြန်ဆပ်တယ်...သူတို့ နေတဲ့ကမ္ဘာ ကို သူတို့ပြန်ပြုပြင်တယ်... တည်ဆောက်တယ်...တစ်နေအဝင် မသေခင်မှာ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ပေး တယ်။ ယူတယ်။ အဆွေတို့ တိရစ္ဆာန်တွေ စုံနံ့သာမြိုင်ထဲမှာ နေကြရဲ့၊ တောကြီးကောင်းအောင် ဘယ်အကောင်က သစ်တစ်ပင် စိုက်သလဲ ပြောပြပါလား’’
ဝံပုလွေမျက်လုံးကလေး က လယ်ကလယ်နဲ့။ အဖြေက နတ္ထိ ရယ်ကိုး။ မြေခွေးလည်း သစ်ပင် မစိုက်ဘူး။ ခြင်္သေ့လည်း သစ်ပင် မစိုက်ဘူး။ ကျားလည်း သစ်ပင်မ စိုက်ဘူး။ ဆင်လည်း သစ်ပင်မ စိုက်ဘူး။ သဘာဝကပေးတဲ့တော ထဲမှာ သဘာဝအတိုင်းနေပြီး သ ဘာဝကို ဘာမှ ပြန်မလုပ်ပေးတာ တိရစ္ဆာန်တွေပဲပေါ့။ ပြောရရင် ဘယ်အကောင်မှ အကြွေးမဆပ် သွားကြပါဘူးလေ။
From :7day daily - By : ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/84475
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, December 26, 2016 No comments:
လာပြန်ပြီဟ ဖိတ်စာ တစ်စောင်။ အဲသ လိုသာ ကျွန်ုပ် ဆရာကြီး ဂျက်ခမျာ ရေရွတ် လိုက်မိ ခဲ့ပြန်ပါရဲ့။
မိုးလေဝသ ကလေး ကြည်ကြည် လင်လင် ဖြစ်ကာ ကောင်းကင်နဲ့ မြေကြီးမှာ ခြောက်ခြောက် သွေ့သွေ့ ဖြစ်လာပြီ ဆိုကတည်းက လုပ်လိုက်ကြတဲ့ ပွဲလမ်း သဘင်တွေ ဆိုတာ။ စုံနံ့သာမြိုင် ဆိုတဲ့ တောအထုကြီးမှာ ဟောတစ်ခု ဟောတစ်ခုနဲ့။
ဟိုအကောင်နဲ့ သည်အ ကောင် မင်္ဂလာဆောင်ပြန် သတဲ့။ ဟိုသတ္တဝါ ကလေးကို ဘယ့်နှယ် ခေါ်ပါ ညာ့နှယ်ခေါ်ပါ ဆိုပြီး ကင် ပွန်းတပ်ကြ ပြန်သတဲ့။
ဟိုသတ္တဝါ ကြီးဟာ ဘယ်နှကြိမ်မှန်းမသိ မွေး နေ့ကျရောက်ပြန်သတဲ့။ ဟိုသတ္တ ဝါတစ်စုရဲ့ တိရစ္ဆာန်အုပ်စုဖွဲ့စည်းခဲ့တာ ဘယ်နှခါမြောက်ခဲ့ပါပြီတဲ့။ ပွဲတွေပွဲတွေ။ စုံနံ့သာမြိုင်ထဲက တိရစ္ဆာန်တွေ ကျင်းပကြ၊ ဆင်နွှဲ ကြ၊ ချီးမြှင့်ကြ၊ မြှောက်စားကြနဲ့။
ဖိတ်တာပေါ့။ ဂျက်ကွမ်းခြံ ကုန်းကြီးပဲဥစ္စာ။ ကိုယ်တွေက လည်း တိရစ္ဆာန်လောကနဲ့က အ ဆက်အသွယ်မှ တစ်ချက်ကလေး မပျက်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာ။ ဘယ်တိရစ္ဆာန်ပဲ လှမ်းဖိတ် ဖိတ် သွားထည့်လိုက် တာပဲပေါ့။
အဲသမှာ အခုရောက်လာပြန် တာက တိရစ္ဆာန်အသင်းအဖွဲ့ တစ်ခုက ဖိတ်တဲ့စာ။ အပြာရောင် စာအိတ်ကလေးနဲ့။ အေးမြလိုက်၊ ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ။ သိပ်လိုက် လျောညီထွေ ရှိတာပါပဲ။
အသီးအရွက်စား သတ္တဝါ များ ညီလာခံတဲ့ ခင်ဗျ။ အဲသည့် သတ္တဝါတွေက လှမ်းဖိတ်တာ။ ကောင်းတာပေါ့။ စုံနံ့သာမြိုင် တောကြီးထဲမှာ သူတစ်ပါး အသက်ကို လုံးဝ မစားတဲ့ တိရစ္ဆာန် တွေက စုပြီး အသီးအရွက်စား သတ္တဝါများ အသင်းရယ်လို့ ဖွဲ့ထားခဲ့တာကို ဂျက်လည်း သိထား ပြီးသားပဲ ဥစ္စာ။
အခုလို သူတို့တွေ က စုစည်းတွေ့ဆုံပြီး ညီလာခံ သဘင် ဆင်ယင်ကျင်းပကြတဲ့ ဥစ္စာကို ခင်မင်သူဂျက်က သွား ရောက်ကာ ချီးမြှင့်အားပေးရပေ မှာပဲပေါ့။
ဂျက်က ရောက်လာတဲ့ အ သီးအရွက်စားသတ္တဝါများ ညီလာခံဖိတ်စာကလေးပေါ်က ကျင်းပ မယ့်ရက်ကလေးကိုပဲ အသာတစ် ချက်လှမ်းကြည့်ထားလိုက်ကာ ရက်ကလေးနည်းနည်းလှမ်းနေ တာနဲ့ သွားတာပေါ့လို့ စိတ်ထဲက တေးမှတ်ထားလိုက်ပြီး အဲသည် ဖိတ်စာကလေးကို စားပွဲပေါ်မှာ သည်အတိုင်း ပစ်တင်ထားခဲ့မိ လိုက်ပါရဲ့။
အဲသမှာ ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တစ်ယောက်က ကောက် ကာငင်ကာနဲ့ ဖိတ်စာကို ဖင်ပြန် ခေါင်းပြန်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ မေးခွန်းတစ်ခု မေးလာတော့တာ ပါ။
‘‘ဆရာကြီးဂျက် ယင်း၎င်း အနှီအခမ်းအနားကို တက်မှာ လား’’တဲ့။
တက်မှာပေါ့။ တက်ရမှာ ပေါ့။ တက်မယ်လို့ပဲ ဂျက်ကဖြေ တာပေါ့။ ဘယ့်နှာကြောင့် ယင်း ၎င်းကဲ့သို့ မေးခွန်းကြီးကို မေးရ ပေတာတုံးလဗျာလို့ ဂျက်က အ မှားမခံတဲ့ပုံနဲ့ စကားပြန်တဲ့အခါ တစ်ချက်ပါတဲ့ခင်ဗျ။ အခမ်းအ နားကျင်းပတဲ့နေရာကြီးကို သိပ် ပြီးမသတီသလိုဖြစ်မိလို့တဲ့။
ဟောဗျ။ သည်တော့မှ ဂျက် လည်း ကျင်းပမယ့် ရက်ကလေး လောက်ကိုသာ ကြည့်ထားလိုက် ပြီး အဘယ်နေရာဆိုတာကို အမှု မထားလိုက်ခဲ့တာကို လျင်မြန်စွာ
ပြန်ရှုစားမိလိုက်တော့မှ ဟောဗျ လို့ ရေရွတ်မိလိုက်တာကို ဝန်ခံ စမ်းပါရစေ။
ကျင်းပမယ့်နေရာက တော ထဲမှာ သည်လောက်တောင် နေ ရာထိုင်ခင်းရှားရော့သလားလဗျာ လို့ မေးယူရမယ့် နေရာကြီးမှာကိုး။
တောနဲ့ တောင်စွယ်.. ဟို တယ်တဲ့ခင်ဗျ။
တောနဲ့ တောင်စွယ်ဟိုတယ် က တိရစ္ဆာန်ပိုင်ဟိုတယ်ပါ။ ဝံပု လွေနဲ့ သားများပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဟို တယ်ကြီးပဲပေါ့။ ဟိုးအရင့်အရင် ယခင့် ယခင် ကာလများ ဆီက တောကောင်သား မျိုးစုံ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိတဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ စီးပွားဖြစ်လာ ခဲ့တဲ့ ဝံပုလွေတို့ မိသားစုက တည် ထောင်ထားတဲ့ ဟိုတယ်ကြီးပါ။
နာမည်ကလည်း အပျံစား ခင်ဗျ။ တောနဲ့ တောင်စွယ်ဟို တယ်တဲ့။
အခု အသီးအရွက်စားသတ္တဝါများ ညီလာခံဆိုတာက အဲ သည့် တောနဲ့ တောင်စွယ်ဟို တယ်မှာ လုပ်မှာ။ အဲသမှာ ဂျက် လည်း နည်းနည်းကလေးစိတ်လေ သွားတာပါ။ ဝံပုလွေပိုင် ဟိုတယ် မှာ အသီးအရွက်စားသတ္တဝါတွေ ရဲ့ ညီလာခံကို လုပ်မယ်ဆိုလို့။
တော်တော့ကို ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် ဝှဲချီးတဲ့ပွဲကြီးပါပဲဗျာ ရယ်။ ခန်းမကြီးရဲ့ ထောင့်တစ်နေ ရာဆီက စကားပြောစင်မြင့်ရဲ့ နောက်ခံတစ်နေရာမှာ စာတန်း ကြီးကို ရေးချိတ် ထားလို့ပေါ့။
စုံနံ့သာမြိုင်လုံးဆိုင်ရာ အ သီးအရွက်စားသတ္တဝါများ ညီလာခံတဲ့။ အပေါ်မှာက ဟိုတယ်ရဲ့ လိုဂို (Logo)ကလေးနဲ့။ ဝံပုလွေ က အစွယ်ကြီးကို ဖြဲထားတဲ့ပုံ။
အသီးအရွက်စားတဲ့ သတ္တဝါကလေးတွေ တော်တော်ကြီးကို စုံစုံလင်လင်လာကြတဲ့ပွဲပါ။ ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်း၊ ဆိတ်၊ သိုး၊ သမင် ဒရယ်၊ ချေ၊ ဆတ်၊ ယုန် အစုံ။ ဆင်တောင်မှ ပါလိုက်သေး။ စား သောက်စရာ အသီးအနှံမျိုးစုံကို စားပွဲဝိုင်းတွေရှိရာဆီ လိုက်ချပေး နေတဲ့ မြေခွေးတွေကလည်း ဝံပု လွေပိုင်ဟိုတယ်ကြီးရဲ့ ဝန်ထမ်း တွေပီသစွာ သွားကြီးတွေဖြဲလို့။
‘‘အနို့.. သိချင်လို့ မေးပါရ စေ။ ဘယ့်နှာကြောင့် ဤဟိုတယ် ၌ အဆွေတို့ရဲ့ ညီလာခံကို လုပ် ဆောင်ရသတုံးဗျာ’’
ဂျက်က ဂျက်နဲ့အတူတူ စား ပွဲဝိုင်းတစ်ခုတည်းမှာ ထိုင်နေတဲ့ နွားကြီးကို မေးရပါတယ်။ နွားကြီး က ဖွဲနုတွေကို အားရပါးရစားနေ ရာကနေ ပြန်ဖြေပါရဲ့။
‘‘ခက်ပါဘိ ဂျက်အာစရိရယ် အခုဟာက စပွန်ဆာပေးတာ။Sponsor ဆိုတာသိတယ်နော်။ ကမကထလုပ်ပေးတာ၊ ဝံပုလွေ ကြီးကိုယ်တိုင် လာကမ်းလှမ်းတာ၊ အသီး အရွက်စားတဲ့ သတ္တဝါတွေ ရဲ့ ညီလာခံလုပ်ရင် ဝံပုလွေပိုင် တောနဲ့ တောင်စွယ်ဟိုတယ်မှာ လုပ်ပါတဲ့။ အကျွေးအမွေးနဲ့ တကွ စပွန်ဆာ လုပ်ပေးပါရစေတဲ့။
အဲ သမှာ.. ကျုပ်တို့က လက်ခံလိုက် တာ’’တဲ့။
ခန်းမထဲမှာ ဩဘာ လက်ခုပ် သံတွေ ညံခနဲဖြစ် သွားတာမို့ လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ စင်ပေါ်မှာ ပိုင်ရှင် ဝံပုလွေကြီးကို တောင်ဆိတ် ကြီးတစ်ကောင်က ပန်းကုံးစွပ်
ပေးနေတာကိုး။ အသီး အရွက်စား သတ္တဝါတို့ရဲ့ ညီလာခံကို ကျင်းပ ခွင့်ပေးတဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ဝံပုလွေ ကြီးကို ဂနိုင့်ကျက်သရေတံဆိပ် ချီးမြှင့်ပါကြောင်းတဲ့ခင်ဗျ။
အစီ အစဉ် ကြေညာသူ ဒေါင်းမလေး က ဖတ်ကြားပေးနေ ခဲ့တာပါ။ ဝံပု လွေနဲ့ တောင်ဆိတ် တစ်ကောင့် လည်ပင်းကို တစ်ကောင်ဖက်ကာ တိရစ္ဆာန်တွေ ရှိရာဆီ လှည့်ပြုံးပြ တဲ့ အချိန်မှာတော့ ရိုက်လိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ဆိုတာ မီးပွင့်ထွက် မတတ်ပါလေ။
ပွဲပြီးတော့ ဝံပုလွေကြီးကို ဂျက် သွားနှုတ်ဆက် လိုက်ပါ တယ်။ ဘယ့်နှယ့် တစ်ကောင့်တစ် ကောင် မေတ္တာကူးလူး သွားကြပြီ လားလို့လည်း မေးပြောလေး ပြောမိပါရဲ့။
‘‘အယ်.. ဂျက်ဆရာကဖြင့် လုပ်ပြီ။ ပွဲပြီးတော့ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်ပြန် လုပ်ကြရုံပေါ့’’တဲ့။
သားကောင် လိုက်မယ့် အကောင်တွေက ပြန်လိုက် ကြမှာပဲ ပေါ့တဲ့။ ခန်းမကြီးမှာ ညီလာခံ လုပ်ခွင့်ရလို့ မြူးကြွနေတဲ့ သတ္တဝါတွေ။ ပြန်ပြီးတော့ လွတ်အောင် ပြေးကြပေ ဦးတော့ပင် မဟုတ်ပါ ကလား အရပ်ကတို့ငဲ့လေ။
From :7Day daily - By : ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/80663
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, November 14, 2016 No comments:
အန်ဆေ့ဖ် (Unsafe) ဆိုရင် ပြန်ကွေ့ခဲ့ကြ
အခုရက် တွေထဲ ဂျက်ကွမ်း ခြံကုန်းတို့ရဲ့ လူ့ရပ် လူ့ရွာထဲမှာ တိရစ္ဆာန် ကလေးတွေ စုစု စုစုနဲ့ ဟိုနားတွေ့၊ သည်နားတွေ့၊ တွေ့နေရတာကို သတိထား မိကြ သလား မပြော တတ်ဘူး။
လူနဲ့ တိရစ္ဆာန် အပြန်အလှန်ချစ်ကြည် ရင်းနှီးကာ တိရစ္ဆာန်လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လွှတ်လိုက်တာတဲ့ ခင်ဗျ။ ကောင်းတာပေါ့။ ပြောင်းလဲ
တော့မယ့် စုံနံ့သာမြိုင် တောကြီး အတွက် တိရစ္ဆာန်နယူး ဂျင်နရေးရှင်း (New Generation) ကလေးတွေကို ရွေးရွေးပြီး လူ သားတွေ ရှိရာကို လွှတ်ကာ လူတွေ ဘယ်လိုနေတယ်၊ ဘယ်လိုထိုင် တယ်၊ ဘယ်လို စားတယ်၊ ဘယ် လိုသွားတယ်၊ ဘယ်လိုနားတယ်၊ ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူတယ်၊ ဘယ်လို ကိုယ်ကျင့် တရားရှိတယ်၊ ဘယ်လို အများအကျိုး သယ်ပိုး တယ် ဆိုတာမျိုး ကလေးတွေကို တိရစ္ဆာန်တွေ အသိ အမြင်ကြွယ်ဝ လာစေဖို့ရာ အတွက် ထိတွေ့ခွင့် ပေးတာဟာ တောအနာဂတ်အ တွက် ထူးမြတ်တဲ့ အစီအမံ ကလေး တွေပဲပေါ့။
အခုလည်း တိရစ္ဆာန်ကလေး တွေ ဂျက်တို့ရဲ့ လူ့ရွာထဲမှာ ရောက်ရှိလို့ နေကြပြန်ပါပြီ။ မငယ်လွန်း၊ မကြီးလွန်း အထက် တန်းကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား အရွယ်ကလေးတွေပေါ့။ အ ကောင်ကတော့ အကောင်စုံ။ အနို့သော် အရေအတွက်ကဖြင့် မများ လှပါဘူး။ ရှိလှ နှစ်ဆယ်အစိတ် ပေါ့။ တိရစ္ဆာန်ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ရေးအသင်းမှာ တည်းခိုကြသတဲ့ဆိုလား။
‘‘ဆရာကြီးဂျက်.. ဒီမှာ ဆယ်ရက်လောက်ကြာမယ် ခင်ဗျ’’
တောနဲ့ ရင်းနှီးကာ တိရစ္ဆာန် များနဲ့ အကျွမ်းတဝင်ရှိသူ ဂျက်က အနှီတိရစ္ဆာန်ကလေးတို့ တည်းခို ရာဆီသွားပြီး အားပေးရပါတယ်။
တောသတ္တဝါကြီးတချို့ကလည်း ဂျက်ဆီကို ဖုန်းဆက်ကာ မေတ္တာ ရပ်ခံထားတယ်မဟုတ်လား။ အ ထူးသဖြင့်က စားသောက်ဆိုင် ကောင်းကောင်း ကလေးများ ရှိရာ ဆီကို သင့်ရာသင့်ရာ အကောင် ကလေးတွေ ခေါ်ခေါ်သွားပြီး ကျွေးမွေးဧည့်ခံပေးမည်ဟု ယုံ ကြည်ပါကြောင်း တိရစ္ဆာန်အ ပေါင်း၏ မိတ်ဆွေဆရာကြီး ဂျက် ခင်ဗျာဆိုတဲ့ အမှာစကားက သင်းတို့ကို ဂျက်ပစ်ထားလို့မရဘူးဆို တဲ့ အနေအထားပါ။
အဲသဟာ ကြောင့် ဂျက် သင်းတို့ဆီသွားကာ ဘာလုပ်ပေးရမလဲ စေ့ငုရတာပါ။
ဆယ်ရက်လောက်တဲ့။ တူ ရာတူရာ တစ်ကောင်စ၊ နှစ် ကောင်စ ခွဲခွဲခေါ်ဆောင်ကာ သင့်လျော်ရာ စားသောက်ဆိုင်ကလေးများရှိရာဆီ ပို့ပေးပြီးတဲ့သကာလဧည့်ခံရပေအံ့လတ္တံ့လို့ ဂျက်ဆရာမသက်မသာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့မိပါရဲ့။
ဂျက်ဆင်ပေါက်ကလေးနှစ် ကောင်ကိုခေါ်ကာ အအေးဆိုင် ကလေးတစ်ဆိုင်ရှိရာဆီ ချီတက် မိခဲ့ပါရဲ့။ အလွန်ကြီး၊ အလွန်စုံတဲ့ အအေးဆိုင်ကြီးပေါ့။ ငှက်ပျော သီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ ထော ပတ်သီး၊ ကမ္ဗလာသီး၊ သင်္ဘော သီး စတဲ့သစ်သီးဖျော်ရည်အစုံနဲ့ တကွ ကြံရည်တောင်မှ ရတဲ့ဆိုင် ကြီးပါ။ မီးတွေက ထိန်လင်းလို့။ စားပွဲဝိုင်းတွေက တောက်ပြောင် လို့။ မြင်ကွင်းက ရှင်းရှင်းနဲ့ လင်း လင်း။
ဆင်ကလေးတွေက နှစ် ကောင်စလုံး မျက်နှာမကောင်းကြ လေဘူးခင်ဗျ။ ဂျက်ကို တွေတွေ ကြီးငေးကြည့်ကာ ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ယမ်းကြတော့တာခင်ဗျ။
ဩော်.. သင်းတို့ကမှ မသောက်လိုဘူးဆိုတော့လည်း ပြန်ကြရုံသာပ။ အနို့လင့်ကစား သူတို့တည်းခိုရာရောက်တဲ့အခါ ဂျက်က အဘယ့်ကြောင့်နည်းဆို တာကိုဖြင့် မေးမိသဗျ။
အအေးဆိုင်ထဲမှာ ဘယ့်နှာ သို့သောရန်ကို တွေ့တယ်မသိ။ ဆင်ကလေးတွေ ဖြေပုံက အန် ဆေ့ဖ် (Unsafe)ဟူ၏။
အဲသည့်ရက်ကတော့ နွား ကလေးနှစ်ကောင် အလှည့်ကျတဲ့ ရက်။ ဂျက်ခေါ်သွားတဲ့ဆိုင်က လူ့ ရွာမှာ အလွန်လူသိများတဲ့ ဆိုင် ကြီး။ ဒိန်ချဉ်နာမည်ကြီးပေါ့။ နွား နို့ဆိုလည်း ကောင်းမှကောင်း။ မလိုင်ကလည်း ထိပ်တန်း။ နို့ အေးကလည်း စပယ်ရှယ်။
မီးပွင့်ရောင်စုံတွေနဲ့ ထိန် ထိန်ညီးကာ အအေးခန်းကလည်း ကောင်းမှကောင်းပေမို့ လူတွေအ ပြည့်။ အားမနာဘဲကြိုက်ရာမှာဖို့ နွားကလေးတွေကို ဂျက်လော ကွတ်ပျူငှာပွင့်လင်းစွာ ပြုပါရဲ့။
ဩော်.. နွားတွေကလည်း ဆင်တွေလိုပါပဲကလား။ တိရစ္ဆာန်ပေမို့ တစ်သံတည်းထွက်လေရော့ သလားမသိ။ အနံ့အရသာပြည့်ဝ ဘိတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းအဖုံဖုံကို အာ ရုံမရပါဆိုလား။
အန်ဆေ့ဖ် (Unsafe)၊ အန် ဆေ့ဖ် (Unsafe)နဲ့ ဆရာကြီးဂျက် တည်းခိုရာဆီ ပြန်ကွေ့ဆိုတဲ့ စကားကိုသာ တွင်တွင်ပြောဆိုနေ ကြပါလေရဲ့။
အင်းလေ.. နို့မလိုင်ဆိုင်ကြီး ထဲမှာ ဘဇာကိုများ နွားကလေး တွေ တွေ့ကြတယ်မသိ။ သင်းတို့ က အန်ဆေ့ဖ် (Unsafe)ဆိုတော့ လည်း ဆရာကြီးဂျက်က ပြန်ကွေ့ ရုံသာ။
တတိယတစ်ရက်။ ဆိတ် ကလေးနှစ်ကောင်နဲ့ သိုးကလေး နှစ်ကောင်ကို အသုပ်စုံဆိုင်ရှိရာ ဆီ ခေါ်သွားခဲ့ပါရဲ့။
ဆိုင်က အကျယ်ကြီး။ ခုံပု ကလေးတွေဆီမှာ လူတွေကိုယ်စီ ကိုယ်စီထိုင်လို့။ အလယ်မှာ အ ကြမ်းအိုးနဲ့။ ငရုတ်စိမ်းနဲ့ ကြက် သွန်ဖြူပန်းကန်ကလေးတွေချ လို့။
‘‘ထနောင်းရွက်သုပ်၊ မြင်း ခွာရွက်သုပ်၊ ညောင်ရွက်သုပ်၊ မလွှပွင့်သုပ်၊ မြူရွက်သုပ်၊ သမုန်း ရွက်သုပ်၊ ငှက်ပျောအူသုပ်၊ စား ချင်တာအကုန်မှာ တောမှာလို မဟုတ်ဘူး။ အရွက်ကို အရသာရှိ အောင် သုပ်စားကြတာ’’
ဆိတ်ကလေး၊ သိုးကလေး တွေက ဂျက်ရဲ့စကားကို နားဝင်ပုံ မရဘူးခင်ဗျ။ ဘေးဘီဝဲယာမှာ အ သုပ်စားနေကြတဲ့ လူတွေလူတွေ ရှိရာဆီကြည့်ပြီး မစားတော့ဘူး ပြန်မယ်တဲ့။
ပြီးတော့ သံပြိုင်ပြောလိုက် ပုံက..
တစ်နေကွယ်ပျောက်၊ တစ် မိုးသောက်လျက်၊ ရက်ဟောင်း ကုန်ကာ၊ ရက်သစ်တို့မွေးဖွားလာ ခဲ့လေရာ.. ။
ဘာတိုက်တိုက် ဘာကျွေး ကျွေး မစားရေးချမစား၊ မသောက် ရေးချမသောက်လုပ်တဲ့ တိရစ္ဆာန် ကလေးတွေ တောသို့ပြန်သွားပြီး သည့်သကာလ ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း လည်း စုံနံ့သာမြိုင်ရှိရာဆီ အလည်အပတ်သွားမိလေသဗျ။
အဲသမှာ မြို့ကိုလာတုန်းက နွားနို့ဆိုင်ကြီးထဲမှာ ဘဇာမှ မသောက်ဘဲ အန်ဆေ့ဖ် (Unsafe)လို့ဆိုကာ ပြန်ထွက်သွားကြတဲ့ နွားကလေးနှစ်ကောင်နဲ့ တွေ့ သဗျ။ တစ်ကောင်က အထီး။ တစ်ကောင်က အမ။
အခု.. သူတို့က တိရစ္ဆာန်စား သောက်ဆိုင်ကြီးရှိရာဆီ ဂျက်ကို ခေါ်သွားပါလေရော။
ဟောဗျ။ စားသောက်ဆိုင် လို့ဆိုဘိလင့်ကစား ခွေးတစ် ကောင် ကြောင်တစ်မြီးကိုမှ မတွေ့မမြင်ပါရ။
‘‘ဆေ့ဖ် (safe)ဖြစ်တယ် ဆရာကြီးဂျက်ရဲ့’’တဲ့။
နွားကလေးတွေ လက်ညှိုး ညွှန်ရာဆီကြည့်လိုက်တော့ အထဲ ကို ဘယ်လိုမှမမြင်ရတဲ့ တဲက လေးတွေ တဲကလေးတွေ။
ဩော်.. တိရစ္ဆာန်ကလေး တွေ လူ့ရပ်လူ့ရွာဆီလာတုန်းက အန်ဆေ့ဖ် (Unsafe)လို့ဆိုတာကို ဂျက်သဘောပေါက်စပြုလာပါ ရဲ့။ သင်းတို့က ဆေ့ဖ် (Safe)ဖြစ် တဲ့နေရာမှာမှ မှီဝဲသုံးဆောင်တတ် ကြတာကိုး။
နွားကလေးတစ်ကောင်က ကောင်တာမှာ ထိုင်နေတဲ့ မြေခွေးဆီသွားသဗျ။ မြေခွေးက ခေါင်းခါ လိုက်တာကို ဂျက်လှမ်းမြင်ရတာ ပေါ့။
‘‘ဆရာကြီးဂျက်ရေ.. ကျုပ် တို့နှစ်ကောင်က Booking လုပ် ထားလို့ တဲတစ်လုံးရတယ်။ ဆရာကြီးဂျက်အတွက် တဲတစ်လုံးသွား ပြောတာ မရဘူး။ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ပြည့်နေလို့ ဒီနေ့က တိရစ္ဆာန် စကူး (School)ဖွင့်ရက်မို့ ထင်ပါ ရဲ့။ ဆရာကြီးဂျက် ဆာရင်ကောင်တာနားမှာ တစ်ခုခုမှာစားသွားပါ လား။ ဆေ့ဖ် (Safe)တော့ မဖြစ် ဘူးပေါ့’’
ပြန်လာတဲ့ နွားထီးကလေး က အနို့ကလိုပြောကာ နွားမ ကလေးကို လက်ဆွဲလို့ ဆေ့ဖ် (Safe)ဖြစ်ရာ အလုံပိတ်တဲက လေးဆီ လှမ်းချီကာ သွားခဲ့လေ ပေါ့။
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ကာ ဆေ့ဖ် (Safe)ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ သုံး ဆောင်နေကြတဲ့ တဲကလေးတွေ ကိုကြည့်ကာ ဂျက်သဘောကျ သွားမိပါရဲ့။
တိရစ္ဆာန်ခေါင်းဆောင်ကြီး တွေဟာ မျိုးဆက်သစ်သတ္တဝါက လေးတွေကို ဆေ့ဖ် (Safe)ဖြစ် အောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ လူတွေ ထက်သာပါလေရောလားဗျာဟူ လို။ ။
From :7day daily - By : ဂျက် (ကွမ်းခြံကုန်း)
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/75732
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, September 19, 2016 No comments:
အမြင်စုံ ရင်ခုန် ပင်လုံ
ဗျို့ . . .အယ်ဒီတာ ......
ဒီတစ်ပတ်လုံး ကျုပ်တော့ ရုပ်မြင် သံကြားရှေ့က မခွာနိုင်ဘူး ဖြစ်နေသဗျ။ သိတဲ့ အတိုင်း ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ဆိုသဟာ ကြီးကို ကျုပ်တို့ တစ်တိုင်း ပြည်လုံး ရင်သိမ့် တုန်မျှ ၀ိုင်းပြီး စိတ်ဝင် တစား နားစွင့်နေ ကြရမင့် ဟာကိုး။
အဲ... ဗျာ ...
လျှပ် စစ်မီးလေး ခဏခဏ ပြတ်နေတာ ကတော့ဖြင့် ဆိုးချက်။ ပင်လုံ ညီ လာခံ ဖွင့်ပွဲနေ့က ဆို ရပ်ကွက်ထဲ မီးပြတ် သွားလို့ ကျုပ်တို့မယ် ဒေါသ တွေ ထွက်ရသေး တာကလား။ ဒါ ပေတဲ့ ၂၁ ရာစု ပင်လုံကို ကြိုဆို သော အားဖြင့် မီးပြတ်တယ် လို့သာ မှတ်လိုက် ပါတယ်။
ရှိစေတော့၊ ရှိ စေတော့။
ညီလာခံ ဖွင့်ပွဲနေ့တုန်းဆီက စင်ပေါ်တက် ပြောကြတဲ့ ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်များရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေ ကို ကြားရ တာဟာလည်း ကျုပ်တို့ ပြည်သူတွေအဖို့တော့ဖြင့် တစ်အား ပဲ။
သူတို့ရဲ့ စကားအသွားအလာ အရ ညီလာခံတက်လာတဲ့ အသီး သီးသော အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ပြည်ထောင်စုသားချင်း ညီညွတ်ချင် တယ်။
လက်တွဲချင်တယ်။ ငြိမ်း ချမ်းချင်နေကြတယ်ဆိုတာ ဘာ မှသံသယရှိစရာ မလိုပါဘူးဗျာ။ အားလုံးအများ ကြားကြပြီးသားပဲ။
ခေါင်းဆောင်တွေ ရင်ထဲအဲသလို ရှိပြီလားဟေ့ဆို ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကို မေးမနေပါနဲ့တော့။ ငြိမ်းချမ်းချင်လိုက်တာမှ ဟိုးဘက် တောင် လွန်နေသေးတယ်။
ပြည် သူတွေဟာ မငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြေးခဲ့ရ၊နေရပ်အိုးအိမ်ကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ်စွန့်ခဲ့ရပြီးပြီ။
ချစ်သူခင်သူတွေ အချင်းချင်းကြား သေကွဲရှင်ကွဲ ခွဲခဲ့ရတဲ့ အခါတွေလည်း နည်းရောလား။ ပြည်သူတွေ ငြိမ်းချမ်းရေး ရချင်တာကြာပေါ့။
အစိုးရကလည်း ငြိမ်းချမ်း ရေး လိုချင်တယ်။ ဆိုင်ရာလက် နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများက လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို တည် ဆောက်ချင်တယ်။ ပြည်သူများ လည်း ငြိမ်းချမ်း ချင်နေကြပြီ။
ဒါ ပေတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးမရသေးတာ တစ်ခုပဲ ပြောစရာရှိတယ်။
ဟဲ... ဟဲ... သိဘူးလေဗျာ။ သိတာတစ်ခု ပဲ ရှိသဗျ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ သူတင်း ကိုယ်တင်းဆိုရင်တော့ အချင်းချင်း တင်းမာပြီးရင်း တင်းမာမှာပဲ။ အဲ...သူလျှော့ ကိုယ်လျှော့ နဲ့ ပြိုင်တူ ပျော့ကြရင်တော့ ပျော့ ရာကနေ ပျော်စရာ ရလဒ်ကောင်း လေးတွေ ထွက်လာစရာ အကြောင်း ရှိသပေါ့လေ။
သဟာကြောင့် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၁ ရာ စု ပင်လုံဖွင့်ပွဲမှာပြောတဲ့ မိန့်ခွန်း မယ် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေရဲ့ မူလ ဇာစ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံရေးပြ ဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ အဓိ က လိုအပ်ချက်ဟာ အပြန်အလှန် နားလည်မှု၊ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့ ပူးပေါင်းအဖြေရှာနိုင်ဖို့ ဖြစ် တယ် ဆိုတာ အမြဲပဲ ခံယူထားပါ တယ်တဲ့။
ညီလာခံကိုလာကြတဲ့ အသီးသီးသော ခေါင်းဆောင်တွေ မှာလည်း အလားတူ စိတ်သဘော ထားမျိုး ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာ ဘစီတို့ ယုံမှားသံသယ မ၀င်ပါဘူးဗျာ။
ရှိ လို့လည်းပဲ ညီလာခံမှာ မိမိတို့ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို လာပြီး တင်ပြကြတာပေါ့။ ဟုတ်ဘူးလား ခင်ဗျာ။
ဒီမှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ဆို တဲ့ အချက်တစ်ခုကိုလည်း ညီလာ ခံတက်လာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကြီး များထဲက တချို့ရဲ့ ဆွေးနွေးချက် တွေမှာပါသဗျ။ နိုင်ငံရေးအရ မတူကွဲပြားတဲ့ အမြင်သဘောထား ရှိကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အား လုံးပါဝင်နိုင်လေ ကောင်းလေပါ ပဲ။
ဘစီတို့ အမြင်ကတော့ ညီလာ ခံကို ရောက်မလာသေးတဲ့ အဖွဲ့ တွေလည်း ရောက်လာအောင် လမ်းဖွင့်ပေးဖို့ လိုအပ်သလိုမျိုးပဲ ညီလာခံဆီ ရောက်လာပြီးသကာ လ အမြင်သဘောထား ဆွေးနွေး ဖလှယ်ကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်း လူ ပုဂ္ဂိုလ်များ အချင်းချင်းကြားမှာ နားလည်မှုတွေ အားကောင်းလာ ပါစေ၊ သဟာလိုဖြစ်အောင်လည်း ပဲ လုပ်ကြပါလို့ တောင်းပန်ချင် တာပဲ။
ဘာလို့ဆို ဒီညီလာခံဟာ အ မျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ကြ တဲ့ ပွဲကြီးကိုးခင်ဗျ။ နောက်ပိတ် ဆုံးပေါ့လေ။ ဖွဟဲ့ လွဲစေပယ်စေ၊ အနှီညီလာခံကြီးက ဘာအဖြေမှ မထွက်သည့် တိုင်အောင် စိုသော လက်ကို မခြောက်အောင်တော့ လုပ်ကြဖို့ ကောင်းတယ်လို့ ဘစီ တို့ ထင်သဗျို့။
ဒါပေသိ ယုံတယ် လေ။ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ ဟာ အဟောသိကံတော့ ဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ အားလုံးဟာ မိမိတို့ရဲ့ နှလုံးသားကို ဟင်းလင်း ဖွင့်ထားပြီး
ဆွေးနွေးကြစမ်းပါ၊ တိုင်ပင်ကြစမ်းပါ၊ နှီးနှောကြစမ်း ပါ။ ဘယ်လောက်အမြင်တွေ ကွဲ ကွဲ လမ်းတူရင်တော့ တစ်နေရာမှာ ဆုံကြမှာပဲ။ ဟုတ်တယ်နော် အယ် ဒီတာ။
ညီလာခံ ပထမနေ့ ဆွေးနွေး ချက်တွေမှာ အဖွဲ့အစည်းအသီး သီးရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ တင် ပြချက်တွေကို နားထောင်ရသ လောက်ကတော့ အားလုံးဟာ ဒီ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုရင် အချင်း ချင်း ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်။
စည်းလုံး ဖို့လိုတယ်။ ငြိမ်းချမ်းဖို့လိုတယ်။ ဒါ မှ ကမ္ဘာနဲ့ ရင်ပေါင်တန်းနိုင်မယ် ဆိုတဲ့ အမြင်တွေ ရှိကြသူချည်းပဲ တွေ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်နက် ကိုင်ပြီး တစ်ဖက်နဲ့
တစ်ဖက် တိုက် ခိုက်ကြတဲ့ နည်းဟာလည်း ပြဿ နာတွေပြေလည်ဖို့အတွက် အလုံး စုံမှန်ကန်တဲ့ နည်းလမ်းမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အမြင်တွေလည်း ရှိကြတာ ကြားနာရ
သေချာတာ ကတော့ တိုင်းသူပြည်သားလူအ များ ကောင်းစားဖို့အတွက် စစ် တွေတိုက်နေရုံနဲ့ မရဘူးဆိုတာ အားလုံးက သဘောပေါက်နေကြ တာပါပဲ။ ဒီအတွက် တစ်အားတက်မိပါတယ်။
နားထောင်ရင်းနဲ့ ဘစီတို့စိတ် ထဲ စစ်ကြောင့်နေရပ်က တိမ်း ရှောင်နေရတဲ့ ပြည်သူများရဲ့ မျက် နှာတွေကိုပြေးမြင်ပါတယ်။ နေ ပြည်တော်မှာ ညီညွတ်ရေး၊ ငြိမ်း ချမ်းရေးစကားတွေ ပြောနေချိန်မှာ အနိမ့်ဆုံးတော့ သူတို့ဟာ မိမိတို့ ရဲ့ နေရပ်နဲ့ အဝေးမှာဆက်လက် ပြီး ရောက်မနေသင့်တော့ဘူးလို့ လည်း ထင်ပါတယ်။
သူတို့တွေ အိမ်အမြန်ဆုံးပြန်နိုင်အောင် လုပ် ပေးဖို့ ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ အဲ လို ပြန်ဖို့ဆိုတာကတော့ စစ်ပွဲတွေ နောက်ထပ်
ဆက်မဖြစ်တော့မှ လည်း ဖြစ်မှာဆိုတော့ကာ အနည်း ဆုံး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် စစ်မက် မပြုကြဘူးဆိုတဲ့ သဘောတူညီ ချက်ကလေးများ ညီလာခံက ပေါ် ထွက်လာရင်တောင် ကြိုဆိုရမှာပါ။
၂၁ ရာစု ပင်လုံနဲ့ပတ်သက် ပြီး သဘောထားအမြင်ကတော့ အမျိုးမျိုးပဲခင်ဗျ။ အကောင်းမြင်၊ အဆိုးမြင်စုံလို့ပါပဲ။ အထူးသဖြင့် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်လူမှုကွန်ရက်ပေါ် တက်ကြည့်ရင် ပင်လုံနဲ့ပတ်သက် ပြီး ထင်မြင်ချက်တွေ ပေါင်းလန် နေအောင် တွေ့ရမယ်သာမှတ်။
တချို့ကလည်း အပျက်ဘက်က တွေး၊ တချို့ကလည်း အကောင်း ဘက်က ရှုနဲ့တကယ့်ကို ‘ဗဟု’ဖြစ် နေတော့တာပါပဲ။ ကျုပ်တို့တော့ ဒါဟာဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ပြည်သူလူထု ပါဝင်ရမယ်ဆိုတာ ကို လက်တွေ့အကောင်အထည် ဖော်နေကြတာပါလို့သာ ယူမှတ် ရတော့တာပါပဲ အယ်ဒီတာရေ။
လူထုအမြင်ဆိုလို့ ပြောရဦး မယ်ဗျို့။ ညီလာခံ ပထမနေ့တုန်း က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မယ် ဓာတ်ပုံ တွေတက်လာပါသကော။ ကြည့် လိုက်တော့ ညီလာခံခန်းမထဲမယ် ကိုယ်စားလှယ်တချို့ စက်တော် ခေါ်နေတဲ့ ပုံတွေခင်ဗျ။ တက်လာ ပြီး သိပ်မကြာပါဘူး။ ပရိသတ် ကြား အတော်ပဲ ပျံ့နှံ့သွားတယ်။ ပြောကြ၊ ဆိုကြ၊ ဝေဖန်ကြနဲ့
အောင်မလေးဗျာ...စုံလို့။ ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး ဘာဘူးတွေပေါ့လေ။
ဟာ နောက်တစ်ရက်ကျ တော့ အဲသဟာ နားလည်မှုလွဲပြီး ဖော်ပြတာပါတဲ့။ အမှန်က ရပ်ဝေး ကလာကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ ဟာ အစည်းအဝေးအားလပ်ချိန် မှာ ခေတ္တမှေးစက်အနားယူနေကြ တာသာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
ဒါပေတဲ့ အယ်ဒီတာမင်းများလည်း သိတဲ့ အတိုင်းပဲဗျာ။ သတင်းဆိုသဟာ မျိုးဟာ မှားဖော်ပြမိပြီလားဟေ့ဆို ရင် နောက်ကအဖန်ဖန် အထပ် ထပ် ဖြေရှင်းချက်
လိုက်ပေတဲ့ ပြေနိုင်ခဲတဲ့ အရာမျိုးကလား။ အမှန်တရားက ဖိနပ်စီးနေတုန်း မုသား က ကမ္ဘာတစ်ပတ်တောင်မှ ပတ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ စကားလည်းအရှိ သား။
ဒီနေရာမယ် စာနယ်ဇင်းသ မားတွေအပါအ၀င် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် မှာ ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်အထင်ကို မိမိတို့ရဲ့ မွေးပါရာ အခွင့်အရေး အရ ၀င်ရောက်ရေးသားကြတဲ့ လူ ကြီးမင်းများ၊ လူကလေးမင်းများ အနေနဲ့လည်း အထူးသတိပြုဖို့လို တာက ၂၁ ရာစု ပင်လုံဆိုသဟာ အင်မတန်မှ အရေးကြီးတဲ့ ညီလာ ခံကြီးပါခင်ဗျာ။
အနှီညီလာခံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အ လက်တွေ ဖော်ပြမယ်ဆိုရင် အ ကြိမ်ကြိမ် အထပ်ထပ် စစ်ဆေး အတည်ပြုပြီး ဖော်ပြနိုင်မှသာ တော်ရုံကျမယ်ထင်သဗျာ။
ကိုယ့် ဖော်ပြချက် တိမ်းစောင်းသွားလို့ ဖတ်မိသူ လူအများမှာ ၀ိဝါဒကွဲရ တာမျိုးဟာ ဟန်မကျပါဘူးခင် ဗျာ။ ‘၀’ပြည်သွေးစည်းညီညွတ် ရေးအဖွဲ့က ကိုယ်စားလှယ်တချို့ ညီလာခံက ပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းထွက်ပါသကော။ အဲသ ဟာ ဘာကြောင့်ဘယ်လိုဆိုတာ မသိရခင်စပ်ကြားမှာ လူထုကြား အမြင်အမျိုးမျိုးပေါ်လာရော။
နောက်တစ်နေ့ဖတ်တဲ့ သတင်းစာတချို့က အနှာသတင်း နဲ့ပတ်သက်ပြီး လိပ်ပတ်လည် အောင် ဖော်ပြကြသမို့ တော်သေး ရဲ့လို့ ဘစီတို့အောက်မေ့မိပါတယ်။
ဘစီတို့ကတော့ သာမန်ပါပဲခင် ဗျာ။ ဘာမှလည်း ပြောရေးဆိုခွင့် မရှိပါဘူး။ ဒါပေသိ ဒီအချိန်ဟာ ညီညွတ်ရေးကို ပြန်လည်တည် ဆောက်ဖို့ လုံးပန်းနေတဲ့ အချိန်ဆို
တော့ကာ ညီညွတ်ဖို့ဆိုရာမှာ အ ပြန်အလှန်နားလည်မှုက အခရာ ကျလေတော့ ပြည်သူတွေကြား၊ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာတွေကြားမှာ မလို အပ်ဘဲ နားလည်မှုလွဲမှားစေတဲ့ အရာတွေကို သေချာစိစစ်ပြီး နား လည်မှုတိုးပွားစေမယ့် ရေးသား ပြောဆိုသမှုတွေ ပြုကြရင်ဖြင့် သင့်မှာပဲလို့တော့ တစ်ခွန်းတစ်စ ၀င်ပြောရပါတယ်ခင်ဗျ။
အယ်ဒီတာရေ...ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်တို့ကတော့ အကောင်းကို သာ ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ မျှော်ရတာပဲ ဗျ။ အခုဆိုရင် ၂၁ ရာစု ပင်လုံက နေ ကျုပ်တို့ဟာ အမြင်အစုံကို ကြားနေ
ရတယ်ဗျာ။ အမြင်စုံမှ လည်း အစုံမြင်မှာကိုးခင်ဗျ။ အစုံ မြင်မှလည်း ဘုံအကျိုးစီးပွားဆီ ချီ နိုင်မယ်မှတ်တာပဲ။ အနှီဘုံအကျိုး စီးပွားဆိုသဟာ တစ်ပြည်လုံးငြိမ်း ချမ်း
လုံခြုံရေးကလွဲလို့ ဘာဖြစ်ရဦးမှာလဲဗျာ။ တော်သေးပြီ။ ။
From :7day daily - By : ဘစီ
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/74462
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, September 04, 2016 No comments:
တောထဲက အလွယ်၊ အခက်လမ်းများ
တစ်ရက် ကလေးတွေ မတွေ့တော့ မေးဖြစ် သဗျ။ ကလေးဆို ပေမယ့် သိပ် ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်က လေးတွေတော့ ဖြင့်လည်းမဟုတ် ချေဘူးပေါ့။ လူတွေ အနေနဲ့ နှိုင်း ယှဉ် ပြောရရင် ကိုးတန်း၊ ဆယ် တန်းလောက် အရွယ်မျိုးလေး တွေ။ အနို့သော် တိရစ္ဆာန် ကိုး တန်းပေါ့။ တိရစ္ဆာန် ဆယ်တန်း ပေါ့။
ဂျက်ရောက် သွားခဲ့တဲ့ အိမ် က နွားကြီး ဘွတ်အဲတို့ အိမ်။ သူ့ မိန်းမ ဒေဝီ ဘွတ်အဲလည်း ရှိနေ လေရဲ့။ နွားလင်မယားက တိရစ္ဆာန် ဈေးထဲမှာ ရောင်းဖို့ ဆိုလား ဒိန်ခဲ တွေ လုပ်အပြီး ကောက်ရိုးခြောက် တွေ ဝါးရင်းက အေးအေးလူလူ နားနေကြတဲ့ အချိန်။
သူတို့မှာက မတိမ်း မယိမ်း နွားကလေးနှစ် ကောင်ရှိတယ်။ အထီးကလေး တွေ။ သားတော်မောင်နှစ်ကောင် လို့ပဲ ဆိုကြပါတော့။
အရင်တစ် ခေါက် ဘွတ်အဲရိပ်မြုံကို ရောက် တုန်းက တိရစ္ဆာန် ကာတွန်းစာ အုပ်ကိုယ်စီနဲ့ ပါးစပ်ကြီးတွေဖြဲပြီး သဘောကျနေကြတဲ့ နွားကလေး နှစ်ကောင်။
တမာပင်အောက်မှာ ငြိမ်ချက်သားကောင်းနေတဲ့ အဲ သည့်နွားကလေးနှစ်ကောင်ကို ကြည့်ကာ ဂျက်ကတောင် ခင်ဗျား သားတွေ ငြိမ်လှပါလား ဘွတ်အဲ ရဲ့လို့ ပြောမိ ခဲ့သေးတယ်။ ဘွတ် အဲက ဘုတ်အုပ်တွေ့ရင် လက်က မချတော့ဘူးဗျာရေတဲ့။ သား မောင် နွားနှစ်ကောင်ကိုကြည့်ကာ သဘောကျတဲ့ လေနဲ့။
အခု.. ကလေးတွေ မတွေ့ တော့ဘူးလို့ ဂျက်ပြောတာက အဲ သည့်နွားကလေးနှစ်ကောင်ကို ပြောတာပါ။ မတွေ့တော့လည်း မေးမိလေတာပ။ သားမောင် နွား နှစ်ကောင်ကောဗျလို့။
‘‘မေးတတ်ပလေဗျာ။ စာ ကြည့်တိုက်တဲ့ဗျ။ မနက်လင်း ကြက်မတွန်ခင်ကတည်းက ထွက် သွားကြတာ’’
ကြည့်စမ်း။ ဂျက်နမော်နမဲ့ နိုင်လိုက်တာ။ အဲသည့်စကားလုံး ကို ဂျက်မေ့နေလိုက်တာ။ စုံနံ့သာ မြိုင်တောထဲကို မကြာခဏရောက် နေပါလျက် တိရစ္ဆာန်ကမ္ဘာနဲ့ ယင်း ၎င်း စာကြည့်တိုက်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ဘယ်တုန်းကမှ ယှဉ်တွဲလို့ မစဉ်းစားမိခဲ့လေဘူးဗျာ။ ရှိမှန်း လည်းမသိဘူး။ ရှိမယ်လည်း မထင်ဘူး။ တိရစ္ဆာန်တွေမှာလည်း စာကြည့် တိုက် ရှိလေသတဲ့။ အံ့ပါရော။
‘‘လိုက်ဗရီ (Library) တိရစ္ဆာန်လိုက်ဗရီ၊ တိရစ္ဆာန်စာ ကြည့်တိုက် ကြားလို့သာ ယုံရ တော့တယ်။ ဘယ်တုန်းကမှ ဂျက်သတိမထားမိခဲ့ဘူး။ အနို့.. နေပါ ဦး ဘယ်နားဆီမှာတဲ့တုံး’’
စာအုပ်ဆိုရင် ငမ်းငမ်းတက် သွားရည်တများများဖြစ်တတ်တဲ့ ဂျက်က စာကြည့်တိုက်ဆိုတဲ့အသံ ကိုကြားတော့ သွားရောက်စေ့ငု လေ့လာဖို့ရာ အားတက်သရော ဆိုသလို မေးမိပါလေရော။
နွားကြီးဘွတ်အဲ စိတ်ရှုပ် ထွေးသွားပုံရပါတယ်။ နှာမှုတ် သဗျ။ ခွာရှပ်သဗျ။ ပြီးတော့မှ..
‘‘အဆွေဂျက်မေးတော့မှ ခေါင်းခြောက်သွားတယ်။ ရှိတော့ ရှိတယ်။ အဘယ်နားမှန်းမသိဘူး။ ဟိုနှစ်ကောင်ပြန်လာမှ မေးပေ တော့’’တဲ့။
‘‘အနို့ ခင်ဗျားရဲ့ သားမောင် နွားနှစ်ကောင်က ဘယ်တော့ လောက် ပြန်ရောက်မှာတုံး’’
‘‘အဲ.. နောက်တော့ကျတတ် တယ်။ တစ်ခါတလေ နွားရိုင်း သွင်းချိန်၊ တစ်ခါတလေလည်း သက်ကြီးခေါင်းချချိန်လောက် ရောက်မှ ပြန်ရောက်တတ်တယ်’’
ဂျက်နည်းနည်းတော့ ချာလ ပတ်လည်သွားသဗျ။ လင်းကြက် မတွန်မီကသွားကာ သက်ကြီး ခေါင်းချချိန်လောက်မှ ပြန်ရောက် တဲ့အထိ ဘဇာသို့များ စာတွေကို ဖတ်နေကြပါလိမ့်။
ဒါကြောင့် ပြီးမှ ပြန်လာမယ် ဗျာလို့ ပြောပြီးတဲ့သကာလ တော လမ်းအတိုင်း ခရီးဆက်ဖြစ်ခဲ့ပါ ရဲ့။
ထိုနည်းလည်းကောင်း၊ ထို နည်းလည်းကောင်းဆိုတဲ့ စကား ကိုသာ အထပ်ထပ်ဆိုလိုက်ချင်ပါ တော့တဲ့။ မြင်းကြီး အဿကြာဖြူ တို့ အိမ်ကို ခဏဝင်မိတော့ သူ့ သမီးနှစ်ကောင်မရှိပြန်ဘူး။ အ ကြီးမက ဖြူဖြူသိန္ဓော။ အငယ်မ က နီနီသိန္ဓော။ လိုက်ဗရီ (Libra-ry) (ခေါ်) တိရစ္ဆာန်စာကြည့် တိုက်ဆီသို့ပဲတဲ့ခင်ဗျ။
‘‘နေပါဦး.. မစ္စတာ အဿ ကြာဖြူရဲ့ အဆွေတို့ တိရစ္ဆာန် စာ ကြည့်တိုက်က အဘယ်နားဆီမှာ တဲ့တုံး ကျုပ်သွားချင်လို့’’
အဿကြာဖြူက လည်ဆံ မွေးတွေ ဖွားခနဲ ဖွားခနဲ ဖြစ် အောင် ခါလိုက်ပြီးတဲ့သကာလ ဩော်.. စာကြည့်တိုက်ရှိတဲ့နေရာ လား ဘယ်သိမတုံးဗျတဲ့။ မှတ်က ရော။ ပြီးတော့ စကားက ဆက် သေးတယ်။ သိန္ဓောမနှစ်ကောင် ပြန်လာမှ မေးကြည့်တဲ့။ မိုးတော့ နည်းနည်းချုပ်မယ်တဲ့။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အမျိုးသား စာကြည့်တိုက်ကြီးရှိသဗျ။ အမေ ရိကန်နိုင်ငံမှာ ကွန်ဂရက်စာကြည့်တိုက်ကြီးရှိသဗျ။ ရုရှားနိုင်ငံမှာ လီနင်ဂရက်စာကြည့်တိုက်ကြီး ရှိသဗျ။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ဗြစ်တစ် စာကြည့်တိုက်ကြီးရှိသဗျ။ ထီးထီး မားမားကြီးတွေ။ ထင်ထင်ရှားရှား ကြီးတွေ။ မြို့တော်ရဲ့ အချက်အ ချာ ကျတဲ့နေရာတွေမှာ အများသူ ငါ မြင်ကွင်းထဲမှာ ထင်ထင်လင်း လင်း ရှင်းရှင်းကွက်ကွက်ဆိုတော့ ကာ ထွက်ကြဝင်ကြနဲ့။
အခု စုံနံ့သာမြိုင်လုပ်ပုံကြီး က ကြည့်။ လူတွေကို တုကာ တိရစ္ဆာန်စာကြည့်တိုက်ဆိုတာ ကြီးကိုတော့ လုပ်ထားပါလေ သတဲ့။ တောထဲမှာရှိပါလေသတဲ့။ အနို့သော် အဘယ်နေရာမှာဆို တာ ဧည့်သည်တော်ဂျက်ကို အ သာထားလို့ တိရစ္ဆာန်တော်တော် များများတောင်မသိ။ တိရစ္ဆာန် တွေ အသိဉာဏ်ပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝဖို့ရာ လုပ်ပေးရတဲ့ တိရစ္ဆာန်စာကြည့်တိုက်ဆိုတာကြီးကို အ ဘယ်နေရာမှာ သွားလုပ်ထားပါ လိမ့်။
စုံနံ့သာမြိုင်မှာ လှည့်လည် ရင်း တိရစ္ဆာန်ကြီးတွေကို မေးတဲ့ အခါ တိရစ္ဆာန်လိုက်ဗရီဆိုတာ ဟိုမှာသည်မှာ ဇဝေဇဝါနဲ့ပါ။ ည ရောက်တော့ ဂျက် မြင်းမိသားစု အိမ်ကိုပဲ ပြန်သွားလိုက်တယ်။ မြင်းဆိုတော့ နည်းနည်းမြန်ပုံရ သဗျ။ ဖြူဖြူသိန္ဓောရော၊ နီနီ သိန္ဓောရော ပြန်ရောက်နေကြပါ ပြီ။ ဒါတောင် မှောင်စ,ပျိုးလို့။
‘‘အနို့ ဖြူဖြူတို့၊ နီနီတို့ တစ် နေထွက် တစ်နေဝင် ညည်းတို့ တိရစ္ဆာန်လိုက်ဗရီက ဝေးကွာ လွန်းသလားကွယ်’’
မြင်းမကလေးနှစ်ကောင် ပြိုင်တူဟီလိုက် ရယ်လိုက်တဲ့ အ သံဟာ တောရဲ့ ညဉ့်ယံကို လှုပ် ခါပစ်လိုက်လေရဲ့။ ပြီးမှ တစ် ကောင်က လည်ဆံမွေးတွေကို လေးငါးဆယ်ခါ ခါလိုက်ရင်း ဒီ မှာ ဆရာကြီး အန်ကယ်ဂျက်ရဲ့ ဆိုကာ စကားကို ဆက်ပါလေရဲ့။
‘‘ဘယ်လောက်ဝေးသလဲဆို ရင် ကျွန်မတို့ မြန်တဲ့မြင်းတောင် သွားချိန်နဲ့၊ ပြန်ချိန်နဲ့ စာဖတ်ချိန် နှစ်နာရီလောက်ပဲရတယ်။ ကျန် တဲ့အကောင်တွေဆို တွက်သာ ကြည့်ပေတော့။
ဒါကြောင့် တိရစ္ဆာန်အများစုက စာကြည့် တိုက်မသွားကြဘူး။ ရှိမှန်းလည်း မသိဘူး။ တောစွန်တောဖျား ဟိုး ဂနိုင်ကြီး၊ လိုဏ်ကြီးတွေကိုကျော် ကာ တောင်အထပ်ထပ်
မြောင် အချပ်ချပ်၊ ချောင်းအသွယ်သွယ် မြောင်းအဆွယ်ဆွယ် ကူးဖြတ် ကျော်နင်း ခရီးပြင်းနှင်ပြီးတော့မှ တိရစ္ဆာန်လိုက်ဗရီကိုရောက်တာ ဆရာဂျက်ရဲ့။
တချို့ဆို စာဖတ် ချင်လွန်းလို့ တစ်ရက်လောက်ကြို ပြီးသွားရတဲ့ခရီး တွက်ကြည့် တော့’’
တိရစ္ဆာန်ကမ္ဘာမှာ စာဖတ်ဖို့ ခက်လိုက်တာ။ စာအုပ်တွေရှိရာ က ဝေးကွာလွန်းလိုက်တာ။ ဂျက် စိတ်နည်းနည်းညစ်လာတာနဲ့ ဘီ ယာအဝသောက်၊ ဝီစကီအဝမော့ ပြီး အနှိပ်ကလေးဘာလေး ခံပစ် လိုက်ချင်ကြောင်း ထုတ်ပြော လိုက်မိပါလေရော။
‘‘အယ်.. အဲဒါက တောရဲ့ အလယ်ကောင် ဗဟိုတည့်တည့် မှာကို ဆိုင်ကြီးတွေမှ ပွလို့။ ဘယ် နားကြည့်ကြည့် ရှိတယ်’’တဲ့။
နီနီသိန္ဓောက။ ဖြူဖြူသိန္ဓော က။
သောက်စရာ၊ စားစရာ၊ ပျော်စရာ၊ ပါးစရာ၊ ကဲစရာ၊ ချွဲ စရာ၊ လေစရာ၊ ပေစရာ နေရာ တွေကို တိရစ္ဆာန်တွေရောက်ဖို့ လွယ်အောင် စီစဉ်ထားပြီး ဖတ်ဖို့၊ မှတ်ဖို့၊ တွေးဖို့၊
ခေါ်ဖို့၊ စဉ်းစားဖို့၊ ဆင်ခြင်ဖို့ ပျိုးထောင်ပေးတဲ့နေရာ တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ မရောက် အောင် လုပ်ထားတာ တောရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတဲ့။
တိရစ္ဆာန်ဆိုပြီး အထင်သေး လို့ မရပါကလားဗျာတို့။ ။
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/73990
--- ရတော့ မလိုလို !!!
ငါနော် ရှင်ချင်တယ် တကယ်
စည်းပျက် ကားကို ဒဏ်ငွေ တိုးမယ် ဆိုတော့ ကားသမား တချို့ ဆန္ဒပြတယ် သူတို့ စည်းမရှိ ကမ်းမရှိမောင်း လို့ရအောင် ဒဏ်ငွေဘဲ လျော့ပေးရ မလိုလို
မြစ်ကူး တံတား ထိုးမယ် လုပ်တော့ သမ္ဗာန်ခတ် သမားတွေ နစ်နာမယ် ပြောတယ် သူတို့ မနစ်နာအောင် ပြည်သူတွေ တစ်သက်လုံး သမ္ဗာန်နဲ့ဘဲ နှစ်ပါးသွား ရတော့ မလိုလို
ဘိန်းခင်း ဖျက်တော့ ဘိန်းစိုက် တောင်သူတွေ ငတ်ကုန် မှာပေါ့လို့ ပြောတယ် သူတို့ လူတစ်စု မငတ်အောင် လူ သန်းငါးဆယ်က ဘိန်းဘဲ ဝိုင်းရှုပေး ရတော့ မလိုလို
ပြည်တွင်းထုတ် စားသောက် ကုန်တွေ ဈေးနှုန်း အဆမတန် မြင့်မားနေလို့ ပြည်ပက တင်သွင်းဘို့ လုပ်တော့ ပြည်တွင်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ နစ်နာမယ်လို့ ထအော် ကြတယ် သူတို့ လူတစ်စု အဆင်ပြေအောင် လူ သန်းငါးဆယ် ကဘဲ တစ်သက်လုံး ဒုက္ခခံပြီးဈေးကြီးပေး ဝယ်စား နေရတော့မလိုလို
ရန်ကုန်မြို့ကြီး ပြန်ထိမ်းသိမ်း ရအောင် ဗရမ်းဗတာ အထပ်မြင့် တိုက်တွေ စည်းကမ်းကြပ်လိုက်တော့ လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ အလုပ်သမားတွေ နစ်နာတယ်လို့ အော်ကြပြန်တယ် သူတို့ လူတစ်စု မနစ်နာအောင် ရန်ကုန် မြို့ကြီးဘဲ ဖျက်ပစ် ရတော့ မလိုလို
လမ်းပေါ်ဈေးသည်( လမ်းဘေးဈေးသည် အဆင့်ထက်မြင့်) တွေဖမ်းဘို့ လုပ်တော့ ဆင်းရဲလို့ ဈေးရောင်းတာ ဒါမရောင်းရယင် သူခိုး ဂျပိုး လုပ်ရမှာလား ပြန်မေးတယ်။ ဒီလူတစ်စု သူခိုးဂျပိုး မဖြစ်အောင် တစ်မြို့လုံးကို အမှိုက်ပွနေတဲ့ ဈေးကြီးအဖြစ် ပြောင်းလိုက် ရတော့ မလိုလို
၂၀၀၆ မော်ဒယ်လ် အထက်ကားတွေနဲ့ အများပိုင် ဘတ်စ်လိုင်းတွေ ထောင်မယ် ဆိုတော့ မူလ ကားပိုင်ရှင်တွေ နစ်နာမယ်လို့ ပြောတယ် သူတို့ လူတစ်စု အဆင်ပြေဘို့ လူများစုကြီးက ကားဟောင်းတွေနဲ့ လုကျော် ခွတက် သက်စွန့် စံဖျား တစ်သက်လုံး စီးနေ ရတော့ မလိုလို
အခုလည်း အခွန်ရှောင်တဲ့ သူတွေ ဖမ်းဘို့ လုပ်နေပြီ ဆိုတော့ ဘာသံတွေ ကြားရ ဦးမလဲမသိ။
သူဌေးနဲ့ နင်းပြားကြား ခါးချိနေပေဦးတော့ မြန်မာပြည်။
From : Pyi Thu Siz Thar
Originally published at - https://www.facebook.com/mg.bamar.54?hc_ref=NEWSFEED
သတင်းစာ ပညာကို စိတ်ဝင် စားတဲ့ လူငယ်လေး တစ်ယောက် က အန်ကယ်ဂျက် အန်ကယ်ဂျက် ဆိုတဲ့ အသံနဲ့အတူ ကျွန်ုပ် ဆရာ ကြီး ဂျက်ရဲ့ အခန်း တံခါးကို လာ ခေါက်ပြီးတဲ့ သကာလ သူလေ့လာ သုတေသန ပြုချင်တဲ့ သတင်းစာ တစ်စောင် အကြောင်းကို စကားစမြည် ပြောဖြစ် ကြရာကနေ နောက် ဆုံးတော့ နှစ်ယောက် သား တော ထဲ ရောက်သွား ခဲ့ကြရ တော့တာ ပါပဲလေ။
သြော်...ဘယ်တော ရှိမှာတုံး ဗျာရဲ့။ စုံနံ့သာမြိုင် ပဲပေါ့။ ဂျက် အ၀င် အထွက်ရှိတဲ့ တောက စုံနံ့သာမြိုင်ပဲ ရှိတဲ့ ဥစ္စာ။
အဲသည့် လူငယ်က ကြံကြံ ဖန်ဖန် တိရစ္ဆာန် သတင်းစာတွေကို သုတေသန ပြုချင်သပ ဆိုလား။
‘‘နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာကို သုတေသနလုပ်တယ်... ဗမာ့ခေတ်သတင်းစာကို သုတေ သနလုပ်တယ်...လူထုသတင်းစာ ကို သုတေသနလုပ်တယ်..ဟံသာ ၀တီသတင်းစာကို သုတေသန လုပ်တယ်...ကိုယ့်လူကျတော့မှ တိရစ္ဆာန်သတင်းစာတဲ့ ထူးထူး ဆန်းဆန်း’’
ကျွန်ုပ်က အနှီလိုပြောလိုက် တဲ့အခါမှာ လူငယ်က ပြုံးစစနဲ့ခင် ဗျ။ ကျွန်တော်က သို့ကလို ရူးရူး နှမ်းနှမ်းနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စ ကလေးတွေကိုမှ အာရုံရတယ်ဆို လား။
လိုရင်းကို တိုတိုရှင်းရှင်းလုပ် ကြပါစို့ရဲ့။ ဂျက်နဲ့ အဆိုပါလူငယ် စုံနံ့မြိုင်တောထဲကို ရောက်ရှိခဲ့ကြ ရတော့တာပါ။ အဲသမှာက စုံနံ့ သာမြိုင်ဒေးလီး (Daily) ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ထုတ်ဝေနေတဲ့ တိရစ္ဆာန်သတင်းစာတစ်စောင်က ရှိနေခဲ့ တယ်မဟုတ်လား။ အဲသမှာ အယ်ဒီတာအချုပ်တာဝန်ကြီးနဲ့ ၀၀ဖီးဖီး ဖြစ်နေတဲ့ ပုတ်သင်ညိုကြီးက လည်း ဂျက်ရဲ့ မိတ်ဆွေပဲဥစ္စာ။
‘‘ကဲပါ...ကိုယ့်လူဘာသာ ရူး နှမ်းချင် ရူးနှမ်း၊ ထူးဆန်းချင်ထူး ဆန်း တိရစ္ဆာန်သတင်းစာကိုမှ လေ့လာချင်သပဆိုရင်ဖြင့် စုံနံ့သာမြိုင်ကိုပဲ သွားလိုက်ကြရ အောင် ဟုတ်ပလား’’
အနို့ဖြင့်လို့ပဲ ဆိုကြပါစို့ရဲ့။ ဂျက်တို့ နှစ်ဦးသား စုံနံ့သာမြိုင် တောထဲက ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့ အထွေးထွေးအရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်နေ တဲ့ နေရာနားက တိရစ္ဆာန်သတင်း စာတိုက်ကြီးရှိရာဆီရောက်ရှိခဲ့ ကြလေသည်လို့ပဲ ဆိုပါတော့။
သတင်းစာတိုက်က သဘာဝကျောက်ဂူကြီးထဲမှာ ခင်ဗျ။ သုတေသန မှတ်တမ်းတွေထားဖို့ ရာကိုတော့ အခန်းကြီးတစ်ခန်း လုပ်ထားပါတယ်။ စုံနံ့သာမြိုင်ဒေးလီးသတင်းစာတွေက အဲသည့် အခန်းထဲမှာ ခေတ်အလိုက်စုစည်း ပြီး ထားသိုထားတာပါ။
‘‘အလိုရှိရာကို ယူဆောင် ကာ ဖတ်ရှုသုတေသနပြုပါလော့’’
အယ်ဒီတာအချုပ် ပုတ်သင် ညိုကြီးရဲ့ ဒုတိယလက်ထောက် တွဲဖက်အယ်ဒီတာ လျှာနှစ်ခွနဲ့ ဖွတ်ကြီးတစ်ကောင်က အဲသည့် လိုပြောပြီး ဂျက်တို့ကို အခန်းထဲ မှာ ထားရစ်ခဲ့တာပါ။
ခြင်္သေ့ခေတ်သတင်းစာများ တဲ့။ မြေခွေးခေတ်သတင်းစာများ တဲ့။ ဒေါင်းအိုးဝေခေတ်သတင်း စာများတဲ့။ အနို့ကလို သို့ကလို ခွဲခြားထားပေတာကိုး။
လေ့လာသူ လူငယ်က ခြင်္သေ့ခေတ်သတင်းစာ တစ်စောင်ကို ကောက်ယူပြီး သစ်သားစားပွဲကြီး မှာစတင်ကာ ဖတ်ရှုနေပါလေရဲ့။ အဖော်အဖြစ်လိုက်လာသူ ဂျက် ကတော့ ရေးလက်စစာမူကလေးကို လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာ ကလေးပေါ်မှာ ရေးလိုက်တွေးလိုက်ဖြုတ်လိုက်ဖြည့်လိုက်။
ဘာမှမကြာဘူး။ ခြင်္သေ့ ခေတ်သတင်းစာတွေကို ဖတ်ရှုနေ သူ လူငယ်ဆီက ၀က်ဝက်ကွဲထွက်လာတဲ့ ရယ်သံကြီးတွေပါ။ ဂျက်ကဘာများလဲဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ သူ့ နားကို ရောက်သွားတော့ အဲသမှာဖတ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ သတင်းတစ် ပုဒ်ကို လက်ညှိုးနဲ့ ထောက်ပြပါ တယ်။ သတင်းက ဓာတ်ပုံနဲ့ ဘာ နဲ့ခင်ဗျ။ စပါးပင်ကလေးတွေ ပေါက်နေတဲ့ပုံ။
‘‘ခြင်္သေ့မင်း၏ လမ်းညွှန်မှု ဖြင့် စပါးစိုက်ခဲ့ရာ စုံနံ့သာမြိုင်တစ်နေရာတွင် စပါးပင်များ ရှင်သန် ပေါက်ရောက်လျက်ရှိကြောင်း သိရတဲ့’’
လေ့လာသူလူငယ်မှ မဟုတ် ပါဘူး။ ဂျက်လည်း နည်းနည်း တော့ ပြုံးမိတာပေါ့။ အေးလေ။ စပါးတွေကို စိုက်တယ်။ အဲသည် တော့ စပါးတွေက ပေါက်လာ တယ်။
အဲသဟာကို တိရစ္ဆာန် သတင်းစာထဲမှာ ဖော်ပြတယ်။ ၎င်းအရာသည် သတင်းလားဆို တဲ့ အတွေးနဲ့ ကျွန်ုပ်က ပြုံးမိကာ အနှီလူငယ်က ၀ါးလုံးကွဲရယ်မော လိုက်ပုံ ရပါတယ်။ အနို့သော်တစ် ခုရှိတာက ခြင်္သေ့မင်းက အဲသည့် စပါးစိုက်ဖို့ကို လမ်းညွှန်တာ။ ခေတ်က ခြင်္သေ့မင်းခေတ်။ သို့ပါ သဖြင့် သတင်းဟု ဖြစ်သွားကာ ခြင်္သေ့ခေတ် စုံနံ့သာမြိုင်ဒေးလီး သတင်းစာထဲမှာ ထည့်သွင်းလိုက် လေသလား မပြောတတ်ပါဘူး။
‘‘မြေခွေးခေတ်သတင်းစာ တွေကကော...အဘယ်သို့ရှိတယ် မသိ...တစ်စောင်လောက် စေ့ငု ကြည့်ရင်ကောင်းမယ် ထင်ပါ့’’
ပြောပြောဆိုဆို လေ့လာသူ လူငယ်က မြေခွေးခေတ်သတင်း စာတစ်စောင်ကို ဆွဲယူလို့ ဖတ်ရှု နေပြန်ပါတယ်။ ဂျက်ကလည်း ကိုယ့် လက်ပ်တော့ကလေးနဲ့ ကိုယ်ပြန်အလုပ်ရှုပ်လို့ပေါ့။
မကြာဘူး။ ယင်း၎င်းအနှီလူ ငယ်ဆီက တဝေါဝေါနဲ့ ခပ်သြသြ ရယ်သံကြီးဟာ လေမပါဘဲနဲ့ မိုး ချည်းပဲရွာချလိုက်သလို ထွက်ပေါ် လို့လာပြန်ပါရဲ့။ ဘဇာသတင်း တွေကိုများ တွေ့ပြန်တယ်မသိ။ ဆရာကြီး ဂျက်ပြုံးချင်ရင်လာ ကြည့်တဲ့။ သတင်းတစ်ပုဒ်အပေါ် မှာ လက်ညှိုးကို ထောက်ထားပြန် ချေပေါ့။
‘‘ရေကူးသင်တန်းသို့ သွား ရောက်ကာ မြေခွေးမင်းက လိုအပ် သည်များကို လမ်းညွှန်မှာကြားတဲ့’’
ဟုတ်ပ။ ဂျက်ဆရာသည် လည်း ပါးစပ်ကြီးက မသက်မသာ နဲ့ဆိုသလို ပြဲသွားလေသဗျ။ ဖျံ ကလေးတွေ၊ လိပ်ကလေးတွေ၊ ဖားကလေးတွေ၊ ငါးကလေးတွေ ကို စနစ်တကျရေကူးတတ်ဖို့ သင် ပေးနေတဲ့ သင်တန်းမှာ မြေခွေး မင်းက လမ်းညွှန်တယ်ဆိုတာကို သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြထားတာက တော့ ရယ်ဖွယ်လိလိများဖြစ်နေ လေရော့သလားမသိ။
ဂျက်ရဲ့ ပါးစပ်ကြီးပြဲနေလို့ မှ မူလအနေအထားပြန်မရောက်မီ တိရစ္ဆာန်သတင်းစာလေ့လာသူ လူငယ်က နောက်ထပ်သတင်း တစ်ပုဒ်ကို လက်ညှိုးနဲ့ ထောက်ပြ ထားပြန်ပါလေရော။ ဘာတဲ့။
‘‘တိရစ္ဆာန်အကြီးစား စက်မှု လုပ်ငန်းက ထုတ်လုပ်သည့် ခဲတံ ချွန်စက်နှင့် ဇာဂနာများစ,တင် မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားသို့ မြေ ခွေးမင်းက ဂုဏ်ပြုစကားတက် ရောက်ပြောကြားချီးမြှင့်ဆိုပါ လား’’
အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းက ခဲတံချွန်စက်နဲ့ ဇာဂနာထုတ်လုပ် သတဲ့။ အဲဒါကို တောခေါင်းဆောင်မြေခွေးက ဂုဏ်ပြုကြောင်း စကား ဆိုသတဲ့။ အဲသဟာကို စုံနံ့သာမြိုင်ဒေးလီးသတင်းစာက သတင်းလုပ်ပြီးထည့်သတဲ့။
ဂျက်တို့ ခဏနားတဲ့အချိန် မှာ အယ်ဒီတာအချုပ်က ဆတ် သားခြောက်ကလေး အဖန်ရည် ကလေးနဲ့ ဧည့်ခံသဗျ။
‘‘အနို့ အယ်ဒီတာအချုပ် ဆရာပုတ်သင်ညိုကို မေးပါရ စေ... ဆရာက စုံနံ့သာမြိုင်ဒေးလီး မှာ ခြင်္သေ့ခေတ်...မြေခွေးခေတ် ယခုဒေါင်းအိုးဝေခေတ် အဆက် ဆက် လုပ်လာခဲ့တာဆိုတော့... ခေတ်တိုင်းမှာ တောခေါင်းဆောင် ကို ဝေဖန်သမှု ထောက်ပြသမှု ဘဇာမှ မလုပ်ဘဲ လုပ်သမျှ အမွှမ်းတင်ပြီး ရပ်တည်နေခဲ့သလိုပဲနော် အခု...ဒေါင်းအိုးဝေခေတ်ကိုကောထိုနည်းလည်းကောင်းအတိုင်းပါပဲလား’’
လေ့လာသူ လူငယ်က အနို့ ကလို မေးချေသဗျ။
‘‘ဒါပ...ဟုတ်ပ ဒေါင်းအိုးဝေ တို့လုပ်သမျှ စုံနံ့သာမြိုင်ဒေးလီးထဲမှာ ကောင်းပေစွချည်းပဲ လုပ်ပေးခဲ့တာပါဗျ’’တဲ့။
အဲဒါ အယ်ဒီတာအချုပ် ပုတ်သင်ညိုရဲ့ စကားပေပ။ ပုတ်သင် ညိုက ဆက်လက်လေ့လာပါဦးလို့ လည်း ဖိတ်မန္တကပြုပါသဗျ။
အနှီတစ်ခါမှာတော့ ဂျက် ရော လေ့လာသူလူငယ်ပါ ခေါင်း ကို ပြိုင်တူခါဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒေါင်းအိုးဝေခေတ်မှာ ဆက်ထုတ် ဝေနေတဲ့ စုံနံ့သာမြိုင်ဒေးလီးကို မဖတ်လိုတော့ပါဘူး။
အဘယ်သတ္တ၀ါတောမှာ တက်လာတက်လာ၊ တက်လာတဲ့ အကောင်ကို အမွှမ်းတင်မဟဲ့ဆို တဲ့ တိရစ္ဆာန်သတင်းစာမူဝါဒကြီး ကို အော်ဂလီဆန်လို့ပါ။ ပြီးတော့ ရယ်မိမှာလည်း စိုးလို့ပေါ့။
သတင်းစာဖတ်ပြီး တဟား ဟားရယ်ချင်တဲ့ လူတွေ တိရစ္ဆာန် တွေရှိတဲ့နေရာသွားလိုက်စမ်းပါ ဗျာ။။
From : 7day daily - By : ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/72215
စုံနံ့သာမြိုင်၌ မော်တော်ကား စီးခြင်း
တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ လောက ကြီး ကဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံ ကကို နိမ့်ကျလို့ နေတော့ တာပါ။ တိရစ္ဆာန် တို့ရဲ့ ဝင်ငွေက အဝီစိတဲ့ ခင်ဗျ။ တိရစ္ဆာန် တို့ရဲ့ ပညာရေးက ဟိုး သမုဒ္ဒရာ ကြမ်းပြင်။ တိရစ္ဆာန် တို့ရဲ့ သက်တမ်းက ဇောက်ထိုး မိုးမျှော်။ တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အားကစား က ဓားမ နောက်ပိတ်ခွေး။ တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့ အနုပညာက နတ္ထိ သုည။
ကြာပေါ့။ ကြာခဲ့ လှပါပေါ့။ မြေခွေး ကြီးက ဦးဆောင်ကာ သူ့ အကောင် တစ်စုတို့နဲ့ စုံနံ့သာမြိုင် ဆိုတဲ့ တောကြီးကို ဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ ထုဆစ် ပုံဖော် လိုက်ကြတာ ဟော အခုတော့ဖြင့် လူတွေပေးတဲ့ နာ မည်ကလေး တစ်လုံးနဲ့ တင့်တယ် လို့။
LDJ တဲ့ ခင်ဗျ။
အဲ.. တိရစ္ဆာန် အများစုက အင်္ဂလိပ်စာ လုံးပါရင် ရွံ့ချင် တွန့် ချင်တဲ့ စိတ်အခံ ရှိတာမို့ စုံနံ့သာ မြိုင်တောကြီးကို LDJ အဖြစ် သတ်မှတ် လိုက်ကြောင်း စာရင်းထွက် လာတဲ့ အခါ ထပြီးကကြခုန်ကြ သေး တာတဲ့ခင်ဗျ။ ငါတို့ တိရစ္ဆာန် တွေကို ဘာထင်လို့တုံး၊ ဘာမှတ် နေသတုံး။ ငါတို့က LDJ မှတ် ထားဆိုတဲ့ ဇာတိမာန် ကလေးတွေ နဲ့ပေါ့။
နောက်မှ အင်္ဂလိပ်လိုနည်း နည်းရတဲ့ နွားကြီးတစ်ကောင်က မြို့က လူတစ်ယောက်ဆီမှာ လှည်းသွားဆွဲဖူးတာကြောင့် မျက် စိကလေး၊ နားကလေးနည်းနည်း ကြီးသူ အဲသည်နွားကြီးတစ် ကောင်က LDJ ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဗျုပ္ပတ်ကို ရှင်းပြလိုက်တော့မှ တစ်တောလုံး နည်းနည်းငြိမ်သွား ခဲ့တာပါ။
L က Least ကို ဆိုလိုတာ ဟ။ အနည်းဆုံးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်။ D က Developed ကို ဆိုလိုတာ ဟ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်။ J က Jungle ကို ဆို လိုတာဟ။
တောဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်။အဲသဟာကြောင့် လူတွေက တို့ တောကြီးကို ခေါ်ခေါ်နေတဲ့ LDJ ဆိုတာဟာ Least Developed Jungle အလွန်တရာ အောက်ကျ နောက်ကျ
ဖြစ်တဲ့ တောဂနိုင်မြိုင် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဟလို့ နွားကြီးက ရှင်းပြ လိုက်တဲ့ အခါ ဘုမသိ ဘမသိနည်းနည်းကလေး ကြွနေတဲ့ တိရစ္ဆာန် တချို့ရဲ့ ဖနောင့် ကလေးတွေ
အောက်ပြန် ကျသွား ခဲ့ကြတာပါ။
LDJ ဆိုတာ ဂုဏ်ယူစရာ မဟုတ်။ ရှက်စရာတဲ့။ ကဲ.. မှတ် ကရော။
သို့ကလို အောက်တန်း နောက်တန်း အလွန်ကျနေတဲ့ တိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့ လောကကြီးထဲမှာ တိရစ္ဆာန်ထုကြီးက အလွန်အင် မတန်ဆင်းရဲနေကြလင့်ကစား ကျိကျိတက်အောင် ချမ်းသာနေ တဲ့ တိရစ္ဆာန်တစ်စုကလည်း ဂနိုင့် ကျက်သရေတော်ဆောင်အဖြစ် ရှိကြပါလေရဲ့။
အဲသဟာ အဘယ်အ ကောင်တွေတုံးလို့တော့ဖြင့် မေး မနေပါနဲ့တော့။ မြေခွေးပေါ့။ ခြင်္သေ့ပေါ့။ ကျားပေါ့။ ကျားသစ် ပေါ့။ ဝံပုလွေပေါ့။ ဆင်ပေါ့။
အစွယ်နဲ့ အဆိပ်ကို အားကိုး အားထားပြုပြီးတဲ့သကာလ တော ကို ကုလားဖန်ထိုးလို့ စိုးမိုးအုပ် ချုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အနှီသတ္တဝါတစ်စုက ကြွယ်ပိုးကြွယ်ဝကြီးတွေ ဖြစ်လာ ကြတဲ့အခါ ဂုဏ်နဲ့ဒြပ်ကို အဟုန် တလျှပ်လျှပ် ဖြစ်စေဖို့ရာအတွက် ကားကောင်းကောင်းစီးလို လှ တယ်ဆိုလား။
‘‘ဆရာကြီးဂျက်ရေ ကျုပ်တို့ တစ်သိုက် ကားရှာမလားလို့’’
‘‘လုပ်ပြီ။ အဆွေမြေခွေးက Show Room တွေ ဗွက်ပေါက်နေ တဲ့ဥစ္စာ ကြိုက်တာဝယ်စီး (ဒါမှ မဟုတ်) ကိုယ်ကြိုက်တာကို ကိုယ်လှမ်းမှာခိုင်း၊ ဒါလေးများ’’
ဂျက်က အနို့ကလိုဖြေတော့ မြေခွေးက ပြုံးပါတယ်။ အို.. သူ တစ်ကောင်တည်းမဟုတ်ဘူးခင် ဗျ။ သူ့အပါးခ,ကာ သူ့နားက အမှုတော် ထမ်းနေကြတဲ့ အ ကောင်တွေကပါ အကုန်လုံးပြုံး နေကြတာပါ။ ခြင်္သေ့၊ ကျား၊ ကျားသစ်၊ ဝံပုလွေ၊ ဆင် အပြုံးကိုယ်စီ ဆင်လို့။
‘‘ဆရာကြီးဂျက် ရိုးရိုက်ကို ကြားဖူးတယ်မဟုတ်လား’’တဲ့။
မြတ်စွာဘုရား။ ငါးကြင်း ခေါင်းကို တက်ကိုင်တော့တာပါ ကလား။ Rolls Royce တဲ့။ Charles Stewart Rolls နဲ့ Frederick Henry Royce တို့ ၁၉၀၄ ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ရိုးရိုက်မော်တော် ကားကိုမှ စုံနံ့သာမြိုင်က တိရစ္ဆာန် တစ်စုက ချင်ခြင်းတပ်တော်မူပါ လေသတဲ့။ ဂုဏ်သရေရှိလူကြီး လူကောင်းတွေစီးတယ်ဆိုတဲ့ ဗြိတိသျှမော်တော်ကားနဲ့ စုံနံ့သာ မြိုင်က တိရစ္ဆာန်တစ်သိုက်။
‘‘အဲသည့်အနှီ ရိုးရိုက်က ဘယ့်နှာသို့တုံး ဂျက်ဆရာရဲ့’’
‘‘ဩော်.. ကမ္ဘာကျော်ပေါ့ ဗျာ။ ကားပိုင်ရှင်ရဲ့ နာမည်ကို ရွှေပြားပေါ်မှာရေးပြီး အင်ဂျင် ပေါ်မှာ ကပ်ထားတာ။ ဥပမာ မစ္စ တာမြေခွေး၊ မစ္စတာခြင်္သေ့၊ မစ္စတာ ဝံပုလွေဆိုတာမျိုးပေါ့’’
ကြိုက်သဗျာဆိုတဲ့ ပြိုင်တူ ထွက်လာတဲ့ ကောက်ချက်ချသံနဲ့ အတူ တိရစ္ဆာန်ကြီးတစ်စုရဲ့ သွား ကြီးတွေက ဖြဲလို့ပေါ့။
‘‘အဲ.. ကားပျက်တဲ့အခါ Rolls Royce ရဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ က လေယာဉ်ကို စင်းလုံးငှားပြီး အရောက်လာပြင်ပေးတာ’’
သဘောကျ သကွာဆိုတဲ့ အသံကလည်း ပြိုင်တူပဲပေါ့။ တိရစ္ဆာန်ကြီးတစ်စုရဲ့ မျက်နှာ ထားကြီးတွေက ဝင်းလို့ပေါ့။
‘‘ရှိသေးတယ်။ ကားဒီဇိုင်း တစ်စီးနဲ့ တစ်စီးရဲ့ ဒီဇိုင်းက သိုး ကာသီကာ နည်းနည်းကလေးကွာ သဗျ။ သေချာကြည့်ရင်မတူချေ ဘူး’’
ဟိတ်.. Rolls Royce ဆိုမှ Rolls Royce ဆိုတဲ့ အသံတွေဟာ တစ်တောလုံးဆင်းရဲပြီး ကိုက်ရဲခဲ ရဲတဲ့ အကောင်တစ်စု ချမ်းသာ နေတဲ့ တောကြီးထဲမှာ တော ဦးသျှောင်တစ်သိုက်ရဲ့ နှုတ်ဖျား ကနေ ပြိုင်တူဆိုသလို ထွက်ကျ လာခဲ့ပါလေရဲ့။
အဲသည့် အနို့သော်က တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ကြားမှာ သော့ ချက်စကားဖြစ်သွားခဲ့ရပါလေ တယ်ခင်ဗျ။
‘‘အနို့သော်တဲ့ ဘဇာအနို့ သော်တုံး ဂျက်ဆရာရယ်။ ကျုပ် တို့တိရစ္ဆာန်ဦးသျှောင်တစ်စုမှာ အသပြာရှိသဗျာ။ ခုနက ပြောခဲ့ တဲ့ ရိုးရိုက်ဆိုတာကို မှာပြီးစီးမယ် ဗျာ။ အဲဒါ ဘယ့်နှာကြောင့် အနို့ သော်ချေရလေသတုံးဗျာ’’
တိရစ္ဆာန်ငတိတို့က တိရစ္ဆာန်အသိနဲ့ ပြောတာကို ဂျက်ဆရာ သည်းခံရချေသဗျ။ ပြီးမှ စိတ် အေးအေးနဲ့ ရှင်းရတာပါ။
ဟုတ်တယ်လေ။ Rolls Royce က ပိုက်ဆံရှိတိုင်း ဝယ်စီး လို့ရတာမျိုးမှမဟုတ်တာ။ အဲ သည့် ပိုက်ဆံဘယ်လိုရလာသတုံး ဆိုတာကိုလည်း အသေအချာ စိစစ်သေးတဲ့ဥစ္စာ။
ချဲဒိုင်ချုပ်လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ရိုးရိုက်ကို ဝယ်လို့ မရ။ ဘိန်းရောင်းပြီး ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ ရိုးရိုက်ကို ဝယ်လို့မရ။ ဓားပြတိုက်ပြီး ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံ တွေနဲ့ ရိုးရိုက်ကို ဝယ်လို့မရ။
‘‘အဆွေတိရစ္ဆာန်တို့ ပိုက်ဆံ တွေ အဘယ်သို့ရလာသတုံးဆို တာကိုတော့ ဖော်ပြဖို့လိုသဗျ’’
‘‘ဟောဗျာ.. ကိုယ့်အိတ်ထဲကပိုက်ဆံ.. ကိုယ်ဘယ်လိုရရပေါ့’’
တိရစ္ဆာန်ကြီးတွေ ခံပြင်း သွားကြတဲ့ပုံပါ။
မြေခွေးက သူ့ဦးသျှောင်ဘဝ နေ့ရက်တွေမှာ သမီးသုံးကောင် ကို မင်္ဂလာဆောင်ပစ်လိုက်လေ ရဲ့။ အကြီးမ နှစ်ကောင်က သူ ဦးသျှောင်မဖြစ်မီ မင်္ဂလာဆောင် ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့် ဒုတိယအကြိမ် ထပ်ဆောင်ကြတာပါ။ အငယ် ဆုံးအကောင်ကတော့ အသစ် စက်စက်ဆောင်တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပဲပေါ့။ တစ်တောလုံးလာပြီး လက်ဖွဲ့တော်မူကြရတဲ့ မင်္ဂလာဆောင် တွေပါ။ ဘယ်လက်ဖွဲ့က ဘယ် အကောင်ဆိုတာ မှတ်တမ်းအတိ အကျနဲ့ ရေးသွင်းစာရင်းပြုစုထား ရလေသတဲ့။ အဲသည့် မင်္ဂလာပွဲ တွေအပြီးမှာ ဝုန်းဆို မြေခွေးတို့ စီးပွားတက်သွားရတယ်ဆိုလား။
ခြင်္သေ့ကတော့ သူ့ဂူအ ပေါက်ဝနားမှာ ခါးထောက်ရပ် ကာ ဟိုးမျက်စိတစ်ဆုံးဆီက လက်ပံတောကို လှမ်းပြပြီး သည်နေရာ ကနေ အဲသည့်နေရာအထိ ငါယူ သကွာ၊ စက်မှုဇုန်လုပ်မကွာလို့ ဆိုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ အုန်းဆို စီးပွားတက်သွားရတယ်ဆိုလား။
ကျားကကျတော့ တိရစ္ဆာန် ဆက်သွယ်ရေးကို တာဝန်ယူ တာ။ အသပြာထောင့်ငါးရာလောက်တန်တဲ့ ဆင်းမ် (SIM) ကတ်တွေကို လူတွေဆီကဝယ်လာပြီး ဘာမသိ ညာမသိတိရစ္ဆာန်ကလေးတွေကို သိန်းနှစ်ဆယ်၊ သုံးဆယ်နဲ့ ဖြန့်တာ။ အဲသည့် နောက်ပိုင်းကျားတို့ ထုန်းခနဲ စီးပွားတက်သွားရတယ်ဆိုလား။ ထား။
အနို့နှယ်သို့နှယ် နည်းလမ်း အသွယ်သွယ်နဲ့ စီးပွားဖြစ်သူ တိရစ္ဆာန်ကြီးများ Rolls Royce ကားဝယ်စီးဖို့ရာ ပိုက်ဆံကို ဂုဏ် ရှိရှိ ဘယ်သို့ရှာခဲ့ကြောင်း ဘယ် လိုလုပ်ပြကြမှာပါလိမ့်။
‘‘အိုကွာ.. ကားဆိုတာ ဘီး တွေလိမ့်ပြီး လမ်းပေါ်မှာ သွားနေ ကြတာချည်းပါပဲ။ ကိုယ်ဝယ်လို့မှ သူမရောင်းရင် ညောင်းပေါ့။ စီး စရာကားတွေမှ အပုံ’’
မြေခွေးစကားက မှန်ပါ တယ်။ စီးစရာကားတွေ အများ ကြီးပါ။ တိရစ္ဆာန်ပေမယ့် မာနနဲ့ ခင်ဗျ။ မရောင်းတော့ မစီးရုံပေါ့။
အခုအထိ Rolls Royce ပေါ်မှာ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်မှ မတွေ့ဖူးသေးဘူး။
By - ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း
တစ်နှစ်သုံး တိရစ္ဆာန်တွေ ပြုံးပါ
တိရစ္ဆာန် ဆေးကု ဆရာဝန် ကလေး ဒေါက်တြာ ကွက်နီ တစ်ယောက် လူ့ရပ် လူ့ရွာ လူ့ကမ္ဘာ ကနေ ဖယ်ကြဉ် ရှောင်ခွာ သွားပြီးတဲ့ သကာလ တောထဲမှာ သွားပြီး ဆေးခန်း ကလေး ဖွင့်ထားခဲ့တာ ကြာပဲ ကြာလှပါပေါ့။ ဟုတ်တယ် လေ။ တောပါလို့ ဆိုမှ ဘယ်တော ရှိမှာတဲ့လဲ။ နာမည်ကျော် စုံနံ့သာ မြိုင်ပဲပေါ့။
လူ့ရပ် လူ့ရွာထဲမှာ တိရစ္ဆာန် ဆေးကုခန်း ကလေး ဖွင့်တဲ့ အခါ ကြောင်ကလေးတွေ ရောက်လာ လိုက်၊ ခွေးကလေးတွေ ရောက် လာလိုက်နဲ့သာ ဆေးခန်း ကလေးကို ပိတ်ပိတ်ပြီး ပြန်သွား ရလေ့ ရှိပေမယ့် စုံနံ့သာမြိုင် ဆိုတဲ့ တိရစ္ဆာန် ပေါင်းစုံရာ တောကြီး ထဲကိုလည်း ဆေးခန်း ပြောင်းဖွင့် လိုက်ရော လာလိုက်တဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေ ဆိုတာ။ ဆေးထိုးတဲ့ ပိုက်ပြွန်ဟာ သင်္ကြန် ရေပက်တဲ့ ရေပြွတ် ပမာကို ဖြစ်လို့။
တစ်ရက်တော့ ဒေါက်တာ ကြွက်နီနဲ့ သူ့ဆေးခန်းကလေးထဲ မှာပဲ ဆုံပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အခုတစ်လော ဘဇာရောဂါတွေ အဖြစ်များနေသတုံးဗျာ ဘာညာ မေးရမြန်းရပေတာပ။
‘‘အင်း.. ဟုတ်ပ ဆရာဂျက် ပြောတော့မှ သတိထားမိတယ်။ အက်ဆီးဒင့်ပဲဗျ။ အခုနှစ်ထဲမှာ ဆေးခန်းရောက်လာတဲ့ တိရစ္ဆာန် အများစုဟာ မတော်တဆမှုတွေ ချည်းပဲ’’
Accident (ခေါ်) မတော် တဆမှုတွေများတယ်ဆိုပါ့လား။ တိရစ္ဆာန်တွေ ဘာ့ကြောင့်များ နမော်နမဲ့ဖြစ်ကုန်ကြရပြန်တာပါ လိမ့်။ ခြေမခိုင်၊ လက်မခိုင်ဖြစ် ကုန်ကြရပြန်တာပါလိမ့်။
‘‘အဲ.. ကြည့်.. ပြောရင်း ဆို ရင်း.. လာပြီ’’
ဟုတ်ပ။ ဒေါက်တာကြွက်နီ ရဲ့ အက်ဆီးဒင့်တွေများတယ်ဆို တဲ့စကားမှ မဆုံးတတ်သေးခင်မှာ ကိုပဲ မျောက်လွှဲကျော်အမကြီး တစ်ကောင် ကလေးလေးကို ပွေ့ လို့။ မျက်စိပျက် မျက်နှာပျက်နဲ့။ နောက်နားက ကပ်ပါလာတာက အဖေဖြစ်ပုံရတဲ့ မျောက်လွှဲကျော် အထီးကြီး။ ပွစိပွစိနဲ့။
‘‘ငါအတန်တန်ပြောတယ်။ ကလေးပြုတ်ကျမယ်၊ ကလေး ပြုတ်ကျမယ်လို့။ ငါသတ်မိတော့ မယ်နော်’’
‘‘ကဲပါတော်.. နောင်မဖြစ် စေရဘူး ပြောနေတဲ့ဥစ္စာ’’
‘‘အဲဒါ ဘယ်နှခါရှိပြီလဲ။ ဟင်.. မျောက်စုတ်မ’’
မျောက်ထီးနဲ့ မျောက်မ ကွိ ကွိကွကွဖြစ်နေကြတာကို ဒေါက် တာကြွက်နီက ဆီးပြီးဟန့်ပါ တယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲပြော၊ တိုတို ပြောလို့ ငေါက်လိုက်တော့မှ မျောက်မက ကလေးကိုတစ်ချက် ငုံ့ကြည့်လိုက်ကာ ကလေးလွတ် ကျလို့တဲ့။
‘‘ကျမှာပေါ့.. ဟင် တစ်ပင် နဲ့တစ်ပင်လွှဲတာ ဆယ်လ်ဖီ (Selfie)ရိုက်ရင်းနဲ့လွှဲတယ်။ ကလေးကို သေချာမဖက်ထားဘူး ငါနော်’’
ဒေါက်တာကြွက်နီက ဒေါသ ဖြစ်နေတဲ့ မျောက်လွှဲကျော်အထီး ကြီးကို တားပါတယ်။ ခင်ဗျားချစ် ချစ် ဟိုအပင်သည်အပင်ကူးရင်း ဆယ်လ်ဖီရိုက်တဲ့ကိစ္စ ပြန်တော့မှ ရှင်းဆိုပြီး မျောက်ကလေးရဲ့ ကွဲ သွားတဲ့ ခေါင်းကို ချုပ်၊ ကျိုးသွား တဲ့လက်ကို ကျောက်ပတ်တီးစည်း ရရှာပါတယ်။
ဒေါက်တာကြွက်နီ ဂျက်ကို ပြောတဲ့ စုံနံ့သာမြိုင်မှာ အက်ဆီး ဒင့်တွေများလာတယ်ဆိုတဲ့စကား ကို ဂျက်အတွေးပွားနေခိုက်မှာကို ပဲ မျောက်လွှဲကျော်မိသားစုက ကိစ္စပြီးလို့ ပြန်လည် ထွက်ခွာသွား ကြကာ သားပိုက်ကောင်ကြီးတစ် ကောင်က ရောက်ရှိလို့နေပြန်ပါ ပြီ။ သားပိုက်ကောင်ပေါက်စ ကလေးတစ်ကောင်က ရေတွေရွှဲ နစ်ပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်လို့။
ဘယ်လိုများဖြစ်လာရပြန်တာတုံး ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာကြွက်နီရဲ့ စကားအဆုံးမှာ သားပိုက်ကောင်အမ ကြီးက သူ့အက်ဆီးဒင့်တစ်ခုလုံး ရင်ဖွင့်ပါလေရဲ့။
‘‘ချောင်းစပ်က တံတားပေါ် မှာ ဆယ်လ်ဖီရိုက်နေတာ ဆရာ ရယ်။ ရှုခင်းကလှတော့ နေလုံး မပျောက်ခင် အမိဆွဲနေတာ ကလေးထွက်ကျပြီး ရေထဲရောက် နေတာ သတိမထားမိဘူး။ ကြည့် ပါဦးဆရာရယ် တုန်နေလိုက် တာ’’
‘‘အချိန်ကြာလွန်းတော့ အ အေးပတ်သွားပုံရတယ် မှန်းစမ်း’’
သားပိုက်ကောင်အစ်မကြီး က သူ့ကလေးကို ဆရာဝန်ကြည့် နေတုန်းမှာကိုပဲ လက်ထဲကဖုန်း ကို တစ်ချက်ပွတ်နေသေးပြန်ပါ ရဲ့။ ဆယ်လ်ဖီများ ရိုက်ချင်နေ သေးလေသလားမသိ။
စုံနံ့သာမြိုင်မှာ အက်ဆီးဒင့် တွေများလာတယ်ဆိုတာ ဆယ်လ်ဖီရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေပဲ ထင်ပါရဲ့။
ဟောကြည့်စမ်း။ ယုန်တစ် ကောင်က မုန်လာဥကြီးချိုးပြီး ကိုင်ထားတဲ့ပုံကို ဆယ်လ်ဖီရိုက် လို့။ ပြုတ်ကျလုလု ပိန္နဲသီးကြီး ပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ရှဉ့်ကလေးက လည်း ဆယ်လ်ဖီရိုက်လို့။ စပါး ကြီးမြွှေကြီးက ပတ်ထားတာကို ခံနေရတဲ့ ဒရယ်ကလေးတစ် ကောင်ကလည်း ဆယ်လ်ဖီတော့ ရိုက်နေသေးသဗျ။ ရေအိုင်စပ်စပ် တစ်ခုဆီမှာကတော့ မိကျောင်းရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ခြေထောက်တစ် ချောင်းပါနေပြီဖြစ်တဲ့ နွားကလေး တစ်ကောင်က ဆယ်လ်ဖီရိုက်လို့။
တစ်နေရာမှာကျတော့ ကျုံးထဲ သွင်းပြီး ထူးခတ်တာကို ခံထားရ တဲ့ ဆင်ကြီးသုံးကောင်က လက် ကိုင်ဖုန်းကိုယ်စီနဲ့ ဆယ်လ်ဖီရိုက် လို့။ ခြေထောက်မှာ သံခြေချင်း တွေနဲ့ သစ်ဆွဲလာတဲ့ ဆင်ကြီးက လည်း စမ်းချောင်းကလေးနား ရောက်တော့ ရှုခင်းကို မငြင်းသာ တော့ဘဲ ပါလာတဲ့ ဖုန်းကလေးနဲ့ ဆယ်လ်ဖီရိုက်လို့။ ကုန်ကုန်ပြော ရရင် မြို့ကိုပို့မယ့် ကြက်ခြင်းတွေထဲက တောကြက်တွေ အဲသည့် ခြင်းထဲမှာ သူက အရင်ငါက အရင်နဲ့ ဆယ်လ်ဖီလုယက် ရိုက်နေလိုက်ကြတာ။
တစ်ညမှာတော့ စုံနံ့သာမြိုင် မှာ တောမီးလောင်ပါတယ်။ တောမီးက အစမှာ သည်လောက်မများ ပါဘူး။ တိရစ္ဆာန်ကြီးငယ်တွေ ချက်ချင်းငြှိမ်းရင် ငြိမ်းပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရှိသမျှအကောင် တွေက ချက်ချင်းမငြှိမ်းကြသေးဘဲ မီးရောင်မှာ ဆယ်လ်ဖီရိုက်နေခဲ့ ကြသေးဆိုလား။ ဒါနဲ့ မီးက အ ငြှိမ်းနောက်ကျပြီး တောတစ်ဝက် နီးနီး လောင်သွားခဲ့တယ်ဆိုပါရဲ့။
ဂျက်လည်း သနားတာနဲ့ တိရစ္ဆာန်ကလေးတွေကို စုထား တဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်းကို သွားကြည့် မိပါရဲ့။ ဟောဗျာ။ လက်ကိုင်ဖုန်း ကိုယ်စီနဲ့ ဆယ်လ်ဖီရိုက်နေလိုက် ကြတာ။
‘‘ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ်ကြည့်ပြီး သဘောကျနေလိုက်ကြတာ လောကကြီး ဘာဖြစ်နေလဲကြည့် ဖို့ သတိမရကြဘူး’’
တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် ကလေး ဒေါက်တာကြွက်နီရဲ့ စကား။
ရိုက်ကြ။ ရိုက်လို့ရတဲ့နေရာ မှာ ရိုက်ကြ။ ကိုယ့်ရုပ်ကိုယ် ပြန် သဘောကျနေရရင် တစ်တော လုံးပဲ ပြာကျကျ။ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ဘဝကို လူတွေဉာဏ်မီပုံမရပါ ဘူး။ ။
By - ဂျက်ကွမ်းခြံကုန်း
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/69116
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, July 04, 2016 No comments:
အဟောင်းပြောင်း၍ အသစ်တွေ ကောင်းစေ
ဗျို့ ... အယ်ဒီတာ . . .
အစိုးရ သစ်က လုပ်မယ် ပြောထားတဲ့ ရက်၁၀၀ စီမံချက် ဆိုသဟာ တွေလည်း ဘာထူးတုံးဗျ။ အစတုန်း ကတော့ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ တွေမှာ ဘယ်သင်း ဘယ်ဌာနက ဘာတွေ လုပ်လိုက်မှာ ဆိုပြီး ပါနေတာပဲ။ အခုတော့ ဘာတွေ ဘယ်လောက် တိုးတက် နေပြီဆိုတာ နောက်ဆက် တွဲတော့ မဖတ်ရ သေးဘူးပေါ့ဗျာ။
သြော် . .ရက် ၁၀၀၊ ရက် ၁၀၀။ ဘာတွေ ဖြစ်လာမယ်မှန်း မသိပေတဲ့ လူထု အကြား မှာတော့ အင်မတန် ရေပန်းစား ကျော်ကြားပါတဲ့ ရက် ၁၀၀။ ထားပါလေ။ ဒါတွေကို အယ်ဒီတာ မင်းတို့ သိပြီးသား။
ရက် ၁၀၀ ဆိုသဟာ ကတော့ နိုင်ငံတကာ မှာလည်း ရှိတယ် မှတ်တာပဲ။ ကျုပ်ကြားဖူး တာပြော တာနော်။ သိတဲ့ အတိုင်း ကျုပ်တို့ က အစိုးရ အသစ် ပြောင်းတာ အခုပါနဲ့မှ နှစ် ခါလောက် ကြုံဖူးတော့ သူများ တိုင်းပြည် တွေမှာ အစိုးရများ နှစ်စေ့လို့ အသစ်ပြောင်းတဲ့ အခါ ဘာတွေ ဘယ်လို လုပ်ကြ ပြုကြတယ် ဆိုတာ တယ်ပြီး သိလှတယ် မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဘိုလိုတတ် တဲ့ မျက်စိကြီး နားကြီးတွေ ဆီက ကြားရတာ ရက် ၁၀၀ ဆိုတာဟာ အစိုးရသစ် အတွက် ဟန်းနီးမွန်း ကာလ ပါတဲ့။
မြန်မာလိုဆိုရရင် တော့ ပျားရည်ဆမ်း ခရီးပေါ့ဗျာ။ လင်နဲ့ မယား ဖြစ်စကာလ အိမ်ထောင်သည် ဘဝရဲ့ ကနဦး ကာလတွေမှာ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ချစ်ရည်လူးတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ကြည့်ကြ၊ အသာဖွဖွ တို့ထိကြနဲ့ တစ် ယောက် အားနည်းချက်ကို တစ်ယောက် မြင်သော်မှ ခွင့်လွှတ်တဲ့ စိတ်အခံတွေ အမှန်အကန် ဝင်နေတဲ့ ကာလ ဆိုရမှာပေါ့လေ။
အဲသလိုပဲ အစိုးရသစ်နဲ့ ပြည်သူဟာလည်း ရွှေပြည်ကြီးမှာ လိုဆို ငါးနှစ်သက်တမ်းပေါ့လေ။ ပေါင်းရသင်းရတော့မှာ ဖြစ်တာ ကြောင့် ပထမ ရက် ၁၀၀ ကို လည်း အစိုးရနဲ့
ပြည်သူ ပေါင်း ဖက် အတူနေကြ တော့မယ့် နှစ် ကာလတွေ အတွက် ပျားရည်ဆမ်း ကာလ အဖြစ် သတ်မှတ် ထားတာ တဲ့။ ရက် ၁၀၀ အတွင်းမှာ အစိုးရ နဲ့ပြည်သူဟာ ခုနင်က
ပြောသလို ညားခါစ လင်မယား ပမာ ချစ်ရည် တူမဝ တို့ထိကျီစယ် ကြပြီး ကာလ တစ်ဦးအမှား တစ်ဦးက မပြောဘဲ အသာကြည့် နေကြတဲ့ အချိန်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။
တစ်ဦးအကဲ တစ်ဦး ကြည့်ပြီး အမှားလုပ်သော်မှ အခု အသစ်တက်လာတဲ့ အစိုးရဆို တော့ ဒီလောက်တော့ မှားယွင်း ချွတ်ချော်တာ ရှိမှာပါပဲလေဆိုပြီး သကာလခွင့်လွှတ်ထားတဲ့ သဘော။
ကျုပ်တို့ ရွှေပြည်ကြီးမှာကျ အစိုးရသစ်ရဲ့ ရက် ၁၀၀ က တစ် မျိုးတစ်ဘာသာရယ်ခင်ဗျ။ သူ့ ဟာက တက်လာပြီးကတည်းက ရက် ၁၀၀ အတွင်း ဘာတွေဘယ် လို ဆောင်ရွက် မယ်ဆိုပြီး တက် ထောင်မောင်းနင်း ကြွေးကြော် လာတာ။ ဟိုဟာလုပ်ပစ်မယ်။ ဒီဟာလုပ်လိုက်မယ်နဲ့။ အောင် မလေး ဝန်ကြီးဌာနတွေ အလိုက် လုပ်ပစ်မှာတွေက များလွန်းလို့ ကျုပ်တို့ဖြင့် ကြာတော့ ဘာက ဘယ်လိုဆိုတာ မှတ်တောင် မမှတ် မိတော့ပါဘူးဗျာ။
တကယ်ပါပဲ။ သူများနိုင်ငံက သူများအစိုးရတွေ အသစ်တက်လာတဲ့အခါ အဲသလို ပဲ တိုင်းပြည်ကို ပြောကြသလား၊ မပြောကြဘူးလားတော့ ကျုပ်တို့ မသိဘူးခင်ဗျ။ ဒါပေသိ ရွှေပြည် ကြီးမှာတော့ ဒီဝန်ကြီးဌာန၊ ဟို ဝန်ကြီးဌာနများက ရက် ၁၀၀ အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း ဆောင်တာများ စာရင်းဆိုပြီး တောင် ထွက်လာတာကလား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းတာပေါ့။ ပြီးတော့လည်း ပြည်သူ့အတွက် လုပ်မှာပဲဟာ။ မကောင်း ဘယ့်နှယ်ရှိရမှာလဲလို့။ အရေးကြီးတာက ပြောတဲ့ အတိုင်း ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့။ ပြောပြောပြီး ပြီးဆိုရင်လည်း ဘယ်ကောင်းမှာ လဲဗျနော် အယ်ဒီတာရဲ့။
စကားပုံ ရှိမဟုတ်လား။ လူပြောမသန် လူသန်မပြောတဲ့။ အလုပ်လုပ်တဲ့ သူက လုပ်စရာရှိတာတွေ တန်းစီ ပြီးလုပ်သွားတာ စကားပြောဖို့ အချိန်တောင်မှ မရှိဘူး။ အလုပ် မလုပ် အီးယောင်ဝါးတွေကျ ဟိုဟာလုပ်မယ်၊ ဒီဟာလုပ်မယ်ဆိုပြီး နှုတ်တက်ရွရွ တဖွဖွသာ ပြောပြီး ရင်းပြောနေတာ။ သူ့ဟာက လက်မပါဘူး။ ဒါက စကားပုံရဲ့ ဆိုလိုရင်းကိုပြောတာ။ အခု ကျုပ်တို့ လူကြီးမင်းတွေကျ အဲဒီစကားပုံကို ပြောင်းပြန်လှန်ပစ်တဲ့သူတွေ ခင်ဗျ။ ဘာမှတ်နေသလဲ။ ပေါ့သေးသေး မထင်လေနဲ့။
အင်းလေ . . ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီဟာကိုး။ ဘယ်လိုတွေများ စကားပုံကိုပြောင်းပြန်လှန်ပစ်ကြသတုံး။ ဟော..ကြည့်ဗျာ။ကျုပ်တို့လူကြီးမင်းတွေဟာလေ လူပြောမသန်တဲ့သူလည်း မဟုတ်သလို လူသန်မပြောတွေလည်း မဟုတ်ဘူး။ လူပြောသန် လူသန်ပြောတွေပါဗျ။ ပြောလည်းပြောတယ်၊ လုပ်လည်းလုပ်တယ်။
အဟုတ်။ ကျုပ်တကယ် ပြောတာ မယုံမရှိနဲ့အယ်ဒီတာ ရေ့။ ပြောသလိုလုပ်ပြီး လုပ် သလိုပြောတာ။ တချို့ဟာတွေကျ တော့လည်း ပြောတာ ပြောထား ပေမယ့် ချက်ချင်းလုပ် မရတာ တွေရှိသပေါ့။ ဒါက ခြွင်းချက်။
ဥပမာဗျာ ဟိုတစ်လောက ဝန်ကြီးတစ်ယောက်ပြောတာ။ ဘာတဲ့။ ဟေ့ မင်းဘာလုပ်နိုင်သလဲ၊ ငါဘာလုပ်နိုင်သလဲ အဲသလို မာန်တင်း ပြီး လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် အရှေ့တောင် အာရှမှာ မြန်မာဆိုတာ လေ ဟောဒီကျုပ်တို့မြန်မာတွေ ဆိုတာဟာလေ အာရှကျားတောင်မကဘူး။ အာရှမှာ ဂေါ်ဇီလာ တောင်မှ ဖြစ်နိုင်သဟေ့။ အနှီဝန်ကြီးစကားကြားရတာ ကျုပ်တို့မှာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကိုးတောင်ကျားလို့ ထင်နေရာက ငါတို့ဟာဂေါ်ဇီလာကွလို့တောင်မှ ထပြီးလက်ခမောင်း ခတ်ပစ်ချင်စရာ။ နို့ပေတဲ့ ဒါက ချက်ချင်းတော့ ဘယ်ဖြစ်နိုင် မှာလဲ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ကြိုးစား တည်ဆောက်သွား ရမှာပဲဟာ။ သို့သော်လည်း အခုလို ပြောထားတယ်ဆိုကတည်း က မဆိုးလှဘူး။ ကျုပ်တို့ စိတ်အားတက်ရတာ အမြတ်ပေါ့။
နောက်ထပ် ဝန်ကြီးတစ်ပါး ကျတော့ ကျောင်းဆရာဘဝက လာခဲ့လို့ မှတ်တာပဲ။ နည်းနည်း တော့ ဟောက်ချင်ပြုချင်တဲ့ ဉာဏ်ကလေးတော့ ရှိသပေါ့လေ။ ဒါကလည်း တမင်နာစေ သာစေ ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ပြောတာမဟုတ် ပါဘူး။ အားလုံးကို ကောင်းစေ ချင်လို့သာ ကရုဏာဒေါသောနဲ့ ပြောရှာတာ။ သူက ပြောသဗျာ။
လယ်သမားတွေဟာ ချေးငွေရရင် သောက်စားဖြုန်းသုံးပစ်တာပဲ။ ကိုယ့်လယ် ကိုယ့်ယာကျ တိုး တက်အောင် လုပ်ချင်စိတ်မရှိကြ ဘူး။ ပြီးတော့လည်း တိုင်းပြည်မှာ ဘဏ္ဍာငွေတွေ ဆုံးရှုံးလျော့နည်း လေလွင့်နေတာဟာ လယ်သမား တွေ ငွေချေးပြီး ပြန်မဆပ်ကြလို့ တဲ့။
သူပြောတာ ယေဘုယျတော့မမှားဘူး။ ဒါပေတဲ့ လယ်သမား တွေရတဲ့ ချေးငွေဟာ သောက်စားပျော်ပါးလို့ ကုန်သလား၊ အကြွေးဆပ်လို့ ကုန်သလား ဆိုတဲ့ စေ့ငု စဉ်းစား ပြောကြား ချက်တော့ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဟာက ကျောင်းသား အိမ်စာ မလုပ်တာပဲ ဖိပြော နေတာ။ အနှီကျောင်းသားရဲ့ ဆင်းရဲတဲ့ မိဘကို အိမ်ရောက်ရင် ဝိုင်းကူနေ ရတာကျ မမြင် သလို ဖြစ်
ပြဿနာရဲ့ အကြောင်းမှန်ကို မသိရင် အကျိုးရလဒ်မှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကလည်းသူ့အပြစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူးလေ။
တစ်သက်တာပတ်လုံးကျောင်းစာသင်ခန်းထဲမှာပဲ ကျင်လည်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကာ ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလယ်ကွင်းထဲကဘဝတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်နိုင်ပါ့ဦးမလဲ။
အထူးသဖြင့် ရက် ၁၀၀ အတွင်းတော့ နားလည်နိုင်မယ် မထင်ဘူးဗျ။ သူ့ရှေ့သွားလေသူဝန်ကြီးတွေတောင် တစ်သက်လုံးတိုင်းပြည်သာ အတင်းကာရော တက်အုပ်ချုပ်လာတာ။ လူထုအကြောင်း ဘာသိကြတာမှတ်လို့။ အခုကတော့ လူထုအစိုးရ၊ လူထုဝန်ကြီးဆိုတော့ကာ နည်းနည်း အချိန်ပေး လေ့လာလိုက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်လေ။ အရေးကြီးတာက လူထုဘဝကို နားလည်ချင်တဲ့ စိတ်ရှိဖို့ သာလိုရင်းခင်ဗျ။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား အယ်ဒီတာရဲ့။
ပြောသလိုလုပ်ပြီး လုပ်သ လိုပြောတဲ့ လူကြီးမင်းတွေထဲမှာ နောက်ထပ် ဝန်ကြီးချုပ်တစ် ယောက်ကတော့ အတော်ပဲ ‘ဟော့’တယ်။ တခြားဟုတ်ရိုး လား။ ကျုပ်တို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့ဗျ။ ‘ဟော့’ဆို ရွှေ ပြည်ကြီးမှာ အလွန်အသုံးများတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဆိုသဟာကြီးမှာ တောင် နာမည်တစ်လုံးရနေတာ မောင်။ နှယ်နှယ်ရရမထင်လေနဲ့။
သူ့လိုအချိန်တိုအတွင်းမှာ လူသိ များဖို့ဆိုတာ လွယ်မှတ်လို့။ အခု အစိုးရသစ်တက်လာတာ သုံးလနီးပါးရှိပြီ။ တချို့ဝန်ကြီးတွေကို လူထုက နာမည်တောင် ရင်းနှီးသေးတာမဟုတ်ဘူး။
ဒါပေသိသူကတော့ ထူးခြားတယ်။ ရာထူးလက်ခံပြီး မကြာမတင်ကလေးတင် နာမည်တစ်လုံး ရသွားတာ။ ဘာတဲ့။ ‘ကွီးဖြိုး’တဲ့။ သဘောက တော့ ကိုကြီးဖြိုးလို့ ချစ်စနိုးခေါ် တာ။
အဲ. . . သူကျတော့တစ်မျိုး။ သူလည်း တော်တော်ပြောတယ်။ ပြောတာတွေများလို့ ပြောခဲ့တာ တွေထဲက ဘယ်ဟာကိုစပြီး လုပ် ရမယ်တောင် မသိဘူးဖြစ်နေတာ။ အရက်၊ ဘီယာ၊ ကာရာအိုကေ၊ နိုက်ကလပ်တွေ ည ၁၁ နာရီနောက်ပိုင်း ပိတ်ပစ်မယ်တဲ့။ ကျူးကျော်တွေကို နေစရာ ဖန်တီးပေးမယ်။
ဒီအတွက် ကျူးကျော်တွေကို နေရာဖန်တီးပေးတဲ့ အစိုးရအဖြစ် ရာဇဝင်မှာ စာတင်စေရ မယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကားတွေကျပ် တယ်။ သဟာကြောင့် လိုင်းကား အရေအတွက်ကို လျှော့ ချရမယ်။ ပြီးတော့လည်း လမ်းလယ်ကောင် မှာ ကျောက်တုံးကြီးတွေ ချထား တာကလည်း ကားလမ်းတွေ ပို ကျပ်စေတယ်။ အနှီကျောက်တုံး ထိုးထိုးထောင်ထောင်တွေကို ကားက တိုက်မိပြုမိတယ်။ ဆို တော့ အဲဒါတွေကိုလည်း တချို့ နေရာတွေမှာ ဖယ်ရှားသံဆန်ခါတွေနဲ့ အစားထိုးမယ်။
တော်တော်ကောင်းတဲ့ အစီ အစဉ်တွေပါ။ လုပ်နိုင်ရင်ပေါ့လေ။ပြီးတော့ ဟိုတစ်ရက်ကလည်း ထပ်ပြောတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကို နေချင့်စဖွယ်မြို့ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်မယ်တဲ့။
ကိုင်း...မကောင်းရှိပါ့မလား။ လုပ်ပေးပါ ကွီးဖြိုး။ ရန်ကုန်မှာ မိုးရွာရင် ရေတွေသိပ်လျှံတာပဲ။ ရေမလျှံရင် ရန်ကုန်ဟာ နေချင်စရာပါ။ မော်တော်ကားတွေ စည်းကမ်းမဲ့ မမောင်း ကြတော့ရင် ရန်ကုန်ဟာ နေချင်စရာ ဖြစ်လာမှာ။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ဈေးရောင်းသူတွေ မရှိတော့ရင် ရန်ကုန်ဟာ နေချင်စရာ ဖြစ်လာမှာပါ။
ဒါပေတဲ့ သူတို့တွေအတွက်တော့ ဈေးရောင်းစရာ နေရာထိုင်ခင်းများ ဖန်တီးသမှု ပြုရပေမပေါ့။ ဟိုတစ်လောက ရန်ကုန်မှာ ကြက်သားဈေးကြီးလို့ ကြက်သားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ကွီးဖြိုး အဲလေ..ကိုကြီးဖြိုးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတယ်။ မကြာမှီ ကြက် သားဈေးတွေ ကျတော့ မယ်ထင် တာပဲ။ ကြက်သားဈေးကျသလို တခြားသားငါးနဲ့ သစ်သီးဝလံကုန် ဈေးနှုန်းများ တရိရိတတိတိ တက် နေတာ ကျအောင် လုပ်နိုင်ရင် လည်း ရန်ကုန်ဟာ နေချင်စရာ ဖြစ်လာမယ်။
အင်း...ကုန်ဈေးနှုန်း ကျရင်တော့ ရန်ကုန်မှာ မဟုတ် ဘူး။ ရွှေပြည်ကြီးတစ်ပြည်လုံး ပျော်စရာကောင်းမှာပါခင်ဗျာ။
နောက်ပြီး လမ်းတွေက ကွမ်းတံတွေးတွေနဲ့ စွန်းပေမနေ ဘူးဆိုရင်လည်း ရန်ကုန်အပါ ရွှေပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာ သွား သွားလာလာ နေချင်စရာဖြစ်လာ မှာပေါ့။ ဒါကြောင့် လူကြီးမင်း တချို့က ကွမ်းကိစ္စကို ကိုင်ကြပါ ရော၊ ကွမ်းယာဆိုင်တွေပါ ပိတ် မယ်လုပ်ရော။ ဖြည်းဖြည်းသက် သာ လုပ်ကြပါလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အနည်းအပါး အဟမ်း အဟမ်း ကြေညာချက်တန်းထုတ် လိုက်မှ နည်းနည်းကိုယ်ရှိန်သတ် သွားတာ။ ဒါတွေ အယ်ဒီတာတို့ ဆီ စာရေးခဲ့ပြီးသားမို့ အကျယ် မချဲ့တော့ပါဘူး။
ကဲပါ...ကဲပါ။ ပြောလာတာ တွေကလည်း များပါပြီ။ အရေး ကြီးဆုံးက အဘက်ဘက်က ယို ယွင်းပျက်စီးနေတဲ့ တိုင်းပြည်ကို တည်ဆောက်ဖို့ဟာ တစ်ဆင့်ချင်း လုပ်မှ၊ လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း အများသူငါ လိုက်နာနိုင်တဲ့ နည်း လမ်းလည်းဖြစ်ဦးမှပါ။ နို့မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ စွတ်တင်နေတာ။ ပြည်သူကလည်း မလိုက်နာနိုင်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရှူးကိုယ့်ပတ် ဖြစ်ကုန်မှအခက်။
လုပ်မယ်ဆိုရင် လည်း ရက် ၁၀၀ အတွင်းမှာ အများပြည်သူအတွက် လက်တွေ့ကျပြီး ဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးခံစားရမယ့် အရာမျိုးသာ ရွေးလုပ်သင့်သဗျာ။ ဥပမာ-ပြည်သူတွေကို မီးမှန်မှန်၊ ရေမှန်မှန်လာတာမျိုး၊ ကုန်ဈေး နှုန်းတည်ငြိမ်အောင် လုပ်ပေးတာ မျိုးတွေပေါ့လေ။ ဘယ့်နှယ်။ အခုကျ ကွမ်းယာတဲ့။ အရက်တဲ့။ အဲဒါထက် နည်းနည်း ပိုအရေး ကြီးတဲ့ ဆေးလိပ်ကိစ္စ ပြောသံ မကြားရသေးဘူး။
ဘစီတို့အမြင်ပေါ့လေ အယ်ဒီတာရေ...။ အခုအခါ နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်သမှု ပြုသင့်တာကတော့ဖြင့်ရင် ရွှေပြည်ကြီးမှာ ဒီမိုကရေစီသမားတွေ အာဏာရလာတယ်ဆိုပေတဲ့ အာဏာရှင်နဲ့ယဉ်ပါးနေတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားကြီးကို မောင်းနှင်နေရတာဖြစ်ပါသဗျာ။ သဟာကြောင့်အဟောင်းတွေ မပြောင်းရင် အသစ်တွေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အလကားပဲ။
တကယ်လို့ လုပ်ကြစတမ်းဟေ့ဆိုရင် အနှီယန္တရားအဟောင်းကြီးကို ရက် ၁၀၀ အတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းကို အရင်လုပ်ရမှာ။ မစင်တစ်စက်နဲ့လည်း ပျားရည်ခွက်ဟာ ပျက်တာပဲ မဟုတ်လားဗျာတို့။
By - ဘစီ
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/68279
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, June 23, 2016 No comments: